အောင်ဇော် – ဧရာဝတီ https://burma.irrawaddy.com Covering Burma and Southeast Asia Thu, 15 Apr 2021 05:58:58 +0000 en-US hourly	1	https://wordpress.org/?v=5.3.7 မြန်မာသို့ ရုရှားမှ (လက်နက်ခဲယမ်းများနှင့်အတူ) အချစ်များ https://burma.irrawaddy.com/article/2021/04/01/240204.html Thu, 01 Apr 2021 11:10:14 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=240204
ရေရှည်ပြည်တွင်းစစ် သို့မဟုတ် ကျရှုံး နိုင်ငံဖြစ်သွားနိုင်သည့် လက်ရှိ နိုင်ငံရေးနောက်ခံကားတွင် ဖိုမင်၏ ခရီးစဉ်က အတိတ်နိမိတ် မကောင်းလှပေ။
The post မြန်မာသို့ ရုရှားမှ (လက်နက်ခဲယမ်းများနှင့်အတူ) အချစ်များ appeared first on ဧရာဝတီ.
မြန်မာစစ်ကောင်စီကို အထီးကျန်ထားရန် နိုင်ငံတကာတောင်းဆို့မှုများကို အာခံပြီးနောက် ရုရှား ဒုတိယ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး အလက်ဇန္ဒားဖိုမင်သည် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့က တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားတွင် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် တက်ရောက်သောကြောင့် အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်နှင့် သူ့ကိုယ်သူခန့်အပ်ထားသော နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ရုရှား၏ ယုံကြည်ထောက်ခံမှုအတွက် “နက်ရှိုင်းသော ကျေးဇူးများ”ကို ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ “မိမိတို့သည် ဝေးကွာကြသော်လည်း ရုရှားအစိုးရနှင့် ရုရှားတပ်မတော်အဖွဲအစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများကို ၎င်းတို့၏ မြန်မာစစ်တပ်အပေါ် ချစ်ကြည်ရေးအရ ကြီးမားသော ထောက်ခံမှုအတွက် အသိအမှတ်ပြု မှတ်တမ်းတင်ကြောင်း”လည်း သူက ဆက်လက်ပြီး သတင်းစကားပါးလိုက်သည်။
သူ၏ မိန့်ခွန်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက မြန်မာစစ်တပ်သည် “ဒီမိုကရေစီကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် တနိုင်ငံလုံးနှင့် ပူးပေါင်းရန် ကြိုးစားမည်” ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာပြီး ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပရန် ကတိပေးသည်။ ထိုစကားလုံးများကို သူ ဖတ်ပြနေစဉ်တွင်ပင် စစ်ကောင်စီတပ်များသည် တနိုင်ငံလုံးမှ လက်နက်မဲ့ ဆန္ဒပြသူ ၁၀၀ ကျော်ကို သတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်နေပြီး ထိုနေ့ကို တပ်မတော်နေ့အဖြစ်သာမက စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်မှုအား ဖြိုခွဲရာတွင် လက်ရှိအချိန်အထိ သွေးထွက်သံယို အများဆုံးနေ့အဖြစ်ပါ မှတ်မိနေစေရန် လုပ်ဆောင်နေကြသည်။
ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ခံထားရသော မြန်မာပြည်သူများက စစ်အာဏာသိမ်းတပ်များကို ခုခံနေသော အခြေအနေအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံမှ သံတမန်များက အခြေအနေကို ဖေါ်ပြကြသည်။ တချိန်တည်းတွင် နေပြည်တော်တွင်မူ မော်စကိုမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် စစ်သားချင်း ညီရင်းအကိုပမာ သွေးစည်းချစ်ကြည်မှုနှင့် ထိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က စစ်ကောင်စီကို ထောက်ခံမှုအဖြစ် ပုံဖေါ်နေပြီး စစ်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားသူများနှင့် ပြည့်နှက်နေသည့် အစည်းအဝေးခန်းတခုတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ဖိုမင်ကို တံဆိပ်တခု ချီးမြှင့်တပ်ဆင်ပေးနေပုံနှင့် အားလုံး ပြုံးရွှင်နေကြပုံကိုလည်း သရုပ်ဖော်ထားသည်။ ဖိုမင်အပြင် ရုရှားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် ရုရှားသမ္မတပူတင်၏ အကြံပေးတဦးနှင့် လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ သမ္မတ၏ကောင်စီဥက္ကဌ၊ မော်စကို ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း ဥက္ကဌ၊ အဆင်မြင့်ရုရှားစစ်ဖက်နှင့် အရပ်ဖက်အရာရှိများ၊ ရုရှား မီဒီယာများ ပါဝင်သည်။
စစ်ကောင်စီကို ရုရှားက အကြီးအကျယ်ထောက်ခံခြင်းနှင့် ဖေါ်ပြသည့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအား အမှတ်ရ မှတ်မိနေကြမည်ဖြစ်သည်။ တချိန်တည်းတွင် ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေသော အချက်မှာ သြစတြေးလျှ၊ ကနေဒါ၊ ဂျာမဏီ၊ ဂရိ၊ အီတလီ၊ ဂျပန်၊ ဒိန်းမတ်၊ နယ်သာလန်၊ နယူးဇီလန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတို့မှ စစ်ဦးစီးချုပ်များက တနိုင်ငံလုံးမှ မြန်မာနိုင်ငံသားများကို မြန်မာစစ်တပ်က လူသတ်လက်နက်များ အသုံးပြု အကြမ်းဖက်နေခြင်းကို ရှုတ်ချသည့် ပူးတွဲကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
“မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် လုံခြုံရေးတပ်များက လက်နက်မဲ့ ပြည်သူများကို လူသတ်လက်နက်သုံးခြင်းကို ကာကွယ်ရေးအကြီးအကဲများအနေဖြင့် မိမိတို့ရှုတ်ချသည်”ဟု ထိုကြေညာချက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။ “စစ်တပ်ပီသသော စစ်တပ်တခုသည် နိုင်ငံတကာကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများကို လိုက်နာရန်လိုပြီး ၎င်းတို့တာဝန်သည် ပြည်သူများကို ဒုက္ခမပေးဘဲ ကာကွယ်ရန် ဖြစ်သည်” ဟုလည်း ထိုကြေညာချက်က ဆက်လက်ဖေါ်ပြသည်။
ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်းတို့အပါဝင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများက ၎င်းတို့၏ စစ်သံမှူးများကို တော်လှန်ရေးနေ့ စစ်ရေးပြပွဲသို့ လေ့လာသူအဖြစ် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ (၎င်းတို့တက်ရောက်လာခြင်းကြောင့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်က စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ အထီးကျန်ခြင်းကို ချိုးဖျက်ပေးသော နိုင်ငံတခုမှာ ထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်သည်ကို အမှတ်ရစရာဖြစ်လာသည်။ အာဏာသိမ်းအပြီး ၃ လနီးပါး အကြာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ထိုစဉ်က ထိုင်းစပ်တပ်အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ချာဗာလစ် ယောင်ချိုင်ယုဒ်က မြန်မာန်ိုင်ငံသို့ အဆင့်မြင့်ခရီးစဉ်အနေဖြင့်လာရောက်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပသည့် ညစာစားပွဲတခုတွင် သူက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကို “အကိုကြီး”ဟု မြန်မာလို ခေါ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဗ်ိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံသည် မြန်မာ၏ မိတ်ဆွေစစ် မိတ်ဆွေမှန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသည် အကျိုးအမြတ်များလှသည့် သစ်ထုတ်လုပ်ရေး စာချုပ်များ၊ ငါးဖမ်းခွင့်များနှင့် အကျိုအမြတ်များသည့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းများ ရရှိသွားသည်။ စစ်အာဏာသိမ်းပြီး ဖြိုခွဲမှုများကြောင့် ထိုင်းသို့ထွက်ပြေးလာသည့် ကျောင်းသားတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန်လည်း ချာဗာလစ်က သဘောတူခဲ့သည်။)
မြန်မာနိုင်ငံသည် တနေ့ထက်တနေ့ ဖရိုဖရဲ ပိုမိုဖြစ်လာပြီး ရေရှည်ပြည်တွင်းစစ် သို့မဟုတ် ကျရှုံး နိုင်ငံဖြစ်သွားနိုင်သည့် လက်ရှိ နိုင်ငံရေးနောက်ခံကားတွင် ဖိုမင်၏ ခရီးစဉ်က အတိတ်နိမိတ် မကောင်းလှပေ။
တကမ္ဘာလုံးအနေဖြင့် ပြဿနာရှိသော နေရာတိုင်းအား ရုရှားက ခေါင်းထောင်ကြည့်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရုတ်တရက် ပြဿနာ မီးတောက်လာသောအခါ ကရင်မလင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက အာရုံဝင်စားလာသည်မှာ အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပေ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော အနောက်တိုင်း သံတမန်တဦး၏ စကားအရ “သူတို့ လက်နက်ရောင်းချနေရသမျှ ရုရှားက (မြန်မာနိုင်ငံ တည်ငြိမ်ရေးကိုဖြစ်စေ၊ မြန်မာပြည်သူတွေကိုဖြစ်စေ) ဂရုမစိုက်ဘူး”ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်ပေသည်။
ရုရှားသည် လက်တွေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေး တောင့်တင်းကြံ့ခိုင်ရန် ကြိူးစားသည်ဟု သူ၏ ခရီးစဉ်အတွင်း ဖိုမင်ကပြောကြားခဲ့သည်။ ရုရှားသတင်းဌာန Interfax က ထုတ်ပြန်သည့် ရုရှားကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ကြေညာချက်တွင် “နှစ်ဖက်စလုံးက စစ်ဖက်နယ်ပယ်တွင် အလျှင်အမြန်တိုးတက်နေသော ၎င်းတို့၏ အပြန်အလှန်အကျိုးရှိသည့် ဆက်ဆံရေးကို အပြုသဘော အကဲဖြတ်ကြပြီး သေနင်္ဂဗျူဟာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စိတ်ဓါတ်ဖြင့် စစ်ရေးနှင့်စစ်ဖက်နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပိုမိုနက်ရှ်ိုင်းစေရန် လက်ရှီအလားအလာများကိ အကောင်းဆုံး အသုံးချရန် ထပ်မံအတည်ပြုပြောကြားသည်”ဟု ဖေါ်ပြထားကြောင်း Financial Times သတင်းစာ၏ အဆိုအရ သိရသည်။
အနောက်သံတမန်တဦးက “သူ (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်) နဲ့ သူ့အဖွဲ့က အခြေအနေကို (ဆီးရီးယားခေါင်းဆောင် ဘာရှား အယ်လ်) အာဆတ် မြင်သလိုမြင်နေမှာ ကျနော်စိုးရိမ်တယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အခုချိန်မှာ ကာကွယ်ဖို့ တိုင်းပြည်ကို လွှတ် ဖျက်ဆီးမယ်ပေါ့။ သူတို့ရဲ့ အတ္တတွေနဲ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကာကွယ်ဖို့ သူတို့ခေါင်းထဲမှာ အဲဒီလမ်းတလမ်းပဲရှိတယ်လို့ သူတို့မြင်ကြတယ်” ဟုပြောသည်။
ရုရှား ဒုတိယ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး အလက်ဇန္ဒားဖိုမင်
ထိုသို့သော အခြေအနေကြောင့် တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်နှင့် အမေရိကန် အပါအဝင် အားပြိုင်နေသည့် အင်အားကြီးနိုင်ငံများကို မြန်မာနိုင်ငံ အကျပ်အတည်းတွင်းသို့ ဆွဲသွင်းလိုက်နိုင်သည်ဆိုသည့် ပူပန်မှုများကို ဖြစ်စေသည်။
ကြီးထွားနေသော နိုင်ငံတကာဖိအားနှင့် အနောက်နိုင်ငံ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများကို ရင်ဆိုင်ရသောအခါ စစ်ကောင်စီသည် ရုရှားနှင့်တရုတ်ကဲ့သို့သော အင်အားကြီးနိုင်ငံများထံမှ တရားဝင်ဖြစ်မှုနှင့် ထောက်ခံမှု လိုအပ်သည်။
ရုရှားနှင့် ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က လူသိရှင်ကြား ကြိုဆိုခြင်းအပေါ် ဘေ့ဂျင်းအနေဖြင့် သတိမပြုမိဘဲနေမည် မဟုတ်ပေ။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် တရုတ်၏ ဆက်ဆံမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယခင်ကဖေါ်ပြခဲ့ဖူးသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ရုရှားလက်နက်များ၏ ဖောက်သည်ဖြစ်နေသည်မှာ ကာလကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သောနှစ်က ရုရှားတွင်ပြုလုပ်သည့် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ရုရှားစစ်သင်္ဘောများသည်လည်း မြန်မာဆိပ်ကမ်းအများအပြားသို့ လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ဖူးသည်။
မလေးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် အိန္ဒိယ တို့သည်လည်း ရုရှားထံမှ Su-30s များကို ဝယ်ယူထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံသည် ထိုဘက်စုံသုံး တိုက်လေယာဉ် ပထမဆုံးအသုတ်ကို မကြာမီရရှိတော့မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာစစ်လက်နက်ပစ္စည်း အသုံးစရိတ် အများဆုံးသည် ရုရှားသို့ သွားပြီး စုစုပေါင်းဝယ်ယူမှုတန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၄၅ သန်းရှိကြောင်း သိရကာ အလားတူကာလအတွင်း တရုတ်မှ ဝယ်ယူသည့် ဒေါ်လာ ၁.၄၂ သန်းထက် ပိုမိုများပြားကြောင်း စာရင်းများအရသိရသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ရုရှားစစ်တက္ကသိုလ်များတွင် လေ့ကျင်ရန် အရာရှိများကို စေလွှတ်သည်။ ယခုအချိန်အထိ ထောင်နှင့်ချီသည့် မြန်မာစစ်သင်တန်းသားများသည် ရုရှားမှ ကျော်ကြားသော စစ်တက္ကသိုလ်များမှ ကျောင်းဆင်းပြီး အချို့သည် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းနှင့် ပါရဂူသင်တန်းများကိုပင် တက်ရောက်ကြသည်။ (မြန်မာနိုင်ငံသည် စစ်အရာရှိများကို အိန္ဒိယ၊ တရုတ်၊ ဂျပန်နှင့် အစ္စရေးတို့သို့လည်း စေလွှတ်သည်။)
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဗီယက်နမ်မှလွဲလျှင် အခြားမည်သည့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံထက်မဆို ရုရှားသို့ နိုင်ငံသားများနှင့် စစ်ဗိုလ်များကို ပို့ဆောင်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် လာအို၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှနှင့် အိမ်နီးချင်းလက်နက်ဈေးကွက်များသို့ ဝင်ရောက်ရန် အခြေချသည့်နေရာဖြစ်ကြောင်း ရုရှားစစ်တပ်အကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူ ဗီယာချီဆလက် ဆီလူကိုပြောသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ရုရှားအတွက် သေနင်္ဂဗျူဟာကျသည့် စတင်ထိုးဖေါက်နေသော ဈေးကွက်တခုဖြစ်သည်။
ဖိုမင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းမပြုမီနှင့် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ စစ်အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်မီ ၁၀ ရက်အလို ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည် ရုရှားကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆာဂျေ ရွှိုင်ဂုကို နေပြည်တော်တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
စနေနေ့ နေပြည်တော်တွင် တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြအခမ်းအနားတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်/Snr-Gen Min Aung Hlaing website
မြန်မာစစ်တပ်အကြီးအကဲက သက်တမ်းကြာမြင့်ပြီဖြစ်သော ရုရှားကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်ခဲ့သည်။ “သစ္စာရှိတဲ့ မိတ်ဆွေတယောက်လိုပဲ ရုရှားနိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ခက်ခဲတဲ့ အချိန်တွေမှာ အမြဲတမ်းကူညီခဲ့တယ်၊ အထူးသဖြင့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်အတွင်းမှာ ကူညီခဲ့တယ်”ဟု မြန်မာစစ်တပ်အကြီးအကဲ ပြောကြောင်း ရုရှားမီဒီယာများက ကိုးကားဖေါ်ပြသည်။
ထိုခရီးစဉ်အတွင်း နေပြည်တော်တွင် လုံခြုံရေး အထူးတင်းကျပ်ထားသည်။ ရုရှားကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် လေယာဉ်နှစ်စင်းဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး ခမ်းနားသော ကြယ် ၅ ပွင့် ကမ်ပင်စကီးဟိုတယ်တွင် တည်းခိုကြသည်။ ထိုခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရုရှားက Pantsir-S1 မြေပြင်မှ ဝေဟင်ပစ် ဒုံးကျည်စနစ်များ၊ Orlan-10E မောင်းသူမဲ့ ထောက်လှမ်းရေး လေယာဉ်များနှင့် ရေဒါများ ရောင်းချရန် သဘောတူခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များသည် ရွှိုင်ဂုကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ဂုဏ်ပြုဧည့်ခံရန် အထူးအားထုတ်မှု လုပ်ကြကြောင်း မြန်မာစစ်တပ် သတင်းရင်းမြစ်များက ဆိုသည်။
“ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲဟာ နောက်ထပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ဖို့ အထူးသဖြင့် စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေး မြှင့်တင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတရပ်လို့ မြင်ပါတယ်” ဟု ရွှိုင်ဂုက မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ကိုပြောသည်။
မော်စကိုသည် နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဌာနများအကြား ဆက်ဆံရေး ပိုမိုနက်ရှိုင်းအောင် လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် စစ်ဖက်နည်းပညာနယ်ပယ်တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် အသင့်ရှိကြောင်း ထိုခရီးစဉ်အတွင်း သူပြောသည်။
ထိုခရီးစဉ်ကြောင့် ယခင်ကပင်ရင်းနှီးပြီးဖြစ်သော ရွှိုင်ဂုနှင့် ရုရှားသို့ ၆ ကြိမ်သွားရောက်လည်ပတ်ပြီးဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အကြား ဆက်ဆံရေးသည် ပိုမိုခိုင်မာလာသည်။ ထို့ကြောင့် ရုရှားသည် မြန်မာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ကြိုတင်သိရှိ ထောက်ခခဲ့သည်ဟု သံတမန်များနှင့် လေ့လာသူအများအပြားပြောသည်။
နိုဝင်ဘာလ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ၅ လအလို လွန်ခဲ့သော နှစ် ဇွန်လက မော်စကိုသို့ သွားရောက်လည်ပတ်စဉ် ရုရှား မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ဗ်ိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က နိုင်ငံရေးလောကသို့ ဝင်ရောက်ရန် သူ၏ ဆန္ဒကို အရိပ်အမြွက်ပြောသော်လည်း ထိုရည်မှန်းချက် အောင်မြင်စေရန်လမ်းကြောင်းမှာ အာဏာသိမ်းခြင်းဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို တစွန်းတစ ပြောကြားခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် ရုရှား ဒုတိယ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး အလက်ဇန္ဒားဖိုမင် တွေ့ဆုံစဉ်/ Global New Light of Myanmar
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး ၁၉၄၅ ခုနှစ်က နာဇီဂျာမဏီကို ချေျမှုန်းခဲ့သည့် ၇၅ ကြိမ်မြောက် ရုရှား အောင်ပွဲနေ့တက်ရောက်ရန် မော်စကိုသို့ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရုရှားသတင်းဌာနတခုဖြစ်သော Arguments and Facts နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ်က လာမည့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် သူ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းသောအခါ သူက သူ၏ ဦးစားပေးမှာ ယခင်ရွေးကောက်ပွဲများကကဲ့သို့ လွတ်လပ်မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စေရေး ကူညီရန် ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များကို ကြေညာပြီးသောအခါတွင်လည်း နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အခြားအုပ်စုများနှင့် ပြည်သူ့ဆန္ဒကို အခြေခံကာ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်မည်ဟု သူပြောကြောင်း သူ၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် တင်ထားသည့် ထိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း မြန်မာဘာသာမူအရ သိရသည်။
မြန်မာစစ်တပ်အကြီးအကဲက သူသည် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးရာများတွင် နှစ်ပေါင်း ၄၀ အတွေ့အကြုံရှိကြောင်း ပြောသည်။ ထိုကာလအတွင်း သူသည် နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူအကျိုးကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်းပြောပြီး လိုအပ်သည့် မည်သည့်အခန်းကဏ္ဍမှမဆို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။
“ဒီအတွေ့အကြုံတွေက နိုင်ငံအကျိုး ပြည်သူအကျိုးဆောင်ရာမှာ အဖိုးတန်မယ်လို့ကျနော်ထင်တယ်” ဟုလည်း သူပြောသည်။
ရုရှားနှင့်မြန်မာတို့ ဆက်ဆံရေး ထူထောင်သည်မှာ ၁၉၄၈ ခုနှစ်ကဖြစ်ပြီး နောင် ၃ နှစ်ကြာသောအခါ နှစ်နိုင်ငံတွင် သံရုံးများ အပြန်အလှန်ဖွင့်ကြသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ရိုဟင်ဂျာအကျပ်အတည်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက ဆုံးဖြတ်ချက်သောအခါ တရုတ်နှင့်အတူ ရုရှားကလည်း ကန့်ကွက်သည်။ လွန်ခဲ့သောလ အာဏာသိမ်းမှုအပြီးတွင် မော်စကိုသည် တရုတ်နှင့်ပူပေါင်းပြီး စစ်ကောင်စီကို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ထောက်ခံသည်။ အနာဂတ်တွင် လက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ပင်မှုပြုလုပ်ရန် ကုလသမဂ္ဂက ကြိုးစားသောအခါ ရုရှားသည် ယခင်က လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အတိုင်း ဗီတိုအာဏာဖြင့် ပယ်ချနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ရုရှားသမ္မတအကြံပေးနှင့် ရုရှားသတင်းဌာနတို့အား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ်/ Global New Light of Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံသည် ရုရှားနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းမဟုတ်ပေ။ မော်စကိုက မြန်မာနိုင်ငံကို စိတ်ဝင်စားခြင်းမှာ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ ရောင်းချရန်ဖြစ်ပြီး တစုံတရာသော ပထဝီသေနင်္ဂဗျူဟာ လိုအပ်ချက်ဖိအားပေးရန်ထက် အနောက်တိုင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ခုခံရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဝေးကွာသော ပဋိပက္ခဇုန်များတွင် ရင်းမြစ်များဖြန့်ကျက်ခြင်းကို နှစ်ခြိုက်သော ရုရှားသည် အမြဲလိုလိုငွေမာ လိုအပ်နေသည်။
သို့သော်မြန်မာနိုင်ငံသည် ကျရှုံး နိုင်ငံတခုဖြစ်လာပါက တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် အခြားန်ိုင်ငံများ ခံစားရသော်လည်း ရုရှားသည် ခံစားရမည်မဟုတ်ပေ။ လက်တွေ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် သူ၏စစ်ကောင်စီကို ရုရှားကထောက်ခံခြင်းသည် ၎င်းတို့အာဏာ ဆက်လက်ရစေရန် လုံလောက်ခြင်း ရှိမရှိကိုပင် ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရဦးမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မဟာမိတ်အဖြစ် ယူဆရသော တရုတ်သည် ထိုအခြေအနေတွင် မည့်သည့်နေရာမှ ပါဝင်မည်နည်း။
စစ်ကောင်စီကို ဘေ့ဂျင်းကထောက်ခံနေသည်ဟု မြန်မာပြည်သူများက ယူဆပြီး မြန်မာပြည်သူများက တရုတ်အပေါ် မကျေနပ်မှု ပြင်းထန်နေချိန် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ် ချန်ဟိုင်က မြန်မာနိုင်ငံမှ လက်ရှိအခြေအနေသည် တရုတ်နိုင်ငံက လိုလားသော အခြေအနေလုံးဝမဟုတ်ကြောင်း ပြောသည်။
မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံက အချက် ၃ ချက်ပါသော ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်သည်။ ပထမအချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းသိမ်းကာ သဘောထားကွဲလွဲမှုများကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ဥပဒေမူဘောင်အတွင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းပြီး ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ လတ်တလောဦးစားပေးမှာ နောက်ထပ်သွေးထွက်သံယိုမှုများနှင့် ပဋိပက္ခများ အဆုံးသတ်ပြီး အခြေနေကို အမြန်ဆုံး ဖြေလျှော့ ငြိမ်သက်အောင် လုပ်ဆောင်ရေးဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဝမ်ယိက တရုတ်နိုင်ငံ နှစ်ပတ်လည် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်၏ သီးခြားသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။ သို့သော် ထိုအချိန်မှစတင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် သွေးထွက်သံယိုမှု ပိုမိုများပြားလာသည်။
သူပြောသည့် ဒုတိယအချက်မှာ တရုတ်သည် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း ASEAN က ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်မစွက်ဖက်သည့် မူကို ဆုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အားလုံးသဘောတူညီမှုဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်း၊ ASEAN နည်းဖြင့် ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် တူညီသော အခြေခံများ ရှာဖွေခြင်းကို ထောက်ခံသည် ဆိုသည့် အချက်ဖြစ်သည်။
သို့သော် အင်အားချိနဲ့လှသော ASEAN သည် မြန်မာအကျပ်အတည်းအပေါ် သြဇာသက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိပေ။ လက်တွေ့တွင် တရုတ်တနိုင်ငံတည်းသည်သာ နေပြည်တော်သို့ ကျယ်လောင်ရှင်းလင်းသော သတင်းစကားပြောကြားနိုင်သည့် အဓိကနိုင်ငံတခုဖြစ်နေသည်။
တတိယအချက်ကိုပြောကြားရာတွင် ဝမ် က တရုတ်နှင့်မြန်မာတို့သည် တူညီသော အနာဂတ်ကို ခွဲဝေပိုင်ဆိုင်သောကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် တရုတ်-မြန်မာဆက်ဆံရေး တိုးတက်ရေး ကတိကဝတ်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရာတွင် တုံ့ဆိုင်းမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် အခြေအနေမည်သို့ ဖြစ်နေသည်ဖြစ်စေ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးတက်ရေး လမ်းကြောင်းမှ သွေဖီမည်မဟုတ်ကြောင်းပြောသည်။
“ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးပါတီ အမျိုးမျိုးနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးကို ကျနော်တို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်” ဟု ဝမ် ပြောသည်။
ထိုစကားသည် ဗိုလ်ချုပ်များ ကြားလိုသည့် ရှင်းလင်းလှသော သတင်းစကား မဟုတ်ပေ။
ရုရှားနိုင်ငံ၏ ထောက်ခံမှုကို ရရှိခြင်းဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာပြည်သူများနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ကြောက်စရာကောင်းသည့် သတင်းစကားကို ပေးပို့လိုက်ရုံသာမက သူ၏ စစ်ကောင်စီအတွက် အကျိုးအမြတ် အများဆုံးရအောင် အဓိကအင်အားကြီးန်ိုင်ငံများကို အသုံးချရေး ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်အောင်လည်း လုပ်နိုင်ပေသည်။
(ဧရာဝတီ အင်္ဂလိပ်ပိုင်းပါ Aung Zaw ၏ From Russia With Love (and More Ammunition) for Myanmar ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
]]> မြန်မာစစ်တပ် အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှု မည်သို့ ကျဆုံးသွားနိုင်သနည်း https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2021/03/07/239094.html Sun, 07 Mar 2021 06:52:50 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=239094
အာဏာသိမ်းမှုကို ရပ်တန့်ပစ်ရန် မည်သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း။
The post မြန်မာစစ်တပ် အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှု မည်သို့ ကျဆုံးသွားနိုင်သနည်း appeared first on ဧရာဝတီ.
လွန်ခဲ့သောတလကျော်က စစ်အစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်အာဏာသိမ်းပြီး ယခုအခါ လမ်းများတွင် သွေးချောင်းစီးနေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် လူငယ်များနှင့် ဂျန်နရေးရှင်း Z မျိုးဆက်များ လမ်းမများတွင် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သည်ကို မြင်ရသည်မှာ အားတက်ဖွယ်ကောင်းလှသည်။ ရုတ်တရက် ဖြစ်ပေါ်လာသော်လည်း တောင့်တင်းကြံ့ခိုင်လှသည့် နိုင်ငံတဝန်း အုံကြွမှုသည် နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် ဖြိုခွဲမှုများ ရှိသည့်ကြားမှပင် အရှိန်အဟုန် ရလာသကဲ့သို့ လူမှုအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုသည်လည်း အားကောင်းလှသည်။
ထိုဖြစ်စဉ်သည် စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်သော်လည်း ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့် ဆန့်ကျင်မှုသည် ထိုအာဏာသ်ိမ်းမှုကို ကျဆုံးစေနိုင်သည်ဆိုသည့် မျှော်လင့်ချက်ရှိနေသည်။ ယခုတိုက်နေရသည့် တိုက်ပွဲသည် ရေရှည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီး အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးစားမှုသည် အောင်မြင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ထို့ကြောင့် အာဏာသိမ်းမှုကို ရပ်တန့်ပစ်ရန် မိမိတို့ မည်သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း။
တကမ္ဘာလုံးက မြန်မာနိုင်ငံကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေကြသည်။ အနှစ်သာရမရှိသော စကားလုံးများကို မကြားလိုတော့ကြောင်း ဖိနှိပ်သော စစ်အစိုးရများ၏ အမှောင်ခေတ်တွင် နေထိုင်ခဲ့ဖူးသော မြန်မာပြည်သူများ ပြောကြားသည်။ “စိတ်မပူပါနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ၊ ကျနော်တို့ ခင်များနဲ့အတူ ရပ်တည်ပေးနေပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်တွင် ကျော်ကြားလှသော ကာတွန်းဆရာက ကာတွန်းရေးသားလှောင်ပြောင်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ရန်ကုန်မြို့လည်တွင် စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြကြစဉ်/ဧရာဝတီ
အကြမ်းဖက်မှုကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် ပြည်သူ့ဆန္ဒကို လေးစားရန် ဒေသတွင်းမှ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများက စစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းသည်။ ထိုသတင်းစကားကို မြန်မာနိုင်ငံက အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်နေသည့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (ASEAN) နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများက အင်္ဂါနေ့တွင် ကျင်းပသည့် အလွတ်သဘောအစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရက ခန့်ထားသည့် ထိပ်တန်းသံတမန် ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်သည် ထိုအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
“ ဖြစ်နိုင်သမျှ ဘယ်နေရာမှာမဆို ASEAN ကဆက်လက် ထိတွေ့ ဆက်ဆံ ကူညီပြီး အပြုသဘောဆောင်ရွက်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာရဲ့အဖြေက မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲ ရှိနေတယ်” ဟု စင်္ကာပူနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဗီဗီယန် ဘာလာခရစ်ရှ်နန်က ထိုအစည်းအဝေးအပြီးတွင် သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။
“ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲ လက်တွေ့ကျတဲ့အဖြေရဖို့ တခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ပေါ်ပေါက်လာဖို့ပဲဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့်တော့ ကျနော်တို့က သမ္မတဦးဝင်းမြင့်၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အခြား နိုင်ငံရေးအရ ဖမ်းဆီးထားသူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတယ်” ဟုလည်း သူပြောသည်။
စစ်တပ်ကို မြန်မာအစိုးရအဖြစ် စင်္ကာပူက အသိအမှတ်မပြုကြောင်း ဘာလာခရစ်ရှ်နန်က အလေးထားပြောကြားသွားသည်။
“ကျနော်တို့က စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို မြန်မာအစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ် မပြုရသေးပါဘူး” ဟု သူပြောသည်။ “ဒါပေမယ့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအရ စစ်တပ်ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးရဲ့ မဏ္ဍိုင်အဖွဲ့အစည်းတခုဆိုတဲ့ အထူးအခန်းကဏ္ဍကို ကျနော်တို့ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်” ဟုလည်း သူပြောသည်။
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ရက်နို မာဆူဒီကလည်း ” မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒ၊ အကျိုးစီးပွားနဲ့ အသံကို လေးစားရမယ်ဆိုတာကို အင်ဒိုနီးရှားက အလေးထားပြောကြားပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသည် လွန်ခဲ့သောအပတ်က ဘန်ကောက်သို့ သွားပြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်၊ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးတို့နှင့်အတူ ထိုင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
မြန်မာနှင့် နယ်နိမိတ် ၂၄၀၀ ကီလိုမီတာကျော် ဆက်စပ်နေသည့် အနီးဆုံး အိမ်နီးချင်းဖြစ်သော ထိုင်းနိုင်ငံသည် ကြီးထွားနေသော မတည်ငြိမ်မှုများနှင်ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်နေသည်။ ဒေသတွင်းတွင် ဆန္ဒပြပွဲများနှင့် Milk Tea Alliance မဟာမိတ်များ ကူးစက်လာခြင်းနှင့် နယ်စပ်မှ ဒုက္ခသည်များနှင့် နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ အလုံးအရင်းနှင့် ဝင်ရောက်လာမည်ကို ထိုင်းအရာရှိများက စိုးရိမ်နေပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ကြီးထွားနေသော လူမှုအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု (CDM ) ကို အထိတ်တလန့် စောင့်ကြည့်နေသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း အင်ဒိုနီးရှားသံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြကြစဉ်/ဧရာဝတီ
မြန်မာဗိုလ်ချုပ်များသည် ၎င်းတို့လိုလားသော တရားဝင်မှုအတွက် လွန်စွာ လိုအပ်နေသော အကူအညီများပေးနိုင်သော စိတ်တူသဘောတူ အိမ်နီချင်းများကို အားကိုးနေကြသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ အကျပ်အတည်းသည် ASEAN ၏ အကျပ်အတည်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားစီးပွားထက် ကျော်လွန်နေသည်။
ဒေသတွင်းအုပ်စုသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများ မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာပြည်သူများ သိသည်။ အများအပြားမှာ ဒီမိုကရေစီတပ်ိုင်း အာဏာရှင်တပိုင်း အစိုးရများသာ ဖြစ်သည်။
လမ်းမများပေါ်သို့ ထွက်လာသော မြန်မာလူငယ်များသည် ASEAN ကို အထင်ကြီးခြင်း မရှိပေ။ ၎င်းတို့သည် စကားဖြင့်သာ ကူညီနေသည်ဟု ၎င်းတို့ထင်သည့် ASEAN ၊ တရုတ်၊ ဂျပန်နှင့် နိုင်ငံအများအပြားနှင့် အစိုးရအများအပြား ကိုလှောင်ပြောင်ကြသည်။
လွန်ခဲ့သောလတွင် မြန်မာလူငယ်များသည် ထိုင်း၊ စင်္ကာပူ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂျပန်နှင့်တရုတ် သံရုံးများရှေ့တွင် ဆန္ဒပြပွဲအများအပြားကျင်းပပြီး စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို မထောက်ခံရန် ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုလူငယ်များသည် မူလအခြေအနေကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန် သို့မဟုတ် တရားဝင် ရွေးကောက်သော အစိုးရကို အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် စစ်အာဏာသိမ်းမှုမှ ကင်းလွတ်သော ကြားဝင်စွက်ဖက်မှု ပုံစံတမျိုးမျိုးကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။
အမေရိကန်သံရုံးရှေ့မှ အချို့သော ဆိုင်းဘုတ်များက အမေရိကန်တပ်များ ဝင်ရောက်လာရန် သို့မဟုတ် ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းမှုတပ်များစေလွှတ်ရန် တောင်းဆိုနေသည်။ လက်တွေ့တွင်မူ ထိုသို့မဖြစ်နိုင်ပေ။ မည်သည့် ပြည်ပတပ်မျှ မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်ပေ။
အိမ်နီးချင်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂနှင့် အနောက်နိုင်ငံများထံမှ ခိုင်မာသော အရေးယူမှုများကို စောင့်ဆိုင်းရင်း စကားလုံးများ၏ အရေးပါပုံကိုလည်း မြန်မာပြည်သူများက သိသည်။ ၎င်းတို့သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ သဘောထား သို့မဟုတ် စစ်တပ်ကို အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုသော စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ ရပ်တည်ချက်ကို နားလည်နိုင်ကြသည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖရိုဖရဲဖြစ်လာသောအခါ သနားစရာကောင်းပြီး အရေးမပါလှသော ASEAN သည် ထိုခိုက်ပွန်းပဲ့ရပြန်သည်။ လူငယ်များနှင့် CDM လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်သူများက ASEAN ကို ဖာဆီယမ် ဟု ခေါ်သည်။ ဖာ ဆိုသော မြန်မာစကားသည် ပြည့်တန်ဆာဟု အဓိပ္ပါယ်ရသလို ဖာထေးသည်ဟုလည်း အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ထိုသို့သော လုပ်ရပ်ကို တရုတ်ကဲ့သို့ပင် ASEAN ကလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ယခင် စစ်အစိုးရများကို အကာအကွယ်ပေးခဲ့ကြသည်။
စစ်အစိုးရအတွင်းမှ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် စီးပွားရေး အပေါင်းအပါများအတွက် အမေရိကန်၏ နောက်ထပ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ လာနေပြီဟု ယူဆရသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း တရုတ် သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြကြစဉ်/ဧရာဝတီ
ဒေသတွင်းမှ စိတ်တူကိုယ်တူ နိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဘိုင်ဒင်အစိုးရက ကြေညာထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးမားဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသော နိုင်ငံဖြစ်သည့် စင်္ကာပူသည် ထိုနည်းလမ်းတွင် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့သောရှုပ်ထွေးလှသည့်ဆက်စပ်မှုများတွင် ဂျပန်နိုင်ငံသည်လည်း အခန်းကဏ္ဍတခုမှ ပါဝင်နိုင်သည်။ တိုကျိုသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကြီးမားဆုံး အလှူရှင်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်နှင့် နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ သေနင်္ဂဗျူဟာကျသော စီမံကိန်းအများအပြားတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံတွင် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ချိန်ညှိပေးသော နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုလည်း မြင်ကြသည်။ ပိုမိုအရေးကြီးသည်မှာ ဂျပန်သည် အတိတ်က မြန်မာစစ်တပ်ကို လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံအကြား ထိုသမိုင်းကြောင့် ဆက်ဆံရေး ခိုင်မာနေခြင်းဖြစ်သည်။
အာဏာသိမ်း ဗ်ိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံမှ နိပွန်ဖေါင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ ရိုဟေး ဆာဆာကာဝါနှင့်လည်း ရင်းနှီးသူဖြစ်သည်။ သူသည် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ဂျပန်အစိုးရ၏ အထူးသံတမန်လည်းဖြစ်သည်။
ဗ်ိုလ်ချုပ်မှူးကြီသည် အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ဆာဆာကာဝါနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း တခု ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟု ယူဆရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အနေအထားမှာမူ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ကို့ရို့ကားယားဖြစ်နေသည်။
ရန်ကုန်ရှိ တရုတ်သံရုံးရှေ့တွင် တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲအများအပြား ဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက် တရုတ်သံအမတ်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေသည် တရုတ်နိုင်ငံက တွေ့မြင်လိုသည့် အခြေအနေ လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း ပြည်တွင်းမီဒီယာများကို ပြောသည်။ အစောပိုင်းက တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာအာဏာသိမ်းမှုကို ရာထူးအပြောင်းအလဲ ကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်ခြင်းဟုသာ ခေါ်သောကြောင့် မြန်မာပြည်သူများအကြား ဒေါသပေါက်ကွဲကြရသည်။
စစ်တပ်အပေါ် အမေရိကန်နှင့် မဟာမိတ်များက ပိုမိုပြင်းထန်စွာ ရပ်တည်လာလျှင် တရုတ်နိုင်ငံက မည်သို့သဘောထားမည်နည်း။
မြန်မာပြည်သူများ၏ လေးစားမှုကို ပြန်လည်ရရှိရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ရေရှည်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အကျပ်အတည်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘေ့ဂျင်း၏ ရှင်းလင်းလှသော ရပ်တည်ချက်တခု လိုအပ်သည်။ (လွန်ခဲ့သော ရက်အနည်းငယ်က ဘန်ကောက်ပို့စ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားသည်ဆိုသည့် သတင်းသည် မမှန်ပေ။)
လွန်ခဲ့သောအပတ်က ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ် ဦးကျော်မိုးထွန်းက မြန်မာနိုင်ငံမှ စစ်အာဏာသိမ်းမှု ချက်ခြင်းရပ်ရန်၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကို ဖိနှိပ်မှု ရပ်ရန်၊ နိုင်ငံတော်အာဏာကို ပြည်သူများထံ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်နှင့် ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းအနေဖြင့် တတ်နိုင်သမျှ အပြင်းထန်ဆုံးအရေးယူမှုကို တောင်းဆိုသော မိန့်ခွန်းတခုပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုသို့တောင်းဆိုလိုက်ခြင်းကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် အခြားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများက နောက်ထပ်အရေးယူမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
ထို ကုလသမဂ္ဂသံအမတ်ကို စစ်တပ်က ရာထူးမှ ဖြုတ်ချပြီး နယူးယောက်ရှိ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာဒုတိယ သံအမတ် ဦးတင်မောင်နိုင်ကို သံအမတ်ရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ပေးလိုက်သော်လည်း ရာထူးမှ နုတ်ထွက်သွားသည်။
စစ်တပ်ကခန့်အပ်သည့် သံအမတ်ကို လက်ခံမည် မခံမည်ကို ကုလသမဂ္ဂက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားခြင်း မရှိပေ။
ဦးတင်မောင်နိုင်ကို ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာ အမြဲတမ်း ယာယီကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ခန့်အပ်သည့် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနစာကို လက်ခံရရှိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက အင်္ဂါနေ့တွင်ပြောသည်။
မြန်မာသံအမတ်၏ မိန့်ခွန်းကြောင့် လွန်စွာ စိတ်ထိခိုက်ရကြောင်း ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်သစ် လင်ဒါ သောမတ်စ် ဂရင်းဖီးလ်က ပြောကြားပြီး သူ့ကို ရဲရင့်မှုနှင့် ပြည်သူလူထုအပေါ်ထားသော စာနာမှုအတွက် ချီးကျူးခဲ့သည်။
စစ်တပ်ကို သံတမန်ရေးအရ အကာအကွယ်ပေးလိုသော အာရှသံတမန်တချို့က ဦးကျော်မိုးထွန်း၏ မိန့်ခွန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေးတွင် “ရှုပ်ထွေးသော ကိစ္စများ” ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ လက်တွေ့တွင်မူ မည်သူက ပြဿနာကို ဦးစွာရှုပ်ထွေးစေသည်ကို ၎င်းတို့မမြင်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် နယူးယောက်တွင် ကုလသမဂ္ဂနှင့် အသစ်တဖန် ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းကို အသုံးပြုရန် ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းနှင့် စစ်တပ်၏ လုပ်ရပ်များ ရုတ်သိမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသော အစိုးရကို ပြန်လည်အစားထိုးရေးအတွက် န်ိုင်ငံတကာနည်းလမ်းအရ လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သောမတ်စ် ဂရင်းဖီးလ်ကပြောသည်။
ကုလသမဂ္ဂတွင် ရှင်းလင်းတင်ပြရာတွင် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးသံတမန် ခရစ္စတင်း ရှရနာ ဘာဂနာက သံတမန်များကို “နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းအနေနဲ့ ဒီစစ်တပ်ကို တရားဝင်မှု၊ အသိအမှတ်ပြုမှုတွေ မပေးဖို့ အရေးကြီးတယ်” ဟုပြောသည်။
လူပုဂ္ဂိုလ်များကို ရည်ရွယ်သော အမေရိကန်၏ နောက်ထပ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ လာနေပြီဟု ဆိုသည်။ အတိတ်ကအတိုင်းပင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတခုမှ ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ယခင်က ကာကွယ်ရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနများတွင် ရာထူးအများအပြားတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဒဲရက်မစ်ချယ်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာစစ်တပ်ကျောထောက်နောက်ခံပြုအစိုးရနှင့် ပတ်သက်သည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ပြန်လည်အားဖြည့်ရန် မြန်မာဆိုင်ရာ အထူးသံတမန်အဖြစ် ခန့်အပ်သည်။
အစောပိုင်းက ထိုစဉ်က လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကက် ကမ့်ဘဲလ်သည် ဆက်ဆံရေး တိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရအပြင် ထိုစဉ်က အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရများကိုပါ ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတာ မအောင်မြင်သေးဘူး (ရုပ်/သံ)
မူဝါဒများကို ပြန်လည်သုံးသပ် လမ်းကြောင်းပြောင်းလ်ိုက်ပြီးနောက် စစ်အစိုးရနှင့် အဆင့်မြင့်အရာရှိချင်းဆက်ဆံရေးပြုလုပ်ခြင်းသည် အိုဘားမားအစိုးရ၏ မူဝါဒ အစိတ်အပ်ိုင်းတခုဖြစ်သည်။ ထောက်ခံသူများက ထိုမူဝါဒသည် အဓိကကျသော ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဖြစ်သည်ဟု ပြောကြပြီး ဝေဖန်သူများကမူ လမ်းလွဲပြီး မအောင်မြင်သော မူဝါဒအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ မည်သို့ ဆိုစေကာမူ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့် အထူးသံတမန်တဦး ခန့်အပ်ရန် သိုမဟုတ် ဂျပန်၊ အိန္ဒိယ (Quad အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည်) နှင့် တောင်ကိုရီးယားအပါအဝင် အဓိက မဟာမိတ်များနှင့် ဆွေးနွေးရန် က်ိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တဖွဲ့စေလွှတ်သင့်သည်ကို သံသယဖြစ်ရန် မလိုပေ။ စင်္ကာပူနှင့် အင်ဒိုနီးရှားတို့သည်လည်း မြန်မာအကျပ်အတည်းတွင် အဓိက မိတ်ဘက် နိုင်ငံများဖြစ်နိုင်ပေသည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်ထော်နီ ဘလင်ကန်က တွစ်တာတွင် “ကျနော်တို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ရဲရင့်တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အခ်ိုင်အမာရပ်တည်ပြီး မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကို ထောက်ခံဖို့ တစည်းတလုံးတည်းပြောကြဖို့ နိုင်ငံအားလုံးကို တိုက်တွန်းပါတယ်” ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
ကမ့်ဘဲလ်ကို အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အင်ဒိုပိစိဖိတ်ရေးရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူးအဖြစ် ခန့်အပ်ထားခြင်းသည် ဘိုင်ဒင်၏ ထိုဒေသကို ပိုမိုအာရုံစိုက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် တရုတ်ကို တန်ပြန်ရန် မဟာမိတ်အားလုံးနှင့် ဆက်ဆံရေး ခိုင်မာရေးတို့ကို ပြသနေသောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ အကျပ်အတည်းသည် ဘိုင်ဒင်အစိုးရအတွက် ဒေသတွင်းမှ မဟာမိတ်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် အခွင့်အလမ်းများကိုလည်း ပေးသည်။
မြန်မာစစ်တပ်ကို တရားဝင်ခွင့် မပေးရန် အရေးကြီးသည်။ ကမ္ဘာတဝန်း အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှုများသည် အောင်မြင်မှုများ ရှိသလို အချို့မှာ ကျဆုံးကြကြောင်း မိမိတို့တွေ့မြင်ပြီး ဖြစ်ပေသည်။
(ဧရာဝတီ အယ်ဒီတာချုပ် အောင်ဇော် အင်္ဂလိပ်ပိုင်းတွင် ရေးသားထားသော How Can the Myanmar Military’s Attempted Coup Fail? ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
]]> ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ဘယ်လိုတွက်ကိန်းလွဲသွားလဲ https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2021/02/17/238214.html Wed, 17 Feb 2021 11:29:32 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=238214
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက တိုက်ပွဲသည် စစ်တပ်နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အကြား တိုက်ပွဲသာဖြစ်သည်ဟု ထင်မှတ်မှားခဲ့သည်။
The post ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ဘယ်လိုတွက်ကိန်းလွဲသွားလဲ appeared first on ဧရာဝတီ.
တနင်္ဂနွေနေ့က မြန်မာနိုင်ငံမြို့ကြီးများတွင် တပ်သားများကို ပိုမို ဖြန့်ချကာ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့်နေပြည်တော် လမ်းမများတွင် သံချပ်ကာယာဉ်များလှည့်နေချိန် အဓိကကျသည့် ဖြိုခွင်းမှုတခုက မြန်မာနိုင်ငံကို မျက်နှာမူလာသည်။ နံနက် ၁ နာရီတွင် အင်တာနက်ကို ဖြတ်တောက်လိုက်သောအခါ သတင်းထောက်များသည် ၎င်းတို့၏ ကိရိယာများနှင့် ကင်မရာများကို ပြင်ဆင်ပြီး ရှောင်လွှဲမရသည်ကို ရင်ဆိုင်ရန် ပြင်ဆင်ရသည်။ မိတ်ဆွေတယောက်က စာတိုတစောင် ပေးပို့လာသည်။ “ဖုန်းထဲက အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေ ဖျက်ထား” ဟု ထိုမိတ်ဆွေကပြောသည်။ အခြားလုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တယောက်ကလည်း ဖုန်းဆက်ပြီး “မီးတွေပျက်နေပြီ” ဟု တီးတိုးပြောသည်။
နံနက် ၄ နာရီထိုးသောအခါ ဖမ်းဆီးဖြိုခွဲမှုသတင်း မထွက်လာသေးသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ် မြို့တော် မြစ်ကြီးနားတွင် သတင်းထောက် ၅ ဦးနှင့် ဒေသခံ ၂ ဦး ဖမ်းဆီးခံရကြောင်း သတင်းရသည်။ ၎င်းတို့ကို တနင်္လာနေ့တွင် ပြန်လွှတ်ပေးသည်။ နံနက်ခင်းရောက်သောအခါ လူမှုအာဏာဖီဆန်ရေး လှုပ်ရှားမှုသည် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတွင်သာမက နိုင်ငံ၏ မြို့တော် နေပြည်တော်ရှိ လမ်းများတွင်ပါ လျှံကျလာပြီး တချိန်က ဆန္ဒပြပွဲများမဖြစ်နိုင်အောင် စီစဉ်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည့် နေပြည်တော်တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူများနှင့် လုံခြုံရေးတပ်များ ပြည့်နှက်နေသည်။
အတိတ်က လူထုအုံကြွမှုများကို ဖြတ်သန်းကြီးပြင်းခဲ့သော မိမိတို့သည် နိုင်ငံတဝှမ်း အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု၏ ကံကြမ္မာက ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်သည်ဆိုသည့် အချက်ကို မမြင်ဘဲနေရန် ခက်ခဲလှသည်။ မိမိတို့ အတွေး၌ အတိတ်သည် ပြန်ပေါ်လာပြီး စစ်တပ်၏ ဒေါသနှင့် သတ်ဖြတ်မှုများဖြင့် အဆုံးသတ်သွားခဲ့သော ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခြင်းများနှင့် အုံကြွမှုများ ပြန်လည် သက်ဝင်လာသည်။
လက်နက်ကိုင်တပ်မတော်သည် စိတ်မရှည်တော့ကြောင်း မိမိတို့ တွေ့နေရသော်လည်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေသည့် စမတ်ဖုန်းများ ရှေ့တွင် သွေးထွက်သံယိုဖြစ်ရန် ခက်ခဲလှပေသည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်က အာဏာသိမ်းမှု နောက်ပိုင်းမှစတင်ပြီး လုံခြုံရေးတပ်များ၏ ဥပဒေနှင့်မညီသော ဖမ်းဆီးမှု တိုက်ခ်ိုက်မှုများကို နိုင်ငံသားများက ပြန်လည်ဆန့်ကျင်သည့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအများအပြားကို လူမှုကွန်ရက်တွင် တွေ့ကြရသည်။ ယခင်ကကဲ့သို့ သွေးထွက်သံယို တိုက်ခိုက်မှုတခုလုပ်လျှင် စစ်တပ်သည် ကိုယ့်သချိုင်းကိုယ်တူးခြင်းနှင့်သာ တူသည်။
သို့သော် ဤနောက်ဆုံး ထိပ်တိုက်တွေ့မှုက မည်သို့အဆုံးသတ်မည်ကို စိတ်ကူးပုံဖေါ်ကြည့်လျှင်ပင် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလှသည်။ ရထားနှစ်စင်း ခေါင်းချင်းယှဥ်တိုက် နေသည်ကို အနှေးပြကွက်ဖြင့်ကြည့်နေရသလို ခံစားရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ငြိမ်းချမ်းသော ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ နိုဝင်ဘာလက လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တဦး မိမိထံဖုန်းဆက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ် မည်သို့ရှိသည်ကို ဖေါ်ပြသော သတင်းစကားတစောင်ပေးပို့သည်။ ထို သတင်းစကားတွင် ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလ အကြမ်းဖက်မှုကို ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားပြီး စစ်တပ်ကကြားဝင်ကာ အာဏာသိမ်းမည့် အခင်းအကျင်းကို ဖေါ်ပြထားသည်။ ထိုစဉ်က စာရေးသူသည် သူ၏သုံးသပ်ချက်ကို ပယ်ချသော်လည်း စိတ်အတွင်းတွင်မူ အတိတ်နိမိတ်မကောင်းသော လက္ခဏာများ ရှိနေသည်ကို သိနေသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး NLD အစိုးရနှင့် စစ်တပ်အကြား နောက်ဆုံး ညှိနှိုင်းမှု မအောင်မြင်ကြောင်း သိရပြီးနောက်ပိုင်း မိမိတို့သည် အမှောင်လှိုဏ်ခေါင်းသို့ ပြန်သွားနေကြောင်း စာရေးသူ သိလိုက်ရသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမှုများသည် သဘောတူညီမှုမရခဲ့ကြောင်း ကြားရသောအခါ မိမိ၏ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်က မိမိထံသို့ “ပွဲပြီးသွားပြီ” ဆိုသည့် ရိုးရှင်းသော စာတိုတစောင်ကို ပေးပို့ခဲ့သည်။
ခြောက်လအတွင်း နိုင်ငံတွင် အကြမ်းဖက်မှု၊ နိုင်ငံရေး ဆန့်ကျင်ကွဲပြားမှုနှင့် နောက်ဆုံးတွင် စစ်တပ်ကြားဝင်စွက်ဖက်မည် ဆိုသည့် နိုဝင်ဘာလက ပေးပို့ခဲ့သော သတင်းစကားပါ အခင်းအကျင်း အများစုသည် အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်။ အာဏာသိမ်းမှုသည် ထင်ထားသည်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်နေသည်။
မဲမသမာမှုရှိပြီး ရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်မျှတမှု မရှိဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် စစ်တပ်သည် အာဏာသိမ်းမည်ဟု မိမိ၏ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်က မှန်ကန်စွာ ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ သူဖေါ်ပြသော အခင်းအကျင်းအရ အာဏာရသောအခါ စစ်တပ်သည် အဓိက ပြဿနာများဖြစ်သော တိုင်းရင်းသား ပဋိပက္ခ၊ နိုင်ငံတကာဖိအားနှင့် စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုတို့ကို အာရုံစိုက်ရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း ကြေညာမည်ဖြစ်သည်။ စစ်တပ်သည် ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မပါဘဲ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပကာ အခြေအနေအများစုသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကကဲ့သို့ဖြစ်နေမည်ဟုလည်း ဆိုသည်။ ထိုစဉ်က တရားမဝင်ဖြစ်နေသော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ယခင်သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန်ကို ကြားဖြတ်အစိုးရတွင် နေရာတခုပေးလိမ့်မည်ဟုလည်း ထိုသတင်းစကားက ဆိုသည်။ ထိုအသေးစိတ်များ ထွက်ပေါ်လာခြင်း မရှိဘဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကသာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကို ဦးဆောင်နေသည်။
လည်ပြန်ကြည့်ပါက အာဏာမသိမ်းမီ ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း ပြည်ပဂုဏ်သရေရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ နေပြည်တော်သို့ အဆင့်မြင့်ခရီးစဉ်နှစ်ခုသည် ယခုအခါ လုံးဝသစ်လွင်သော ထူးခြားမှုဖြစ်လာသည်။ ထိုခရီးနှစ်ခုမှာ ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၏ ခရီးစဉ် (လွန်စွာ ထူးခြား) နှင့် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး၏ ခရီးစဉ် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် စစ်အာဏာသိမ်းမည်ကို ကြိုတင်မသိရှိဟုဆိုလျှင် စာရေးသူသည် လွန်စွာ အံ့သြမိမည် ဖြစ်သည်။ တပ်မတော်သည် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ နီးကပ်သောမဟာမိတ်များနှင့် ထိုအစီအစဉ်ကို ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်များသည် အိမ်နီးချင်းများအပြင် ပိုမိုဝေးကွာသော နိုင်ငံများမှ လေ့လာကြပြီး အာဏာမသိမ်းမီ အသေးစိတ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။
ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်မှ အဆင့်မြင့် စစ်ခေါင်းဆောင်အချို့သည် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကို ဆက်သွယ်ပြီး နိုင်ငံတွင် မည်သည့် ထူးခြားသော ကိစ္စမဆိုဖြစ်လျှင်ပင် စစ်တပ်သည် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးအတွက် ၎င်းတို့နှင့် ဆက်လက်အလုပ်လုပ်လိုကြောင်းပြောသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုရပါက စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တော့မည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်က ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ ကဖေးဆိုင်တခုတွင် စာရေးသူသည် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော အဆင့်မြင့်အရာရှိတဦးနှင့်အတူ ထိုင်နေသည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်က ဖြစ်ရပ်များကို မမေ့ရန် ထိုသူက စာရေးသူကို သတိပေးသည်။
ထိုစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းလက်အောက်တွင် စစ်တပ်သည် ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲချုပ်၏ ခေါင်းဆောင်များအကြား ဂိုဏ်းဂဏများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် မတည်ငြိမ်မှုကြောင့် အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းရန် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုထံမှ အာဏာကို ရယူသည်။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းသည် အိမ်စောင့်အစိုးရအောက် ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည်။ အနိုင်ရသူဖြစ်သော ဦးနုသို့ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးအပ်သော်လည်း နောက်နှစ်နှစ်ကြာသောအခါ အာဏာပြန်လည် သိမ်းခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းက ချောက်ကမ်းပါးထဲကျတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံကို ကယ်ဆယ်လိုက်ကြောင်း ပြောပြီးနောက် နိုင်ငံကို ၂၆ နှစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် တနိုင်ငံလုံး အုံကြွမှုအတွင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းက သူ၏တပည့်သားမြေးများ အာဏာထပ်သိမ်းရန် အတည်ပြုပေးသည်။ ထိုစစ်ယူနီဖေါင်းဝတ် မျိုးဆက်သစ်က နိုင်ငံကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ အုပ်ချုပ်ပြီး ထိုနှစ်တွင်ပင် ရွေးကောက်ပွဲအတု ကျင်းပသည်။ ရုပ်သေးအစိုးရက နိုင်ငံကို တံခါးဖွင့်ပြီး အနောက်နိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ချီးကျူးကြပြီး ဗိုလ်ချုပ်များကို ကြိုဆိုကြသည်။
မကြာခင်အနာဂတ်တွင် အလားတူ ဖြစ်ရပ်မျိုးကို တွေ့ရဦးမည်လားဟု စာရေးသူ စိတ်ပူလာမိသည်။ ဖမ်းဆီးထားသော ဓါးစာခံများလည်း ရှိနေသည်။ စစ်တပ်က “ညှိနှိုင်းဖို့အချိန်ကျပြီ၊ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်ဈေးပေးမှာလဲ” ဟု ပြောမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော် ထိုသမိုင်းဆိုင်ရာ တိုက်ဆိုင်မှုတွင် အကန့်အသတ်များလည်း ရှိနေသည်။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်သည့်ခေတ်သည် ယနေ့ခေတ်နှင့်မတူပေ။ သူသည် Generation Z မျိုးဆက်၏ တီထွင်ဆန်းသစ်သည့် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နည်းများကို မကြုံခဲ့ရသလို ထိုစဉ်က စမတ်ဖုန်းများ၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများ၊ လမ်းမပေါ် ပါဖောင်းမန့် သရုပ်ဖေါ်မှုများ၊ လူငယ်အသိုင်းအဝန်းအကြား ထင်ရှားကျော်ကြားသူ အများအပြား၊ လမ်းများတွင် ထူးခြားသော တည်ငြိမ်မှုကို ပြသပြီး ပြုံးနေသည့် ချမ်းသာကြွယ်၀သော လူလတ်တန်းစားများလည်း မရှိသေးပေ။
ဦးနေဝင်းသည် မတူကွဲပြားသော ဆန့်ကျင်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရပြီး သူ့နည်းသူ့ဟန်ဖြင့် ဖြေရှင်းကာ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂအဆောက်အအုံကို ဒိုင်းနမိုက်ဖြင့်ခွဲကာ ကျောင်းသားများစွာကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ရပ်များအနက် မည်သည့်လုပ်ရပ်ကြောင့်မျှ သူ့အား အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသို့ ဖိတ်ခေါ်ခံရခြင်းအတွက် အတားအဆီး မဖြစ်ခဲ့ပေ။ သူသည် ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် အမေရိကသို့ သွားရောက်ပြီး သမ္မတ လင်ဒန် ဘီ ဂျွန်ဆင်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ယခုလ အာဏာသိမ်းမှုအပြီး တပတ်ကြာသောအခါ ဘိုင်ဒင်အစိုးရက အာဏာသိမ်းမှုကို ရှုတ်ချပြီး ပစ်မှတ်ထား အရေးယူမှုများ ချမှတ်သည်။ အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့က အာဏာသိမ်းမှုကို ရှုတ်ချပြီး ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲများ၊ လူမှုအာဏာဖီဆန်ရေး လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ဖြုတ်ချခံရသော ရွေးကောက်ခံ အစိုးရကို ထောက်ခံကြသည်။ အာဏာသိမ်းပြီးရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်ရှိ တရုတ်သံရုံးနှင့် ရုရှားသံရုံးများရှေ့တွင် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲများ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် လူထုအုံကြွမှုကို ကျောင်းသားဆန္ဒပြသမားတဦးအနေဖြင့် ဖြတ်သန်းခဲ့သောသူတဦးအနေဖြင့် ယခုအတွေ့အကြုံသည် လွန်စွာ ကျေနပ်အားရစရာ ကောင်းလှသည်။ ထိုမျှသော လှုပ်ရှားမှုနှင့် နိုင်ငံတကာတုံ့ပြန်မှုကို ရရှိရန် စာရေးသူတို့ဆိုလျှင် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ ပထမဆုံးအမှားမှာ ပေါ်ပေါက်လာမည့် လူထုလှုပ်ရှားမှု၏ အမြန်နှုန်းကို လျှော့တွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် Generation Z ၏ ထူးခြားသော စွမ်းအားကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ တိုက်ပွဲသည် စစ်တပ်နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အကြား တိုက်ပွဲသာဖြစ်သည်ဟု ထင်မှားခဲ့သည်။ သို့သော် မြန်မာလူငယ်များသည် အလျှင်အမြန် ထွက်ပေါ်လာပြီး အာဏာသိမ်းသူများအား ခုခံရေးအတွက် တာဝန်ယူရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အရိပ်အောက်မှ ခွဲထွက်လိုက်သည်။ ထိုသူများသည် သာမန်ပြည်သူများ၊ မိမိတို့၏ အိမ်နီးချင်းများသာဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့က တည်ငြိမ်စွာဖြင့် “ငါတို့ ဒီအချိန်မှာ တိတ်တိတ်လေးနေရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စစ်ကျွန်ဖြစ်သွားမယ်” ဟု ပြောသည်။
စစ်တပ်သည် နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူကို စစ်ကြေညာလိုက်ပြီး နာရီကိုနောက်ပြန်လှည့်ရန် ကြိုးစားနေသည်။ ယခု အာဏာသိမ်းမှုသည် နူးညံ့သော အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်သည် သို့မဟုတ် ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းသော အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်သည်ကို ငြင်းခုန်လိုသော လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များအတွက် ပေးလိုသော သတင်းစကားမှာ အာဏာသိမ်းမှုသည် အာဏာသိမ်းမှုသာဖြစ်ပြီး အမျိုးအစား ခွဲခြားနိုင်ခြင်းမရှိ ဆိုသည့်အချက်ပင်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကျော်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အာဏာသိမ်းမှု၏ တခုတည်းသော ရည်မှန်းချက်မှာ မိမိတို့အားလုံးကို ကျောက်ခေတ်သို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားရေးသာ ဖြစ်သည်။
(ဧရာဝတီ အယ်ဒီတာချုပ် အောင်ဇော်၏ The Coup in Myanmar: How the Generals Miscalculated ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
]]> ထရမ့်အလွန် ဘိုင်ဒင်ရဲ့ တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် သဘောထား အပြောင်းအလဲရှိမလား https://burma.irrawaddy.com/article/2021/01/27/237179.html Wed, 27 Jan 2021 11:51:45 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=237179
The post ထရမ့်အလွန် ဘိုင်ဒင်ရဲ့ တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် သဘောထား အပြောင်းအလဲရှိမလား appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> အမေရိကန် ခေါင်းပြန်ထောင်ရမယ့် မနက်ဖြန် https://burma.irrawaddy.com/article/2021/01/15/236436.html Fri, 15 Jan 2021 02:00:56 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=236436
နိုင်ငံရေးစနစ်ပြိုကွဲပျက်စီးပြီး လူဖြူကြီးစိုးမှုဖြင့် ဝိသေသပြုရမည့် ထရမ့်၏ အမေရိကတွင် ထိုကဲ့သို့သော အကြမ်းဖက်မှုမျိုးကို တွေ့ရသည်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ် သလောက်ပင်ဖြစ်သည်။
The post အမေရိကန် ခေါင်းပြန်ထောင်ရမယ့် မနက်ဖြန် appeared first on ဧရာဝတီ.
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ နိုင်ငံရေးနိဂုံးသည် ရက်ပိုင်းအတွင်းရောက်လာတော့မည် ဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံတွင် သူ ဖျက်ဆီးခဲ့သည်များကို ပြုပြင်ရန် အချိန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ သမ္မတသစ် ဂျိုးဘိုင်ဒင် အစိုးရသည် ယခင်သမ္မတကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အန္တရာယ်များကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပါမည်လော။
လွန်ခဲ့သောအပတ်က ဝါရှင်တန်တွင် အကြမ်းဖက်သော ကမောက်ကမဖြစ်ရပ်များ ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ အမေရိကန်၏ အစဉ်အလာ မဟာမိတ်များ၊ မိတ်ဆွေများ၊ ရန်သူများနှင့် ပြိုင်ဖက်များသည် မယုံကြည်နိုင်သော အကြည့်ဖြင့် စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြသည်။ တခုတည်းသော ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး နိုင်ငံသည် အထိန်းအကွပ်မဲ့ ဆန့်ကျင် ကွဲလွဲပြီး ဖရိုဖရဲဖြစ်ရပ်များနှင့် ပုန်ကန်မှုများမှ ရုန်းမထွက်နိုင်ဘဲ ပဋိပက္ခပြဿနာတွင်းနက်တွင် ကျရောက်နေခဲ့သည်။
ထရမ့်ကို သစ္စာခံသော အဓိကရုဏ်းသမားများက ကာပီတိုလွှတ်တော် ခန်းမများကို ဖျက်ဆီးဝင်ရောက်ပြီးနောက် ရက်အတန်ကြာသော်လည်း ထိုအကြမ်းဖက် ပုန်ကန်မှုအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော ပုံများသည် ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် ဆက်လက်ပျံ့နှံ့နေပြီး ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များကလည်း စိတ်ရှုပ်ထွေးနားမလည်နိုင်မှု၊ တုန်လှုပ်မှုများဖြင့် ဆက်လက်တုံ့ ပြန်နေခဲ့သည်။
အချို့သော ဥရောပမဟာမိတ်များက ထိုအဓိကရုဏ်းသည် ဒီမိုကရေစီအပေါ်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ကြောင်း ရှုတ်ချဝေဖန်သည်။ အကြမ်းဖက်မှုကို ရှုတ်ချပြီး ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို လေးစားရမည်ဟု ပြောဆိုကာ ချောမွေ့စွာ အာဏာလွှဲပြောင်းရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်ကို လေးစားရေးတို့အား တောင်းဆိုကြသည်။
နိုင်ငံရေးစနစ် ပြိုကွဲပျက်စီးပြီး လူဖြူကြီးစိုးမှုဖြင့် ဝိသေသပြုမည့် ထရမ့်၏ အမေရိကတွင် ထိုကဲ့သို့သော အကြမ်းဖက်မှုမျိုးကို တွေ့ရသည်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ်သလောက်ပင်။
မကြာခဏကြားခဲ့ဖူးသော စကားအသုံးအနှုန်းများ မဟုတ်ပါသလော။ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း “စိုးရိမ်ပူပန်သည်“ ဆိုသည့် ဖန်တရာတေသော ပြောနေကျ စကားများကို အမေရိကန်အပါအဝင် ပြည်ပအစိုးရများထံမှ ကျနော်တို့ ကြားသိကြီးပြင်းလာခဲ့ကြရသည်။ အလားတူသော သွန်သင်ဆုံးမမှုနှင့် အမေရိကန်က အခြားနိုင်ငံများကို မကြာခဏ ညွှန်ကြားခဲ့သည့် ဒီမိုကရေစီ ရှေ့တန်းတင်ရေး တောင်းဆိုခြင်းများကို ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ အစိုးရများနှင့် ခေါင်းဆောင်များက ဝါရှင်တန်သို့ ပြန်လည် ပြောကြားလာသောအခါ သံဝေဂမရဘဲ နေရန် မဖြစ်နိုင်တော့ပေ။
ဖန်သားပြင်များတွင် မြင်တွေ့နေရသည်များသည် အမေရိကတွင် မဟုတ်ဘဲ ဗဟိုအာရှ သို့မဟုတ် အာဖရိက သို့မဟုတ် တရုတ် သို့မဟုတ် အရှေ့တောင်အာရှ သို့မဟုတ် အခြားတနေရာရာတွင် ဖြစ်နေသည်ဟု အများအပြားက ပိုမိုယုံကြည်လိုကြမည်ကိုလည်း သံသယဖြစ်စရာမလိုပေ။ ထိုကဲ့သို့သောနေရာများတွင် ဖရိုဖရဲ ဖြစ်ရပ်များနှင့် စစ်ဝတ်စုံမျိုးကို ဝတ်ဆင်ထားသော လက်မရွံ့လူရမ်းကားများက အကြမ်းဖက်သော အစွန်းရောက်မှုများကို မိမိတို့ မြင်တွေ့ရသည်မှာ အလေ့အကျင့်ဖြစ်နေသည်။ ယခုအကြိမ်တွင် ထိုလက်မရွံ့လူရမ်းကားများသည် အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်တွင်းသို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သည်ဆိုသည့်အချက်သည် အတော်ပင် တုန်လှုပ်စရာ ဖြစ်သည်။ အမေရိကသည် ၎င်း၏ ပြဿနာများကို ထိုသို့ဖြေရှင်းမည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြမည်မဟုတ်ပေ။
ထိုအခြေအနေကြောင့် အခြားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများကို ဆရာကြီးလုပ်ပြီး ဘဝင်မြင့်နေသည့် အမေရိကန် မူဝါဒချမှတ်သူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ပြည်တွင်းရေးကို ၎င်းတို့ လေ့လာရန် အချိန်ကျရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများက သတိပေးလာကြသည်။
အမေရိကန်၏ ပြိုင်ဖက်များဖြစ်သော တရုတ်နှင့် ရုရှားနိုင်ငံများသည် အခွင့်ကောင်းရကာ ထိုဖရိုဖရဲဖြစ်ရပ်အတွက် သိသိသာသာကျေနပ်ကြသည်မှာလည်း ရှောင်လွှဲမရသော ကိစ္စဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရသူအမျိုးသမီး ဟွာချန်ယင်က “ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်မှုနဲ့ လုံခြုံမှုကို အမေရိကန်ပြည်သူတွေ အမြန်ဆုံး ခံစားနိုင်ဖို့ ကျမတို့မျှော်လင့်တယ်” ဟုပြောသည်။ အမှန်တကယ်အားဖြင့် ဘေ့ဂျင်းသည် ယခင်က တရုတ်ပြည်သူများ၏ သာယာဝပြောရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထိုကဲ့သို့သော အမေရိကန်၏ သံတမန်ရေးရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို မကြာခဏ နားထောင်နေခဲ့ရသည်။ ယခုတကြိမ်တွင်မူ တရုတ်တို့သည် အခြေအနေကို မဆိုင်းမတွ အသုံးချလိုက်တော့သည်။
မော်စကိုတွင်လည်း ကာပီတိုလွှတ်တော်ကို ထရမ့်ထောက်ခံသူများ ဝင်ရောက်စီးနင်းခြင်းသည် အမေရိကန် ပြည်တွင်းရေးသာဖြစ်ကြောင်း ကနဦးပြောကြားပြီးနောက် ထိုကိစ္စအတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုသာ အပြစ်တင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူ အမျိုးသမီး မာရီယာဇာခါရိုဗာက ပြောသည်။
“အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဟာ ခေတ်မမီတော့ဘဲ ခေတ်သစ် ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းတွေနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့အခါ ဥပဒေချိုးဖေါက်မှုတွေအတွက် အခြေအနေတွေ ဖန်တီးပေးလာတယ်။ ပြီးတော့ အမေရိကန် မီဒီယာတွေကလည်း နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲမှာ ကိရိယာဖြစ်နေတယ်။ ဒါဟာ အခုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတွေ့ရတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အကွဲအပြဲအတွက် အဓိက အကြောင်းအရင်းဖြစ်တယ်”
“အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဟာ ခေတ်မမီတော့ဘဲ ခေတ်သစ် ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းတွေနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့အခါ ဥပဒေချိုးဖေါက်မှုတွေအတွက် အခြေအနေတွေ ဖန်တီးပေးလာတယ်။ ပြီးတော့ အမေရိကန် မီဒီယာတွေကလည်း နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲမှာ ကိရိယာဖြစ်နေတယ်။ ဒါဟာ အခုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတွေ့ရတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း အကွဲအပြဲအတွက် အဓိက အကြောင်းအရင်းဖြစ်တယ်” ဟု မာရီယာဇာခါရိုဗာ က ပြောသည်။
ဟောင်ကောင်ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ထောက်ခံခြင်းကို လှလှပပ လက်စားခြေသည့်အနေဖြင့် ဘေ့ဂျင်းအာဘော် ဂလိုဘယ်တိုင်းမ် သတင်းစာကလည်း “ဟောင်ကောင် ဥပဒပြုကောင်စီ အဆောက်အဦကို ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီး ဂရက်ဖက်တီ ရုပ်ပုံများ ရေးဆွဲကာ ပစ္စည်းများကို ခိုးယူ ဖျက်ဆီးသော ဟောင်ကောင်မှ အဓိကရုဏ်းသမားများကို တွေ့ခဲ့ရသောကြောင့် ထိုစဉ်က အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသမားများသည် အကြမ်းဖက်မှုကို ရှုတ်ချရမည့်အစား ထိုလူရမ်းကားအုပ်စု၏ သတ္တိကို အားပေးဂုဏ်ပြုခဲ့သည်ကို အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ မှတ်မိပေလိမ့်မည်” ဟု လှောင်ပြောင်ရေးသားသည်။
ရုရှားအထက်လွှတ်တော်ဖြစ်သော ဖက်ဒရယ်ကောင်စီမှ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ကွန်စတန်တင်ကိုဆာချက် ကလည်း အမေရိကန် ဒီမိုကရေစီသည် ခြေနှစ်ချောင်းလုံး ဒဏ်ရာရနေပြီဟု ပြောသည်။
“အမေရိကဟာရှေ့ဆောင်လမ်းပြမဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် လမ်းကြောင်းချမှတ်ခွင့် အားလုံး ဆုံးရှုံးသွားပြီ။ အခြားနိုင်ငံတွေကို စည်းမျဉ်းချမှတ်ဖို့ဆို ပိုလို့ တောင် မရတော့ဘူး”
“အမေရိကဟာရှေ့ဆောင်လမ်းပြမဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် လမ်းကြောင်းချမှတ်ခွင့် အားလုံး ဆုံးရှုံးသွားပြီ။ အခြားနိုင်ငံတွေကို စည်းမျဉ်းချမှတ်ဖို့ဆို ပိုလို့ တောင် မရတော့ဘူး” ဟု ကွန်စတန်တင်ကိုဆာချက် က ပြောသည်။
ချန်ထားမရသည့် ကိစ္စတခုမှာ အီရန်သမ္မတ ဟက်ဆန် ရိုဆာနီက ထရမ့်ကို စိတ်မနှံ့သူအဖြစ် ခေါ်ဝေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အချိန်တွင် ထိုကဲ့သို့သောစကားများကို တီဟီရန်မှ စကားကြီး စကားကျယ်ပြောခြင်းအဖြစ် ပယ်ချရမည်သာဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုအချိန်တွင်မူ ဝါရှင်တန်မှ လူများအပါအဝင် အများအပြားက ထိုစကားကို ထောက်ခံကြသည်။ အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ နန်စီပယ်လော့စီ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ထရမ့်သည် ရူးသွပ်သူဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုရှုတ်ချခဲ့သည်။
ဝါရင့်ဒီမိုကရက်တဦးဖြစ်သူ ပယ်လော့စီက ထရမ့်ကို ရာထူးမှ ဖယ်ရှားရန်တောင်းဆိုသည်။ “ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာက အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကို လုပ်နေတဲ့သူက ရူးသွပ် စိတ်မနှံ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အမေရိကန် သမ္မတဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့အန္တရာယ်ကို ရက်အနည်းငယ်ပဲ ကာကွယ်ထားရတော့မယ်” ဟု သူပြောသည်။ လက်တွေ့တွင်လည်း ထရမ့်သည့် ဆူပူလှုံဆော်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်သည်ကို အများက သဘောတူပေလိမ့်မည်။
ထိုသို့သော အကျပ်အတည်းသည် အဝေးမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတွင် ရှိနေကြောင်း လက္ခဏာများ ပြသနေသော်လည်း စိတ်ပူစရာ ကောင်းသည့် အချက်မှာ အမေရိကန် နိုင်ငံသား သန်း ၇၀ ကျော်သည် နိုဝင်ဘာလ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ထရမ့်ကို မဲပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင်လည်း ထရမ့်လေးများရှိနေသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ပြည်မကြီးကို တရားခံလွှဲပြောင်းပေးရေး ဥပဒေကြမ်းကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဟောင်ကောင်ဆန္ဒပြပွဲ (ဓာတ်ပုံ – Flickr)
မြန်မာအပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ဒီမိုကရေစီစနစ် အားနည်းပြီး အကျင့်ပျက် ခြစားသည့် စစ်ဖက်နှင့် ပဒေသရာဇ်ဆန်သည့် အစိုးရများ၏ သမိုင်းကြောင်းရှိနေသည်။ သို့သော် ကာပီတိုလွှတ်တော်တွင် ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်သည်ကို မြင်ရသောအခါ မြန်မာနိုင်ငံမှ အချို့သော ဒီမိုကရေစီရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက လူမှုအခြေပြု အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရေး၊ ပဋိပက္ခ ထိခိုက်လွယ်မှုနှင့် ဒီမိုကရေစီသင်တန်းများ ပို့ချပေးရန် အကြံပေးအဖွဲ့များကို အမေရိကသို့ စေလွှတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း လူမှုကွန်ရက်တွင် လှောင်ပြောင်ကြသည်။
အချိန်နှောင်းသောအခါမှ တွစ်တာက ထရမ့်ကို ထာဝရ ပိတ်ပင်လိုက်သည်။ မည်သည့်အတွက် ထိုမျှ အချိန်ယူနေရသနည်း။ သူ့ကိုပိတ်ပင်သင့်သည်မှာ လွန်စွာကြာပြီဖြစ်သည်။ သူသည် အမုန်းတရားနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို လှုံ့ဆော်ပြီး လူရမ်းကားများကို မီးထိုးပေးနေသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပြီဖြစ်သည်။ လူမှုကွန်ရက်က ယခုအခါမှ မည်သည့်အတွက် အရေးယူဆောင်ရွက်ရသနည်း။ မည်သို့ဆိုစေ ထရမ့်သည် တွစ်တာမှတဆင့် အမေရိကကို မအုပ်ချုပ်နိုင်တော့သောကြောင့် စိတ်သက်သာရာရသည်။
Facebook နှင့် Google အပါအဝင် လူမှုကွန်ရက်လုပ်ငန်းကြီးများသည် ပြဿနာတွင် တစိတ်တပိုင်း ပါဝင်နေပြီး တာဝန်ရှိကြောင်း ဝန်ခံလာအောင်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ၎င်းတို့၏ သြဇာ ကြီးမားလွန်းသောကြောင့် ထိုလူမှုကွန်ရက်လုပ်ငန်းများသည် အမည်မခံသည့် ကမ္ဘာ့ဆင်ဆာ တည်းဖြတ်ရေးအဖွဲ့များဖြစ်နေပြီး တခါတရံ ရေးသားတင်ပြချက်များကို ဖြုတ်ချကာ အသုံးပြုသူများကို ပိတ်ပင်သလို တခါတရံတွင် အကြမ်းဖက်မှုလှုံ့ဆော်သော အမုန်းစကားများကို ခွင့်ပြုထားကာ ငွေကြေးအမြောက်အများရနေသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း နိုင်ငံအများအပြားတွင် ထိုလူမှုကွန်ရက်လုပ်ငန်းကြီးများကို ပိုမိုတင်းကျပ်စွာ စည်းကမ်းထိန်းချုပ် သင့်မသင့်နှင့် မည်သို့ထိန်းကြောင်းမည်ကို ဆွေးနွေးလာရသည်မှာ ကျိုးကြောင်းဆီလျှော်သော ကိစ္စ ဖြစ်လာသည်။
ဝါရှင်တန်အနေဖြင့် ပြည်ပတွင် ယုံကြည်မှု ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ပြုပြင်ပြင်ဆင်မှုများလုပ်ပြီး အမေရိကသည် ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း မဟာမိတ်များကို ယုံကြည်လာအောင် လုပ်ဆောင်ကာ ယခုအကျပ်အတည်းကို ကျော်လွှားနိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ လူရမ်းကားများနှင့် ထရမ့်လေးများအား သတိပေးရန် အရေးကြီးသည်။ မည်သည့်အတွက် ထိုသို့ အရေးကြီးရသနည်း။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းမှ စတင်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် အကျပ်အတည်းများ အောင်မြင်မှုများကြားမှ ဒီမိုကရေစီနှင့် လွတ်လပ်မှု၏ စံအဖြစ် ရန်သူများအကြားတွင်သာမက မိတ်ဆွေများအကြားတွင်ပါ ရပ်တည်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အပေါ် လေးစားမှုအပြင် အမုန်းတရားနှင့် စက်ဆုပ်မှုတို့လည်း ရှိနေခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်လည်း ကမ္ဘာ့ဗိုလ်ကျစိုးမိုးသူများ ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိသော အခြားနိုင်ငံများကို ချိန်ခွင်လျှာညှိရန် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဘိုင်ဒင်အစိုးရအောက်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ညီညွတ်မှုနှင့် နှိမ့်ချမှုဆိုသည့် လမ်းကြောင်းသစ်သို့ ပြောင်းပြီး လွတ်လပ်သောကမ္ဘာ၏ ခေါင်းဆောင် သရဖူကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
ဧရာဝတီ အင်္ဂလိပ်ပိုင်းတွင် ဖော်ပြထားသော US Chaos Shocks the World—but Tomorrow Never Dies ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
]]> ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလအား ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်း https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2020/11/05/232804.html Thu, 05 Nov 2020 03:01:54 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=232804
ရွေးကောက်ပွဲကာလ ကျော်လွန်ပြီးချိန်တွင် ကျနော်တို့အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအချိန်များသို့ ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
The post ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလအား ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်း appeared first on ဧရာဝတီ.
ရွေးကောက်ပွဲရာသီတွင်းသို့ ကျနော်တို့ ရောက်နေကြပြီ။ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ ဟောကိန်းထုတ်သူများက ရလာဒ်အတွက် ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများ ပြုလုပ်နေကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတပါမည်လား။ မည်သူအနိုင်ရရှိမည်နည်း။
ပထမဆုံးစွာ ဆိုရလျှင် အာဏာရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အာဏာပြန်လည်ရရှိပြီး အစိုးရတခု ဖွဲ့စည်းခဲ့လျှင် အံ့အားသင့်စရာ မဟုတ်ပါ။ ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်သော အစိုးရတခု၏ လက်အောက်တွင် နေခဲ့ရသည့် ကမာ္ဘ့မည်သည့်နေရာ၌မဆို ပြည်သူများက လူကြိုက်များသော ရွေးကောက်ခံအစိုးရတခုကို ဒုတိယ သက်တမ်း ထပ်ရွေးမည်ဟု ပြောခြင်းက အတော်လေး ဘေးကင်းသည့် လောင်းကြေးထပ်မှုတခု ဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမှန်တကယ် မေးရမည်မှာ NLD အနိုင်ရမည်လား သို့မဟုတ် ရှုံးနိမ့်သွားမည်လား မဟုတ်ဘဲ၂၀၁၅ ခုနှစ် သောင်ပြိုကမ်းပြို နိုင်ခဲ့သလို ထပ်နိုင်မည်လား ဆိုသည့် မေးခွန်းသာဖြစ်သည်။ NLD ထောက်ခံသူများက ထိုသို့ အပြတ်အသတ်နိုင်ရန် မျှော်လင့်နေသည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။ သို့သော်လည်း လေ့လာဆန်းစစ်သူ အများအပြားကမူ ယခုတကြိမ်တွင် သောင်ပြိုကမ်းပြို မနိုင်နိုင်တော့ဟု သံသယ ရှိနေကြသည်။
ပြည်သူများက၂၀၁၅ ခုနှစ်ကထက် ကြောက်ရွံ့မှုနည်းပါးလာကြပြီး စစ်အာဏာရှင်များ၏ အရိပ်ကို စိုးရိမ်မှု မရှိကြတော့ပါ။
NLD ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များက တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ဆန္ဒမဲ ၅၇ ရာခိုင်နှုန်း အနိုင်ရလိမ့်မည်၊ ပါတီက အစိုးရတခု ဖွဲ့စည်းနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြသည်။ ဗမာလွှမ်းမိုးသည့် ဒေသများတွင် NLD က မဲအများအပြား ပိုမိုရနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တွင် NLD က အဓိက နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များတွင်မူ အထူးသဖြင့် ရှမ်း၊ ကချင်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် အချို့သော တိုင်းရင်းသားပါတီများ အခြေအနေ ကောင်းနိုင်သည်။ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းလွှတ်တော်များတွင် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များကို ကျနော်တို့ ပိုမိုတွေ့ရဖွယ် ရှိပါသည်။
နေပြည်တော် NLD ပါတီ ဌာနချုပ်တွင် တွေ့ရသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်/ သီဟလွင်/ ဧရာဝတီ
တိုင်းပြည်တွင် COVID-19 ကူးစက်မှု မြင့်တက်နေသော်လည်း NLD အလံများနှင့် တီရှပ်များ၏ “အနီရောင်ပင်လယ်” တခုကို ကျေးရွာများနှင့် မြို့များတွင် ကျနော်တို့ တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ NLD သည် ဗမာအများစုရှိသော မဲဆန္ဒနယ်များ၌ အနိုင်ရလိမ့်မည်ဟု သေချာသည့် ညွှန်းကိန်းတခု ဖြစ်ပါသည်။
COVID-19 ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းပေးရန် တောင်းဆိုမှုများရှိသော်လည်း နိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့တွင် မဲပေးကြရမည်ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်မဲပေးခြင်းများ ပေးနေပြီဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့သည်လည်း နေပြည်တော်တွင်ကြိုတင်မဲ ပေးခဲ့ကြသည်။
တပ်မတော်ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်များနှင့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်အချို့က သူ့ကို များစွာ သဘောမကျကြသည့်တိုင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးအကျယ် လူကြိုက်များနေဆဲဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်က ထိုနိုင်ငံရေး ပြတ်ရွေ့ကြောင်းအတိုင်း ဆက်လက်ကွဲပြားနေလိမ့်ဦးမည်ဖြစ်သည်။
သူ့ကို လူကြိုက်များဆဲဖြစ်သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် စိန်ခေါ်မှုအချို့နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ အကယ်၍ NLD ထပ်နိုင်ပါက မည်သူ သမ္မတဖြစ်လာမည်နည်း။၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ သူက သမ္မတမဖြစ်နိုင်သည်မှာ အားလုံးသိထားပြီး ဖြစ်သည်။၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် NLD က ကြိုးပမ်းခဲ့သေးသော်လည်း လွှတ်တော်တွင် နေရာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ယူထားသည့် တပ်မတော်က NLD ဘက်မှ အဆိုပြုလာသော အပြောင်းအလဲများကို ပိတ်ဆို့ခဲ့ခြင်းကြောင့် မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ သမ္မတတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ အပြည့်အဝ ရှိသည်။ သို့သော်လည်း NLD အစိုးရလက်အောက်တွင်မူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထိန်းချုပ်သူ ဖြစ်သည်။
NLD အစိုးရ၏ ပထမဆုံးသက်တမ်းအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် သမ္မတ၂ ဦးရှိခဲ့သည်။ သမ္မတဟောင်း ဦးထင်ကျော်နှင့် လက်ရှိ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်တို့ ၂ ဦးလုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား သစ္စာရှိရှိထောက်ခံသူများဖြစ်ပြီး ၂ ဦးလုံးက မြင်ကွင်းမှ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့သည်။၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူသည် သမ္မတ၏ အထက်တွင် ရှိလိမ့်မည်ဟု အခိုင်အမာ ပြောဆိုခဲ့ခြင်းကို ထိုအဖြစ်က ထင်ဟပ်နေသည်။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ရာထူးဖြင့် ထိုအတိုင်း အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ဦးထင်ကျော်နှင့် ဦးဝင်းမြင့် ၂ ဦးလုံးသည် ပွဲတက်ပုံရိပ်များအဖြစ်သာ သတ်မှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
အကယ်၍ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က သူ၏ ပါတီ ထပ်မံအနိုင်ရမည်ဟု မျှော်လင့်ပါက (သူကလည်း မျှော်လင့်ထားပါသည်) သမ္မတသစ်ကို အဆိုပြုရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် သူက နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရာထူးကို ဆက်လက်ထိန်းထားမည်လား သို့မဟုတ် စွန့်လွှတ်မည်လားဆိုသည်က မသဲကွဲသေးပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်ထောင်စုအစိုးရတွင် အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခွင့်ရရန် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရာထူးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် NLD အစိုးရက ဖန်တီးခဲ့သည်။ အစပိုင်းကတည်းကပင် လွှတ်တော်တွင်းမှ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်များက ထိုရာထူးဖန်တီးမှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရာထူးအပြင် ရာထူးအများအပြားကို တာဝန်ယူထားသည်။
အကယ်၍ ပြန်လည် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရပါက သူသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦး ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ သူ ဆန္ဒရှိလျှင် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်လာနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း အသက် ၇၅ နှစ်အရွယ်တွင် သူက ထိုတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်မည်လားဆိုသည်မှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာပင်။ ယခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ထွက်ပေါ်ခဲ့သည့်သတင်းများတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က NLD ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်သာ ပါတီခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍကို ပြန်ယူရန် စဉ်းစားနေသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ သူက ထိုသို့ လုပ်/မလုပ်ကို စောင့်ကြည့်ရမည်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါတီသို့ ပြန်လျှင် တပ်မတော်က ပျော်ရွှင်စွာ နှုတ်ဆက်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် နေပြည်တော်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်/ထက်နိုင်ဇော်/ဧရာဝတီ
အကယ်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မျိုးဆက်သစ် ခေါင်းဆောင်များအတွက် လမ်းဖွင့်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်ဆိုလျှင် သူ့အနေဖြင့် NLD ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ organizational structure နှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု institutional development ကို ခိုင်မာအားကောင်းစေရန် ပြုလုပ်ပေးရလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်အထိမူ ထို ၂ မျိုးလုံးက NLD တွင် အားနည်းနေသည်။ လက်ရှိတွင် ပါတီ၌ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြီးသော ခေါင်းဆောင်တဦးနှင့် သူ၏ နောက်လိုက်နောက်ပါများရှိသော်လည်း အခြားအရာကမူ အနည်းငယ်သာ ရှိသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ၏ ဒေါ်ခင်ကြည် ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် အချိန်ပိုပေးရန်လည်း ဆန္ဒရှိနေသည်။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ကွယ်လွန်သူမိခင် ဒေါ်ခင်ကြည်၏ အမည်ကို ပေးထားသော အကျိုးအမြတ်မယူသည့် ထိုအဖွဲ့အစည်းကို ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍများ မြှင့်တင်ရန်အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း မေးစရာရှိလာသည်မှာ သူအနေဖြင့် ယခု ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှု ကာလအတွင်း သူ၏ အုပ်ချုပ်ရေးရာထူးကို စွန့်လွှတ်နိုင်မည်လောဟူ၍ပင် ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည် ယခင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် NLD အစိုးရလက်အောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၂၀၂၁ နှစ် နှစ်လယ်တွင် အငြိမ်းစားယူရတော့မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်က လွှတ်တော်တွင် နေရာ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းအာမခံချက် ရရှိထားခြင်းက ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ပိုမိုခက်ခဲစေသည့် အခြေအနေတခု ဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ရေး၊ နယ်စပ်ရေးရာနှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ၃ ခုကိုလည်း ၎င်းက ထိန်းချုပ်ထားသည်။ မြင်နိုင်သလောက်အနာဂတ်ကာလအတွက်လည်း တပ်မတော်က အမျိုးသား နိုင်ငံရေးတွင် ကဏ္ဍတခုမှ ဆက်လက်ပါဝင်နေလိမ့်မည်။ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်များက၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို သူတို့ ကာကွယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ အမိန့်မဟုတ်ဘဲ သမ္မတ၏အမိန့်ကိုသာ နာခံမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
သူနှင့် NLD အစိုးရတို့၏ ဆက်ဆံရေးက မကောင်းမွန်ပါ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူလူထု အကျိုးကို ဆက်လက်ထမ်းရွက်လိုကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။ သူက လာမည့်အစိုးရတွင် အုပ်ချုပ်ရေးရာထူးတခုကို မျှော်လင့်ထားကြောင်း ဤအချက်က ဖော်ပြနေသည်။ တပ်မတော်က လွှတ်တော်တွင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ရယူထားသဖြင့် သူက ဒုတိယသမ္မတ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း သူက ထိုနေရာမျှနှင့် ကျေနပ်ရောင့်ရဲပါမည်လော။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဲ့သို့ပင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည်လည်း သူ့နေရာဆက်ခံမည့်သူကို ရွေးချယ်ရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မေးစရာရှိလာသည်မှာ နောက်တက်လာမည့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မည်သူ ဖြစ်မည်နည်း။ ထင်ရှားသော အလားအလာရှိသူတဦးမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ လက်ရှိလက်ထောက်ဖြစ်သော ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ထိုအတိုင်း ဖြစ်လာမည်လား။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အသစ် ရွေးချယ်ခြင်းက နောက်လာမည့်အစိုးရကို စောင့်ဆိုင်းနေသည့် ခက်ခဲသော တာဝန်တခု ဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် နေပြည်တော်တွင် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ တွေ့ရသည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်/ ထက်ဝေ/ဧရာဝတီ
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ သမ္မတက ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဖြစ် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီ (ကာလုံ) က အဆိုပြု၍ ထောက်ခံသော ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးကို ခန့်အပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အာဏာရလာပြီးနောက်ပိုင်း NLD က ကာလုံအစည်းအဝေးတကြိမ်မျှ ခေါ်ယူခြင်း မရှိသေးပါ။
အကယ်၍ NLD က ဤရွေးကောက်ပွဲတွင် အများစု အနိုင်ရပါက ဆိုးရွားလှသော သံသရာက ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရပါသည်။ တပ်မတော်နှင့် အစိုးရကြားမှ ဆက်ဆံရေးက တိုးတက်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မည်ဟု မည်သူကမျှ မမျှော်လင့်ပါ။
ထို့ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကာလ ကျော်လွန်ပြီးချိန်တွင် ကျနော်တို့အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအချိန်များသို့ ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အစိုးရသစ်နှင့် တပ်မတော်က အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြမည်ဟု တိုင်းပြည်အတွက် အောင်မြင်ရာ အောင်မြင်ကြောင်း ကတိကဝတ်တခု ရယူနိုင်ခဲ့လျှင် ကျနော်တို့အတွက် အံ့သြစရာလည်း ဖြစ်၊ ကောင်းချီးမင်္ဂလာတခုလည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုရလဒ် ထွက်ပေါ်လာနိုင် မနိုင်ကို သံသယလည်း ရှိနေပါသည်။
(အောင်ဇော်သည် ဧရာဝတီသတင်းဌာန၏ အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်သည်။ သူ၏ Post-Election Palm Reading as Myanmar’s Vote Nears ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်သည်။)
]]> အမှန်တရားရှာမှာလား လုပ်ဇာတ်တွေကို မီးထိုးပေးမှာလား https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2020/10/05/231008.html Mon, 05 Oct 2020 05:26:04 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=231008
အမှန်တရားက ဒီနေရာမှာ ပထမဆုံး ကျဆုံးရသူဖြစ်ပြီး ကျူးလွန်သူများကတော့ လွတ်မြောက်နေဆဲ ဆိုသည်ကို အမြဲလက်ကိုင်ထားသင့်ပေသည်။
The post အမှန်တရားရှာမှာလား လုပ်ဇာတ်တွေကို မီးထိုးပေးမှာလား appeared first on ဧရာဝတီ.
ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူသစ် ခန့်အပ်လိုက်သူသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မိန်းပြည်နယ် ပထမ လွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ အောက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း သောမတ် အင်ဒရူးဖြစ်သည်။
သူသည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ယန်ဟိလီကို ဆက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ယန်ဟိလီသည် အစောပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခွင့်ရသော်လည်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဘက်မလိုက်မှု သို့မဟုတ် ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျမှု မပြသနိုင်သောကြောင့် နိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ကြောင်း အစိုးရက ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် သူမကို အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
ယခုလူသစ် အင်ဒရူး၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းတွင် သူသည် အမေရိကန်အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ Fortify Rights ၏ အဆင့်မြင့်အကြံပေး ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဖေါ်ပြထားသည်။
သူ့အနေဖြင့် အဓိကထားသည့် အပိုင်းမှာ လူ့အခွင့်အရေး ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသူများ သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ခံနေရသူများဖြစ်ကြောင်း အင်ဒရူးက မကြာသေးမီက ပြောကြားခဲ့သည်။ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်လျှင် မြန်မာအစိုးရနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး နားထောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သူကတိပြုခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂ အထူးအစီရင်ခံစာ တင်သွင်းသူဖြစ်လာသောအခါ Fortify Rights နှင့်ပတ်သက်ခဲ့သော သူ၏အတိတ်နှင့် ပစ္စုပ္ပန်ကြောင့် စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မှုများ မေးခွန်းထုတ်စရာများ ပေါ်ပေါက်လာမည်မှာ အသေအချာပင်။
သူ့ကို ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာထုတ်ပေးမည်၊ မပေးမည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးသော်လည်း မည်သို့ဖြစ်စေကာမူ အင်ဒရူးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖြစ်ရပ်များ ဘက်မလိုက်သော သက်သေအဖြစ် ယုံကြည်မှု ထူထောင်လိုပါက Fortify Rights နှင့် ကင်းကင်းနေရန် လိုမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်သူများက ထောက်ပြပြောဆိုကြသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ရန်ကုန်မှ ပြန်ထွက်ခွါနီး လေဆိပ်တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်နေသော ယန်ဟီလီ/ဧရာဝတီ
အမေရိကန်မီဒီယာ ခံတပ်ကြီးဖြစ်သော New York Times နှင့် Fortify Rights တို့၏ လက်လွတ်စပယ် မှားယွင်းခဲ့သော အမှားများကို လွန်ခဲ့သောအပတ်က ဟောင်ကောင် Asia Times မှ (မြန်မာပြည်တွင် စစ်သုံ့ပန်းများအား ရောင်းကုန်ပြုလုပ်ခြင်) ဆောင်းပါးတပုဒ်က မှန်ကန်စွာ ထောက်ပြခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်က ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ၎င်းတို့၏ အထက်အရာရှိများ၏ အမိန့်အရ ရိုဟင်ဂျာ ခေါ် ရခိုင်မြောက်ပိုင်းနေ မွတ်ဆလင်များအား သတ်ဖြတ်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဆိုသည့် မြန်မာစစ်သား နှစ်ဦး၏ ထွက်ဆိုချက်ဆိုသည်များကို New York Times နှင့် Fortify Rights တို့က ဖေါ်ပြထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဝေဖန်သူများက Fortify Rights ၏ အစီရင်ခံချက်အပေါ် ယုံကြည်နိုင်မှုကို မေးခွန်းထုတ်ရုံသာမက ထိုသို့ လူသိရှင်ကြား လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ထိုစစ်သားနှစ်ဦး၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ၎င်းတို့၏ မိသားစုများ၊ ရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေများနှင့်အပေါင်းအသင်းများကို လက်စားချေနိုင်သောကြောင့် အန္တရာယ်ရှိကြောင်းနှင့် ထိုသို့ဖြစ်သောကြောင့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို မြင်တွေ့နိုင်ခြေရှိခဲ့သူများ ထုတ်ဖော် ဖွင့်ဟလာနိုင်ခြင်းအတွက် အတားအဆီးဖြစ်စေကြောင်းလည်း ပြောသည်။
ထိုဖမ်းဆီးခံ စစ်သားနှစ်ယောက် သည်သဟိဂ် သို့ မည်သို့ရောက်သွားသနည်းဟူသော မေးခွန်းဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အရာရှိများ ပါဝင်ပတ်သက်နေပါသလား။
သတင်းများ၏ အဆိုအရ ထိုစစ်သားနှစ်ယောက်သည် နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်တရားရုံး တည်ရှိရာ သဟိဂ် The Hague တွင်ရှိနေသည်ဟု ယူဆရသည်။ သို့သော် ထိုစစ်သားများသည် ၎င်းတို့ပြောသကဲ့သို့ တပ်ပြေးများမဟုတ်ဘဲ စစ်သုံ့ပန်းများဖြစ်နေသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) နှင့် နေ့စဉ် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည်။ ထိုသတင်းများတွင်ပါဝင်သော စစ်သားနှစ်ယောက်မှာ တိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းမိသည့် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ အရာရှိနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားအနက် နှစ်ဦးသာဖြစ်သည်။ Fortify နှင့် The New York Times က ရေးခဲ့သလို ၎င်းတို့သည် တပ်မှ ထွက်ပြေးခြင်း မဟုတ်ခဲ့ကြပေ။
ထို့အပြင် ထိုသတင်းတွင် သိသိသာသာပြတ်တောက်နေသော ကွင်းဆက်လည်း ရှိနေသည်။
၎င်းတို့ နယ်သာလန်သို့ သွားရောက်ရာတွင် လွယ်ကူစေရန် ၎င်းတို့ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှ အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းများက ဆိုသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များတွင် မည်သူက ဥရောပ ပြည်ဝင်ခွင့် တံဆိပ်တုံး ထုပေးခဲ့သနည်း။
ထိုလုပ်ငန်းများတွင် မည်သူတို့ ပါဝင်ပတ်သက်နေသနည်း။ Fortify Rights အနေဖြင့် အခန်းကဏ္ဍတခုခုမှ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပါသလား။
Fortify Rights သည် ဒုက္ခသည်များနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခံရသူများ၏ ကံကြမ္မာနှင့်ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းစွာ ထုတ်ဖော်တင်ပြခဲ့သည်မှာ ယခုအကြိမ်သည် ပထမဆုံး အကြိမ်မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဆယ်စုနှစ်များစွာ လေ့လာနေသော နိုင်ငံခြားသားများနှင့် လွတ်လပ်သော ဝေဖန်သူများက ပြောသည်။ ထို့ကြောင့် Falsify Rights ဟု လှောင်ပြောင်ခေါ်ဝေါ်ခံရခြင်းမှာ အံ့သြစရာ မဟုတ်တော့ပေ။
AA ရိုက်ယူခဲ့သော သဟိဂ်တွင် ရှိနေသည်ဆိုသော မြန်မာ့တပ်မတော်သား ၂ ဦး
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်မြန်မာစစ်သားနှစ်ဦးက ရှမ်းပြည်နယ်မှ အရပ်သားများကို ရိုက်နှက်နေသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယိုကြောင့် လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူများ တုန်လှုပ်ရသည်။ ထို ဗီဒီယိုကို မကြာသေးမီရက်များ သို့မဟုတ် ရက်သတ္တပတ်များက ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Fortify Rights ကဖေါ်ပြပြီး New York Times ကလည်း ထိုအတိုင်း ထပ်မံဖေါ်ပြသည်။ သို့သော် ထို ဗီဒီယိုကို ယခင်နှစ်နှစ်က ရိုက်ကူးထားကြောင်း နောက်ပိုင်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
ယခုအခါ သဟိဂ်တွင်ရောက်နေသည်ဟု ယူဆရသော မြန်မာစစ်သားနှစ်ယောက်၏ ရုပ်သေ ဓါတ်ပုံများမှာ ရက္ခိုင့်တပ်တော်က ရိုက်ကူးထားသည့်ဗီဒီယိုမှ ရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မှားယွင်းသော အုပ်စုများ၏ သားကောင်အဖြစ် ကျရောက်ရသည်မှာ New York Times တခုတည်း မဟုတ်ပေ။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တဖွဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဒူးချီယာတန်ရွာတွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်ပွားကြောင်း ထုတ်ပြန်သောအခါ အမေရိကန် အခြေစိုက် Associated Press က ထိုအကြောင်းကို ချက်ခြင်း လက်ခံယုံကြည်လိုက်သည်။ ယခု ဧရာဝတီ The Irrawaddy သတင်းဌာနသည်ပင်လျှင် ထိုသတင်းအတိုင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
နောက်ကောက်မကျလိုသော Fortify Rights ကလည်း ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် ထိုပြဿနာကို အစထုတ်ကာ အစိုးရကို ဝေဖန်ရန်အခွင့်အလမ်းအဖြစ် အသုံးချသည်။ ထိုအချိန်က မြန်မာအစိုးရနှင့် သမ္မတရုံးက အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်သည့် မည်သည့်အထောက်အထားမျှ ဒူးချီယာတန် မတွေ့ရကြောင်း ခုခံပြောကြားခဲ့သည်။
Arakan Project၊ Fortify Rights နှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့သည် မွတ်ဆလင်ကျေးရွာသားများက ၎င်းတို့ကို လိမ်ညာခဲ့သည်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်မှာ အကြီးအကျယ် မှားယွင်းခဲ့ကြောင်း ဒေသခံ လူ့အခွင့်အရေး လုပ်သားများနှင့် လွတ်လပ်သော သုတေသီများအပါအဝင် လွတ်လပ်သော သတင်းအရင်းအမြစ်များက ယခုအခါပြောနေပြီဖြစ်သည်။
ထိုနောက် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှ မွတ်ဆလင် ၄၀ ကျော်ကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်သည်ဆိုသည်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်သော ယုံကြည်လက်ခံနိုင်ဖွယ် သတင်းအချက်အလက်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာအာဏာပိုင်များကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဒူးချီယာတန်ရွာတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် ဇာတ်လမ်းမှန်ကို ပြန်လည်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ယခုအချိန်အထိ မည်သူမျှ မကြိုးစားကြ။
ဒူးချီယာတန်ရွာတွင် ရဲနှင့် ရွာသားများအကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခြင်း မရှိပေ။ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး တယောက်ပျောက်ဆုံးပြီးနောက် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့် ဒေသခံများအကြား ပဋိပက္ခဖြစ်သည်။ ထို ရဲတပ်ကြပ်မှာ သေဆုံးသွားပြီဟု ယူဆရသည်။ ထိုနောက် မွတ်ဆလင်ကျေးရွာသားများက သတင်းအမှားများကို မီဒီယာနှင့် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့များအကြား ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ထိုကဲသို့သော ဖြစ်ရပ်များကို နေရာအနှံ့တွင် တွေ့ရသော်လည်း တွေ့ရသည့်အခါတိုင်းတွင် မီဒီယာနှင့် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့သိရသည်များကို အထောက်အထားဖြင့် အတည်ပြုရန် ပြန်လည်ပြင်ဆင်တင်ပြရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။
ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို ဖော်ထုတ်လေ့လာခြင်းသည် တန်ဖိုးထား လေ့လာသင့်သော ကိစ္စဖြစ်သော်လည်း အချက်အလက်မှန်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး တာဝန်မဲ့သော ၎င်းတို့၏ မှတ်တမ်းများကြောင့် Fortify Rights ကဲ့သို့သော လူ့အခွင့်အရေး အုပ်စုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လိုလာကြောင်း ဝေဖန်သူများ ပြောလာပြီဖြစ်သည်။ ထိုအုပ်စုသည် ၎င်းတို့၏ ရံပုံငွေရလမ်းများ တိုးချဲ့ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို မှားယွင်းနားလည်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်နေကြောင်းပင် အများအပြားက ဝေဖန်ပြောနေကြပြီဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကုလသမဂ္ဂ အထူးသံတမန်များ မကြာခဏ အပြောင်းအလဲဖြစ်သည်မှာ အထူးအဆန်းမဟုတ်တော့ ။ ၎င်းတို့ ရေကြည်ရာမြက်နုရာသို့ မသွားမီ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွင် နာမည်ကောင်းလက်မှတ် တိုးချဲ့ရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကံကြမ္မာဆိုးကို အမြတ်ထုတ်ရန်ရောက်လာသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်စားသူများ၊ သိုက်တူးသမားများနှင့် ရွှေတူးသမားများအထိ မနှစ်မြို့စရာ လူမျိုးစုံ ပုံစံမျိုးစုံဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ပြောရလျှင် ထိုသို့သော အဖွဲ့အစည်းနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ရန်ပုံငွေရရှိရေးပြဿနာသည် လွန်စွာအရေးပါသည်ကိုလည်း လျစ်လျူရှုထား၍မရပေ။
ဝဋ်လည်ပြီး ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သတင်းများသည် ပုပ်သိုးသွားကြသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပုံရိပ်ကို ထိခိုက်အောင် မမျှမတ ဆက်လုပ်နေကြသည်။ ညိုးနွမ်းသောပုံရိပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကံကြမ္မာဖြစ်သည် ဆိုပါကလည်း ရှိပါစေတော့ဟုသာ ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုဆိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို အေးအေးချမ်းချမ်းပဲ သူ့ဟာသူနေပါစေတော့ဟု ဆိုရတော့မည်။
၎င်းတို့၏ လောကတွင် လောဘနှင့် လူမှုကွန်ရက်ထိုးဖောက်မှုက အမှန်တရားကို အနိုင်ယူနေပြီး ရိုဟင်ဂျာပြဿနာသည် အဓိကငွေရလမ်းဖြစ်နေသည်။
ရိုးသားစွာနှင့် ဝမ်းနည်းစွာဆိုရပါက လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အများအပြားသည် တာဝန်ရှိမှုကို ဟောပြောပို့ချနေသည့် တပြိုင်တည်းတွင် ၎င်းတို့၏ အရှေ့တိုင်းကို နှိမ်သည့်လုပ်ဇာတ်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပကတိအခြေအနေကို ပုံကြီးချဲ့၊ သရုပ်ဖျက်၊ ဦးတည်ချက် လွဲမှားအောင် လုပ်ပိုင်ခွင့်လိုင်စင်ကိုလည်း ယူထားကြသည်ဟု ဝါရင့်လေ့လာသူများက ယခုအခါ ထုတ်ဖော်ပြောနေကြပြီ ဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီ ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်တပ်က အရပ်သားများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး မရေတွက်နိုင်လောက်အောင် များသော ဇာတ်လမ်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် ထိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများအတွက် တာဝန်ခံမှုကို ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ရန်နှင့် နောက်ထပ်ချိုးဖေါက်မှုများ မဖြစ်စေအောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် အရေးပါခဲ့သည်။
သို့သော် ၎င်းတို့၏ တင်ပြချက်များကို အမှန်တရားဖြင့် လမ်းညွှန် ထိန်းကျောင်းသင့်ပြီး ပုံကြီးချဲ့ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပေသည်။ အမှန်တရားက ဒီနေရာမှာ ပထမဆုံး ကျဆုံးရသူဖြစ်ပြီး ကျူးလွန်သူများကတော့ လွတ်မြောက်နေဆဲ ဆိုသည်ကို အမြဲလက်ကိုင်ထားသင့်ပေသည်။
(ဧရာဝတီ အင်္ဂလိပ်ပိုင်းတွင်ပါရှိသော အောင်ဇော်၏ UN Rapporteur: Finding the Truth or Furthering False Narratives in Myanmar? ဆောင်းပါးကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။)
]]> ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ တရုတ်နဂါး၏ ခြေလှမ်း https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2020/09/09/229538.html Wed, 09 Sep 2020 02:00:24 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=229538
တရုတ်၊ ဂျပန်နှင့်အိန္ဒိယတို့သည် ဒေသတွင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရေးအကြီးဆုံး မဟာမိတ်များဖြစ်ပြီး သူတို့က လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲ၏ ရလဒ်များကို စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့်ကြည့်နေကြလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
The post ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ တရုတ်နဂါး၏ ခြေလှမ်း appeared first on ဧရာဝတီ.
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုဝင်ဘာလ၌ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပ တော့မည် ဖြစ်သည်။ နိမိတ်လက္ခဏာအားလုံးက လက်ရှိ အာဏာ ရပါတီဖြစ်သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အာဏာပြန်လည် ရရှိနိုင်ကြောင်းကို ဖော်ပြနေကြသည်။ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနှင့် ဂျပန် အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းများနှင့် ဒေသတွင်းရှိ အခြားနိုင်ငံများအတွက် ထိုအချက်က အံ့အားသင့်စရာတော့ မဖြစ်သင့်ပါ။
လက်ရှိအချိန်တွင် တိုင်းပြည်၌ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုများ မြင့်တက်လာနေခြင်းနှင့် ကြုံတွေ့နေရခြင်း နှင့် အတူ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲများကို စီစဉ်ထားသည့် အတိုင်း ကျင်းပနိုင် ခြင်းရှိမရှိကိုတော့စောင့်ကြည့်ရဦးမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ကျနော်တို့အတွက် သေချာသည့်အရာတခုမှာ တရုတ်နိုင်ငံက NLD နှင့် ၎င်း၏ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘက်မှ လောင်းကြေးတင်လိမ့်မည် ဆိုခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
လက်တွေ့တွင်လည်း ရွေးကောက်ပွဲနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ နေပြည်တော်သည် ဆက်တိုက် ရောက်လာနေသည့် အဆင့်မြင့် နိုင်ငံခြား ဧည့်သည်တော်များကို ကြိုဆို လက်ခံနေခဲ့ရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီး Toshimitsu Motegi ၏ မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်တွင် မြန်မာအတွက် အရေးပေါ်ချေးငွေများကို ကြေငြာခဲ့သည်။ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လိုအပ်ချက်များ၊ ကာလရှည်နေထိုင်သူများနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် နိုင်ငံ၏နယ်နိမိတ်ကို ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် ပေးခြင်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ အခြေအနေများ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေး အတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ပေးရေးတို့ အပါ အဝင် အကြောင်းကိစ္စ အမျိုးမျိုးကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
နောက်တပတ်အကြာတွင် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံရေးဗျူရို အဖွဲ့ဝင်နှင့် ဗဟိုကော် မတီ၏ နိုင်ငံခြား ရေးရာ ကော်မရှင်ရုံးမှ ဒါရိုက်တာ Yang Jiechi က နေပြည်တော် သို့လာရောက်၍ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၊ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် တို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
တွေ့ဆုံရာတွင် ထိပ်တန်းတရုတ်သံတမန်က ၂ နိုင်ငံ အဆင့်မြင့် ခေါင်းဆောင်များ အကြား ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှုများ ပိုမို အား ကောင်းလာစေရေး နှင့် ၂ နိုင်ငံကြားတွင် နိုင်ငံရေးယုံကြည်မှု ပိုမိုခိုင်မာ နက်ရှိုင်းစေရေးတို့ အတွက် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ခရီးစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တရုတ် အစိုးရ၏ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော နိုင်ငံတကာ အခြေခံအဆောက်အဦး အစီအစဉ် ဖြစ် သည့် Belt and Road Initiative (BRI) ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ပြီး ကာလရှည်ကြာစွာ နှောင့်နှေးနေ ခဲ့သော တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေး စင်္ကြန် China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) စီမံကိန်းများ အကောင်အထည် ဖော်ခြင်းကို အရှိန် မြှင့်တင်ရန် အတွက်ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံက COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်သည့် အချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ မျှဝေ ရေးကို ဦး စားပေးရန် ဆန္ဒ ရှိကြောင်းလည်း Yang Jiechi က ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုလအတွင်းတွင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများလည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မသိရှိရ သေးပါ။
မြန်မာနိုင်ငံကို သြဂုတ်လ ကုန်ပိုင်းက ရောက်ရှိလာသည့် ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး မစ္စတာ မိုတဲဂိ တိုရှိမိစုနှင့် အတူတွေ့ရသည့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံ – Myanmar State Counsellor Office)
အမေရိကန် နိုင်ငံသည်လည်း ထိုရလဒ်အပေါ်တွင် စိတ်ဝင်စားသူများထဲ၌ ပါဝင်နေသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ် ၃ ခု အတွင်းတွင် ၎င်းက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပြီး နိုင်ငံအတွင်း သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများစွာလည်း ရရှိခဲ့သည်။ ထိုဖြစ်စဉ် ကပြောင်းကပြန် ဖြစ်သွားခြင်းကို အမေရိကန် အစိုးရက တွေ့မြင်လိုမည်တော့ မဟုတ်ပါ။
၂၀၂၀ ခု နှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို စီမံခန့်ခွဲရန် နှင့် ပါ ဝင်ရန် အတွက် အမေရိကန် အစိုးရက ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများသို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၆ သန်းကျော် (၆၁.၂၂ ဘီလီယံကျပ်) ထောက်ပံ့ ခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံးက ကြေငြာခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် သမ္မတ Xi Jinping ကို နိုင်ငံခြားခရီးစဉ် တခုတွင် ပထမဆုံးကြိုဆိုခဲ့သော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ တရုတ် ခေါင်းဆောင်က ဒီနှစ်အတွက် သူ၏စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ထားသော နိုင်ငံခြားခရီး သံတမန်ရေး ပြက္ခဒိန်တွင် မြန်မာကို ပထမ နေရာအဖြစ် ထားရှိခဲ့သည်။
ထိုခရီးစဉ် ယခုနှစ်အတွင်း ကျရောက်သည့် မြန်မာ – တရုတ် ၂ နိုင်ငံ သံတမန် ဆက်ဆံရေး အနှစ် ၇၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ်လည်း တစိတ်တပိုင်းပါဝင်သည်။ ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာအစိုးရပိုင် မီဒီယာများတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် ဆောင်းပါးတပုဒ်၌ Xi Jinping က တရုတ် နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံကို ၎င်း၏ တရားဝင် အခွင့်အရေးများ၊ အကျိုးစီးပွားများနှင့် အမျိုးသား ဂုဏ်သိက္ခာ လုံခြုံစေရေးတွင် ထောက်ခံကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ခရီးစဉ်၏ ထည်ဝါခမ်းနားမှု၊ အချိုသကာလောင်းထားသော သတင်းစကားများနှင့် နိုင်ငံတော်အဆင့် လက်ခံတွေ့ဆုံမှုများ၏ နောက်ကွယ်တွင်တော့ တရုတ်အာဏာပိုင်များက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူ၏ နိုင်ငံရေး ရပ်တည်ချက်ကို လေးစားကြောင်း ပြောခဲ့ကြသည်။ ယခင် စစ်အစိုးရကို ဦးဆောင်ခဲ့ကြသည့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် တရုတ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လက်တွေ့ကျမှုကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပြီး (တရုတ်ငွေကြေး အထောက် အပံ့နှင့် ပြုလုပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ) သူမ၏ကတိကဝတ်များကို စောင့်ထိန်း လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံက ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မှားယွင်း၍ မရနိုင်သော အရွေ့တခုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲများ မတိုင်မီတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ ကြိုတင်၍ လှုပ်ရှားသော နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ တခုကို ကျင့်သုံး ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုစဉ်က အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်နှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘေဂျင်းသို့ ဖိတ်ကြားခဲ့ပြီး သမ္မတ Xi Jinping နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် လည်း NLD က ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဖိတ်ကြားခြင်းအားဖြင့် ဘေဂျင်း က တပ်မတော်နှင့် တပ်မတော်က ကျောထောက် နောက်ခံ ပေးထားသော ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကာလရှည်စွာ ပေါင်းသင်းခဲ့သော မဟာမိတ်များအား ၎င်းတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိတ်ဆွေ အသစ်များ ပေါင်းဖက် ရှာဖွေနိုင်စွမ်း ရှိကြောင်း အချက်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဖိတ်ကြားခြင်းသည် ဘေဂျင်း အနေဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် လက်တွေ့ကျပြီး ပထဝီ ဗျူဟာယှဉ်ပြိုင်မှု၏ လိုအပ်ချက်များကို နားလည်သဘောပေါက်ကြောင်း အနောက်နိုင်ငံများသို့ သတင်းစကား ပေးခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီတို့ က တဦး နှင့်တဦး ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးများ တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ထိုစဉ်က ဒုတိယသမ္မတ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသည့် Xi Jinping က မြန်မာ နိုင်ငံမှ အာဏာရ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦးနှင့် ဘေဂျင်းတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ပါတီချင်း ဆက်ဆံရေးကို မြှင့်တင်ရန် ကတိပြုခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေးကို မဟာဗျူဟာ ရှုထောင့်တခုမှ အမြဲကိုင်တွယ် ခဲ့သည်ဟု ဒုတိယသမ္မတ Xi Jinping က ပြည်သူ့ခန်းမဆောင်ကြီးတွင် ဦးဌေးဦး သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုသို့ တွေ့ဆုံခြင်းသည် CPC နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ကြားတွင် နောက်ဆုံး ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော အဆင့်မြင့် အစည်းအဝေးဖြစ်သည်။
NLD ကို စည်းရုံးခြင်း
အမှန်တကယ်တွင် အရင်က ဆိုလျှင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ယခင် စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များ၊ တပ်မတော် ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်များနှင့် နက်ရှိုင်းသော ရင်းနှီးချစ်ခင်မှုများ ပျိုးထာင်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်ရှိ တရုတ်သံရုံး က စစ်အစိုးရနှင့်နီးစပ်ပြီး အဆက်မပြတ် အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့သည်။ ၂ ဘက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းများကိုလည်း အစိုးရပိုင် သတင်းစာများတွင် ဝေဝေ ဆာဆာ ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ (သို့သော် လည်း ထိုသို့ ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှု၏ အဆိုးဘက် အပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖိနှိပ်ခံ နိုင်ငံသားများ ကြားတွင် တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်များ မြင့်တက်လာခြင်းပင် ဖြစ်တော့သည်။)
သို့သော်လည်း NLD က ၂၀၁၅ ခုနှစ် တွင်အပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့သည့် အချိန် နောက်ပိုင်း၌ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ တရုတ် နိုင်ငံက NLD အစိုးရနှင့်အာဏာရပါတီတို့နှင့် ဆက်ဆံရေးခိုင်မာစေရန် ခြေလှမ်းများ လှမ်းလာခဲ့သည်။
NLD သတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ ပါတီ ထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များနှင့် လူငယ်အဖွဲ့ဝင် များ အပါအဝင် NLD အဖွဲ့ဝင် ၁၀၀ ကျော် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့ကြသည်။ တရုတ် နိုင်ငံ သို့ သွားရောက်သည့် ကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက်က အမေရိကန်၊ ဥရောပ သမဂ္ဂ (EU) နှင့် အာရှနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်သည့် အရေအတွက်ထက် ကျော်လွန်နေခဲ့သည်။ များသောအားဖြင့် သူတို့က ဘေဂျင်းနှင့် အခြား ပြည်နယ်များသို့ ပထမဆုံး သွားရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသည့် ယူနန်ပြည်နယ်၏မြို့တော် ကူမင်းတွင် သူတို့၏ ခရီးစဉ်များကို အဆုံးသတ် ကြသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ရောက်လာသည့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဗဟိုကော်မတီ နိုင်ငံရေးဗျူရိုအဖွဲ့ဝင်မစ္စတာ ရန်ကျဲ့ချိ နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံ – Myanmar State Counsellor Office)
ခရီးစဉ် တလျှောက်တွင် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်များက CPC ၏ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများကို လေ့လာကြသည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ကြသည့် NLD ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောသည်။
ရိုဟင်ဂျာအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာအစိုးရနှင့် အနောက်နိုင်ငံများ ဆက်ဆံရေး တင်းမာမှုများ တိုးပွားလာနေချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ က NLD နှင့် အပြုသဘောဆောင်သော ဆက်ဆံရေးတခုကို တည်ဆောက်ခဲ့သည် ဟု NLD ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် တဦးက ဧရာဝတီသို့ ယခင်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုအခွင့် အရေးကို ရယူသည့် အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံက ဧည့်သည်များကို အကြီးစား ဆည်များနှင့် အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ကိုပြသ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စီမံကိန်းများ ပါဝင်သည့် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် အစီအစဉ်ကို ဈေးကွက်တင်၍ သာသာထိုးထိုး မြှင့်တင်ခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD ဘက်မှ ဆက်လက်၍ လောင်းကြေးတင်မည်ကို သံသယ ရှိစရာမလိုပါ။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် ထိုစဉ်က တရုတ်သံအမတ်ကြီး Cheng Ruisheng သည် NLD ရုံးချုပ်ကို ဂုဏ်ပြုခဲ့ သည့် ပထမဆုံး သံတမန်ဖြစ်ခဲ့ သော်လည်း ထိုရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို စစ်အစိုးရက မည်သည့် အချိန်တွင်မျှ မလေးစားခဲ့ပါ။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အပေါ် သြဇာသက်ရောက်မှု
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံ က မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမှ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များနှင့် ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ စင်စစ်အားဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံက မြောက်ပိုင်းမှ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ (EAOs) အပေါ် NLD အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကနိုင်ငံရေးပါတီများထက် ပို၍ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ် အနည်းငယ်အတွင်းတွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များက တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် နိုင်ငံရေးနိုင်ငံ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ အတွက်သာမက လက်နက်အတွက်ပါ မှီခိုလာခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် သူတို့က တရုတ်နိုင်ငံ အပေါ် ကျေးဇူး အကြွေးတင်ခဲ့ရသည်။ သူတို့ကို ထောက်ပံ့ပေးကမ်းနေသူ၏ တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းဆန်ရန် မဖြစ်နိုင်သည့် အခါ သူတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်၏ ခြေလျင်တပ်သားများဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ ထိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ တဆင့် တရုတ်နိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားဒေသ များရှိ အချို့သော တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများ အပေါ် (အကန့်အသတ်ဖြင့် ဖြစ်သည့်တိုင်) သြဇာ လွှမ်းမိုး နိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၅၀ နှစ်များနှင့် ၁၉၆၀ နှစ်များ အတွင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားများ၊ သြဇာကြီးသော စာရေးဆရာများနှင့် “တရုတ်နီ” အပေါ် စာနာ ထောက်ခံသူများကြားတွင် တချိန်က ရှိခဲ့သည့် ကျယ်ပြန့်သော ထိတွေဆက်ဆံမှုမျိုးက မရှိတော့သည့်တိုင် ရန်ကုန်မြို့တွင် တရုတ်သံရုံးက မြန်မာတရုတ် ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ NLD ခေါင်းဆောင်များ၊ ထိပ်တန်း အစိုးရအရာရှိများ၊ တပ်မတော်တို့နှင့် ပုံမှန် ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှုများကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
ထိုအချိန်တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံရေးတံခါးဖွင့်လှစ်မှုများ ပြုလုပ်လာချိန်တွင် မကြာသေးမီနှစ်များ အတွင်း ရန်ကုန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ တလွှားမှ အဆက်အသွယ်များ၏ ကွန်ရက် တခု မှတဆင့် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍ သော်လည်းကောင်း မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် တရုတ်၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုက ကျယ်ပြန့်သော ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများနှင့် သိမ်မွေ့သောဟန်ချက်ညီမျှမှု တခုကို မြန်မာအစိုးရက လိုအပ်နေခြင်းတို့ နှင့် အတူ သြဇာသက်ရောက် အစွမ်းထက်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲ အပေါ် သြဇာသက်ရောက်မှု
တရုတ်နိုင်ငံက အခြားနိုင်ငံများနှင့် ဒေသတွင်း ရွေးကောက်ပွဲများ အပေါ် ၎င်း၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု အသုံးပြုနိုင်စွမ်း ရှိသည်။ ထိုသို့ အသုံးပြုခြင်းက ပြည်တွင်းမီဒီယာကို ဝယ်ယူခြင်းနှင့် တရုတ်လိုလားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို မြှင့်တင်ခြင်းမှသည် လူမှုမီဒီယာတွင် သတင်းအတု ဖြန့်ဝေသည့် လှုပ်ရှားမှုများကို ပြုလုပ်ခြင်း နှင့်သူလျှိုလုပ် ထောက်လှမ်းခြင်းအထိ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ရှိနေသည်။
ရုရှားနှင့်မတူသည်မှာ တရုတ်နိုင်ငံက ရွေးကောက်ပွဲတွင် တိုက်ရိုက် ပါဝင် စွက်ဖက်မှုများ မပြုလုပ်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရုတ်၏သြဇာ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဟန့်တားနှောက်ယှက်နိုင်မှု မြင့်တက် လာခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှ ၎င်း၏ အခြေခံအဆောက်အဦး ဆိုင်ရာ ကြီးမားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကြောင့် အထက်တန်း လွှာများ အတွင်းသာ သာမက သာမန်မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကြားတွင်ပါ အရှိန်အဟုန်ပြင်းထန်၍ ယခင်က မရှိခဲ့ဖူးသော အကြီးအကျယ် အချေအတင် အငြင်းပွားမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
နောက်လာမည့် ၁၀ နှစ်အတွင်းတွင် တရုတ် နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး သြဇာလွှမ်းမိုးမှုက အရှေ့တောင်အာရှတွင် တိုးပွားလာရန်သာ ရှိနေခြင်းက ဒေသတွင်း၌ အမေရိကန်၏ လွှမ်းမိုးမှု ကျဆင်းလာခြင်းကို မီးမောင်းထိုးပြနေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ထိုစိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားရမည် ဖြစ်တော့သည်။
ဒေသတွင်းမှ ရွေးကောက်ပွဲများကို သြဇာလွှမ်းမိုးရန် ကြိုးပမ်းရေးအတွက် တရုတ် နိုင်ငံက ပိုမို၍ အားထည့် လာသည်။ ဥပမာအားဖြင့် လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံတွင် တရုတ် နိုင်ငံက အရှေ့တောင်အာရှမှ တရုတ် အစိုးရ၏ အခိုင်မာဆုံး မဟာမိတ်များထဲမှ တဦးဖြစ်သော ဝန်ကြီးချုပ် Hun Sen ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရေးအတွက် ကူညီရန် ပြတ်ပြတ်သားသား ရဲရဲတင်းတင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံတွင် ယခုနှစ်သြဂုတ်လက ကျင်းပခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲ၌ တရုတ်၏ “မိတ်ဆွေဟောင်းကြီး” Mahinda Rajapaksa ၏ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိမှုကို တရုတ်နိုင်ငံက ကြိုဆိုခဲ့ပြီး သူ့အတွက် အပြည့်အဝ ထောက်ခံမှုကို အာမခံခဲ့သည်။ ကျွန်းနိုင်ငံ သီရိလင်္ကာနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် တရုတ် အစိုးရက မျှော်လင့်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စ၍ Mahinda Rajapaksa သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏ သမ္မတ ဖြစ်လာ ပြီးနောက် တရုတ် နိုင်ငံက ၎င်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို အများအပြား တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်မှုသည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် တရုတ်၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ခိုင်မာစေ မည်မှာ သံသယ ဖြစ်စရာ မလိုပါ။
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီရှိ ဟိုင်ဒရာဘတ်အိမ်တော်တွင် ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင် သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နှင့် ဝန်ကြီးချုပ် နေရိန်ဒြာမိုဒီတို့ တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – Myanmar President Office)
အလားတူ ဇာတ်ကြောင်းမျိုးကို နီပေါနိုင်ငံတွင်လည်း တွေ့နိုင်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အိမ်နီးချင်း တရုတ်နိုင်ငံနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်ဆံမှု ရှိသော နီပေါကွန်မြူနစ်ပါတီ များက တိုင်းပြည်၏အကြီးဆုံး ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်စဉ်တွင် အောင်မြင်သူများအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြသည်။ နီပေါနိုင်ငံမှ လေဆိပ်များ၊ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများနှင့် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ တည်ဆောက်ခြင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံက အကြီးအကျယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တရုတ် သံတမန်များက နီပေါ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
တရုတ် ဆန့်ကျင်ရေး သဘောထားများ
အလားတူ ပုံစံတခုကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ တိုင်းပြည် အပေါ်တွင် တရုတ်၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုက သိသာမြင်သာသော်လည်း အလားတူပင် တရုတ် ဆန့်ကျင်ရေး သဘောထားများက ခိုင်မာပြီး တည်မြဲသည်။ ရွေးကောက်ပွဲနှစ် အတွင်းတွင် မည်သည့်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကမျှ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည်ပင် ခြွင်းချက်မဟုတ်ပါ) တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အလွန်နီးကပ်သည် အမြင်မခံချင်ကြပါ။ (၁၉၆၇ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံရောက် တရုတ်လူမျိုးများ ကြားတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး အတွေးအခေါ်များ ပျံ့နှံ့နေခဲ့ခြင်းမှ မြစ်ဖျားခံသည့် တရုတ် ဆန့်ကျင်ရေး အဓိက ရုဏ်းများ ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။)
ထိုသို့သော သဘောတရား၏ အခြားဥပမာ တခုကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်တွေ့မြင်နိုင် ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်က ပြန်လည် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရရေး အတွက် ကြိုးစားသည့် အချိန်တွင် သမ္မတ Joko Widodo က သူကိုယ်သူ ဘေဂျင်းနှင့် ခပ်ခွာခွာ နေသည့် အသွင်ပြုခဲ့ပြီး တရုတ်ငွေကြေးအထောက်အပံ့ဖြင့် ပြုလုပ်သည့် တိုင်းပြည်အတွင်းမှ စီမံကိန်းများကို အရေးမပါ သယောင်လုပ်ခဲ့သည်။
တရုတ်နှင့် နီးကပ်လွန်းသည်ဟု အထင်ခံရခြင်းကို ကျော်ဖြတ်ရခြင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အခြားမြန်မာနိုင်ငံရေးသမားများ ရင်ဆိုင်ရသော ခက်ခဲသည့် အလုပ်တခုဖြစ်သည်။ တရုတ်လိုလားသူ နိုင်ငံရေးသမားတဦး ဖြစ်သည်ဟု မကြာသေးမီက မီဒီယာများတွင် စွပ်စွဲခံထားရသည့် အတွက် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အနေဖြင့် ကြိုးတန်းပေါ် လမ်းလျှောက်ရသည့်အနေအထားဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ BRI စီမံကိန်းများကို လက်ခံခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေဖြင့် ရန်ကုန်ရှိ အမေရိကန်နှင့် တရုတ် သံရုံးများအကြား မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ကောင်းစွာ သတိထားရလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ သူ့အတွက် နိုင်ငံရေးအရ နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး သံတမန်ရေးအရ ကမောက်ကမ နိုင်သော ကာလ ဖြစ်ပါသည်။
နားလည်၍ ရနိုင်သည်မှာ ပထဝီနိုင်ငံရေး ယှဉ်ပြိုင်မှုများ မြင့်တက်နေချိန်တွင် မြန်မာအစိုးရက တရုတ်နှင့်အမေရိကန် ကြားမှ ကျယ်ပြန့်လာသော တင်းမာမှုတွင် တဘက်ဘက်မှ ပါဝင်သည်ဟု အမြင်မခံလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ အခြားတဘက်တွင်လည်း မြန်မာလူမျိုးအများစုအကြား တရုတ် အထောက်အပံ့ဖြင့် ပြုလုပ်သော စီမံကိန်းများအပေါ် အနုတ်သဘောဆောင်သော အမြင်များက ရှိနေသည်။
နိုဝင်ဘာလ၏ ရွေးကောက်ပွဲသည် အဓိကအင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်ဆံရေးအတွက်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ အပါအဝင် ၎င်း၏ မဟာ အိမ်နီးချင်းများနှင့် တခါတရံတွင် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ပထဝီနိုင်ငံရေး ချိန်ညှိမှုတို့ အတွက် အရေးပါလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
နေပြည်တော်တွင် နောက်တက်လာမည့် အစိုးရကို မည်သူက ဦး ဆောင်သည် ဖြစ်စေ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ အိန္ဒိယ သို့မဟုတ် အမေရိကန်ကို ပေါ်ပေါ်လွင်လွင် ထောက်ခံသော အစိုးရတခုကို မျှော်လင့်ခြင်းက မိုက်မဲရာကျပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ကျနော်တို့ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ က ၎င်းခိုင်ခိုင်မာမာ ကိုင်စွဲထားသော ကြားနေသည့် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းလိမ့် မည်ဟုသာ မျှော်လင့်နိုင်ပါသည်။
ဧရာဝတီ အင်္ဂလိပ်ပိုင်းတွင် ဖော်ပြထားသော China Grows More Assertive Ahead of Myanmar’s Election ကို ဘာသာပြန် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
]]> တရုတ်ကာစီနိုဂိုဏ်းများကို ကရင်ပြည်နယ်မှာ နေရာပေးတဲ့ သူပုန်ဟောင်း https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2020/09/06/229339.html Sun, 06 Sep 2020 02:30:31 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=229339
အစိုးရနှင့် တပ်မတော်တို့သည် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားနှင့် နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန် တာဝန်ရှိသည်၊ သို့သော် ရွှေကုက္ကိုစီမံကိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ချိုးဖေါက် ခြင်းထက် လုံးဝလျှော့ကျခြင်း မရှိကြောင်း ကောက်ချက်ချရန် ခိုင်မာသော အထောက်အထားများက ပြသနေပေ သည်။
The post တရုတ်ကာစီနိုဂိုဏ်းများကို ကရင်ပြည်နယ်မှာ နေရာပေးတဲ့ သူပုန်ဟောင်း appeared first on ဧရာဝတီ.
ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ် တလျှောက်တွင် ကရင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနှင့် မြန်မာစစ်သား များအကြား ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များကို လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် သုံးခုအတွင်း စာရေးသူ ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
သတင်းစာဆရာများ၊ အကူအညီပေးရေး NGO လုပ်သားများ၊ သုတေသီများနှင့် သံတမန်များသည် စစ်မြေပြင်နှင့် ထိုနေရာတွင် နေထိုင်ကြသည့် ဒုက္ခသည်များ၊ စစ်သုံ့ပန်းများ၊ ဒဏ်ရာရနေသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနှင့် စစ်သားများ၊ မြေမြှုပ်မိုင်းဒဏ်ခံကြသူများ၊ ဖမ်းမိသောသူလျှိုများနှင့် အနာတရဖြစ်နေသော ဝိဉာည်များကို ကိုယ်တိုင် ကြည့်ရှုရန် ထိုနယ်စပ်ဒေသသို့ သွားလာကြသည်။
တချိန်က ထိုစစ်မြေပြင်အနီးသို့ ကျေးရွာသားများသည် အခြားသူ ရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူ စစ်မြေပြင်သို့ ခေါ်ဆောင် ခံရပြီး ပေါ်တာ အထမ်းသမားများအဖြစ် အတင်းအကျပ် စေခိုင်းခံကြရသည်။ မပြီးဆုံးနိုင်သည့် ကြောက်မက်ဖွယ် ဇာတ်လမ်းများ ထိုဒေသမှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြသည်။
ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု၊ ငှက်ဖျားနှင့် ငတ်မွတ်မှုကြောင့် သေလုမျေားပါး ဖြစ်နေသူများ၊ စစ်မြေပြင် တွင် လူသားအကာအကွယ်အဖြစ် အသုံးပြုခံရသော အထမ်းသမားများတို့၏ဘဝ စသည်တို့၏ ဇာတ်လမ်းများ ပင်ဖြစ် သည်။
KNU ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဘိုမြနှင့် ဧရာဝတီသတင်းဌာန တည်ထောင်သူ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးအောင်ဇော် (ဝဲဘက်တွင် ထိုင်နေသူ)တို့ ၁၉၉၈ ခုနှစ်က ထိုင်း- မြန်မာနယ်စပ်၌ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှု ပြုလုပ်စဉ်
ထိုပဋိပက္ခကို သတင်းယူသော မိမိတို့ သတင်းသမားများတို့သည် ကရင်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ၏ ဌာနချုပ် ဖြစ်သော မာနယ်ပလော “လွတ်မြောက်နယ်မြေ” တွင်ခိုလှုံပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဖိနှိပ်မှုများမှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် လာသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနှင့် နိုင်ငံရေးသမားများကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။
ထိုသူများသည် ထိုလွတ်မြောက်နယ်မြေမှ တဆင့် မြဝတီနယ်စပ် တဖက်ကမ်းရှိ ထိုစဉ်ကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သော မဲဆောက်သို့ သွားရောက်ကြသည်။
၁၉၈၀ ခုနှစ်များနှောင်းကစ၍ မြန်မာစစ်တပ်သည် ထိုးစစ်ကြီးများစွာကို ဆင်နွှဲပြီး ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)၏ အခိုင်အမာဒေသဖြစ်သော ကော့မူးရာကို သိမ်းယူသည်။
ထိုစဉ်က တောင်ကုန်းတခုကို သိမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ် သေနင်္ဂဗျူဟာကျသော တောင်ကုန်းတခုကို ရှင်းလင်းခြင်းသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ မဟုတ်လျှင်ပင် လပေါင်းများစွာကြာပြီး နှစ်ဖက်စလုံးမှ အကျအဆုံးများသည်။ ယနေ့တွင် မြန်မာ စစ်တပ်သည် ထိုသို့သော အခြေအနေတွင် ခြေလျင်တပ်များကို မစေလွှတ်တော့ဘဲ ဒုံးကျည်များ တပ်ဆင်ထားသည့် ရုရှားလုပ် တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်စခန်းများကို ပစ်ချမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝါရင့် ကရင်တိုက်ခိုက်ရေးသမားများက ပြောသည်။
KNU ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဘိုမြ၏ သား နာဒါမြ(ယာဘက်မှ ရေတွက်ပါက ၃ယောက်မြောက် စစ် ဆွယ် တာ ဝတ်ဆင်ထားသူ)အား ၂၀၀၀ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းက ကရင်ပြည်နယ် တောတွင်း တနေရာ၌ ကရင်ရဲဘော် များနှင့်အတူ တွေ့ရစဉ်
နှစ်ဖက်အကြား ကြီးမားသည့် နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်က ထိုင်း- မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက်တွင် တိုက်ခိုက် ခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်သည့် အမျိုးမျိုးသော အင်အားစုများအတွက် အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်သော
မာနယ်ပလောကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးပြီးနောက် ကျော်ကြားလှသော ကော့မူးရာခံစစ်စခန်းကိုလည်း စစ်တပ်က တိုက်ခိုက်သိမ်း ယူသောကြောင့် ဆုံးရှုံးရသည်။
ထိုမှစတင်သည့် ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ကရင်လက်နက်ကိုင် လှုပ်ရှားမှုသည် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော အခြေအနေ တခုသို့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။
ဒီမိုကရက်တစ် ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတပ်မတော် (DKBA) နှင့် စောချစ်သူ
KNU ခေါင်းဆောင်များ မာနယ်ပလောမှ ဆုတ်ခွာရသောအခါ ကရင်လက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုသည် အုပ်စုအမျိုးမျိုး အဖြစ် အစိပ်စိပ်အမွှာမွှာ ကွဲသွားခဲ့သည်။
ထိုအုပ်စုများအနက်တခုဖြစ်သော စောချစ်သူခေါင်းဆောင်သည့် DKBA သည် မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ပူးပေါင်းရန် ဆုံဖြတ် လိုက်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် သူသည် ကော့မူးရာ စခန်းကို ထိန်းချုပ်ခွင့်ရလိုက်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ထို လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးစီးသောအခါ စောချစ်သူ၏ တပ်များကို မြန်မာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ လက်အောက်တွင်ရှိသည့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ (Border Guard Forces) တခုအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလိုက်သည်။
BGF တွင် ပါဝင်ရာ၌ စောချစ်သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သူ၏အဖွဲ့နှင့် ထိုစဉ်က နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (SPDC) ဟု သိကြသည့် စစ်အစိုးရအကြား ဆက်ဆံရေး တည်ငြိမ်စေရန် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးအတွက် အလားအလာ ကောင်းမည်ဟုလည်း သူနှင့်သူ၏ အရာရှိများက ယူဆခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်က ဖားအံခရိုင်တွင် ပြုလုပ်သည့် ကရင်တော်လှန်ရေးနေ့တွင် တွေ့ရသည့် KNU တပ်သားများ (ထက်ဝေ/ဧရာဝတီ)
တကယ်လည်း ထိုအကြောင်းအရာသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လထုတ် ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်း၏ မျက်နှာဖုံး သတင်းတပုဒ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုမျက်နှာဖုံးသတင်းက စောချစ်သူနှင့် သူ၏ အဖွဲ့သည် ထိုစဉ်က စီးပွားရေးသက်သက်ကိုသာ စိတ်ဝင်စား ကြောင်း အခိုင်အမာတင်ပြပြီး ထိုစဉ်က သူတည်ဆောက်ထားသော စီးပွားရေးအင်ပါယာအကြောင်းကို ဖေါ်ပြသည်။
ထိုသို့ အသွင်ကူးပြောင်းလိုက်ခြင်းသည် မြန်မာစစ်တပ်အတွက် အဆင်ပြေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း တရုတ် နယ်စပ်တွင်လည်း အလားတူ ဖြစ်ရပ်မျိုး ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ဖြစ်သည်။
တရုတ်နယ်စပ်တွင် အမည်ဆိုးနှင့် ကျော်ကြားသည့် ဝနှင့် ကိုးကန့်အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အုပ်စု များသည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် စစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူပြီး ကာစီနိုများဖွင့်ရန်နှင့် မူးယစ်ဆေးနှင့် အခြားတရားမဝင် မှောင်ခိုမှုများ လုပ်ရန် လုံးဝလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ပေးအပ်ခံရသည်။ အရာရာ အဆင်ပြေခဲ့ပါသည်။
ထိုအဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့၏ တရားမဝင်လုပ်ငန်းများ၊ တရားဝင်လုပ်ငန်းများ စစ်အစိုးရ၏ စောင်မကြည့်ရှုမှုဖြင့် လုပ်ခွင့် ရခဲ့သည်ဟု ဆိုရမည်။
စောချစ်သူ၏ များပြားလှစွာသော စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားများတွင် BGF အထူးတပ်ရင်း အမှတ် ၉၉၉၏ တပ်မှူးအဖြစ် စောချစ်သူသည် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွင် အကြီးအကျယ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။ ထိုသို့ စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားကို ရှေ့တန်းတင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စောချစ်သူသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် KNU ၏ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သော ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KNLA)၏ တပ်မဟာ ၇ ကို တိုက်ခိုက်သည်။
၂၀၁၉ ခု သြဂုတ်လ ရွှေကုက္ကိုလ်တွင် ပြုလုပ်သည့် နယ်ခြားစောင့်တပ်(BGF) ၉ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား (ထက်ဝေ/ဧရာဝတီ)
ထို ထိုးစစ်ကြောင့် ကရင်ကျေးရွာ ရွာသူရွာသားပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရပြီး ထိုဒေသတွင်းတွင် ဖရိုဖရဲဖြစ်ခဲ့ရသည်။ စောချစ်သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ စီးပွားရေးဇုန်တခု တည်ဆောက်နိုင်မည့် ပိုင်နက်ချဲ့ထွင် ရေးဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း စောချစ်သူ ရည်မှန်းခဲ့သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အင်ပါယာကြီးတခုကို စီမံ အုပ်ချုပ်မည့် အိပ်မက်သည် အကောင်အထည် ပေါ်လာခဲ့တော့သည်။
ယနေ့တွင် သူသည် မြဝတီမြို့နယ်မှ သူအဓိက ရှယ်ယာပါဝင်သည့် စီမံကိန်းကြီးတခုရှိသော ရွှေကုက္ကိုမှ စံအိမ်ကြီးတွင် ဇိမ်ကျကျနေသည့် သန်းကြွယ်သူဌေး (တပ်မှူးနှင့် လောင်းကစားသမား) တယောက်ဖြစ်သည်။
သူသည် ကျည်ကာယာဉ်များ၊ လက်နက်ကိုင် သက်တော်စောင့်များဖြင့် ခရီးသွားလာတတ်သည်။ မကြာသေးမီက သူသည် လွန်စွာချမ်းသာကြွယ်ဝသည့် မိတ်ဆွေသစ်များဖြစ်သည့် တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့သည်။
ထိုသို့ ပဟေဠိဆန်သော တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ကြီးမားသော စီးပွားရေးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းတခု ပြုလုပ်ရန် အကြံအစည်ဖြင့် BGF ထိန်းချုပ်ထားသည့် နယ်မြေအနီးရှိ ထိုင်းနယ်စပ်သို့ ၂၀၁၇ နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်များတွင် ရောက် လာကြသည်။
ထိုအချိန်မှစတင်ပြီး ကွန်ကရစ် အဆောက်အအုံများ၊ ကာစီနိုများ၊ တန်ဘိုးကြီးမားသည့် စံအိမ်ကြီးများ၊ အကောက်ခွန် မဲ့ရောင်းသော အဆောက်အအုံများနှင့် ဟိုတယ်များသည် ထိုဒေသတွင် မှိုပေါက်သလို ပေါ်လာတော့သည်။ ထိုင်း၊ တရုတ်၊ ကရင်နှင့် အခြားသူများအပြားသည် ထိုဒေသသို့ စုပြုံဝင်ရောက်လာကြသည်။
KNU နှင့် Huanya International City အုပ်စု ပြုလုပ်မည့် တရုတ် မြို့သစ်စီမံကိန်း
ကရင်ပြည်နယ်၏ ထိုအပိုင်းတွင် သေနတ်သံများ တိတ်ဆိတ်ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ကာစီနိုများ တည်ဆောက်ရန် ယူဆောင်လာသည့် ဆောက်လုပ်ရေး ကိရိယာကြီးများ၏ အသံများက အစားထိုးဝင်ရောက်လာသည်။ သို့သော် ထိုကာစီနိုများသည် ဒေသခံကရင်များနှင့် အခြားနေထိုင်သူများ မကြာသေးမီ ၁၀ စုနှစ်များအတွင်း စောင့်မျှော်နေ သည့် အရာများ မဖြစ်နိုင်ပေ။
ပဋိပက္ခများပြားသည့် အင်ဒိုချိုင်းနားဒေသကို စစ်မြေပြင်မှ ဈေးကွက်ကြီးတခု အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေရန် ကွယ်လွန် သူ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ချက်တီချိုင် ချွန်ဟဗန်၏ တောင့်တပြောကြားချက်ကို လက်တလုံးခြား အသုံးချပြီး စောချစ်သူနှင့် စိတ်တူကိုယ်တူ ကရင်ခေါင်းဆောင်များသည် ကရင်ပြည်နယ်မှ စစ်မြေပြင်ကို ကြီးမားလှသည့် ကာစီနို အပန်းဖြေ စခန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တော့သည်။
ထိုစီမံကိန်းမှာ လောင်းကစားလုပ်ငန်းသာမက ငွေကြေးခဝါချခြင်း၊ ဗဟိုဘဏ်ထိန်းချုပ်မှု မရှိသည့် အီလက်ထရွန်းနစ် ငွေကြေးရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့် အခြားရာဇဝတ်ဂိုဏ်းကွန်ရက်များ အတွက်ပါ အချက်အခြာနေရာဖြစ်သော လူထု ထောက်ခံမှု မရှိသည့် စီမံကိန်းဖြစ်သည်။
သို့သော် အဆင့်ပိုမိုမြင့်မားသည့် အာဏာပိုင်များ၏ စောင်မကြည့်ရှုမှုနှင့် တိတ်တဆိတ် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ စောချစ်သူ သည် ထိုမျှကြီးမားသော စီမံကိန်းကို အကောင်အထည် ဖေါ်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိပ်သီး လုပ်ငန်းရှင် ကြီး ၁၀ အနက်တဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတဦးသည် တရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ များနှင့် နေပြည်တော်မှ သြဇာကြီးမားသူများ အကြား သဘောတူညီချက်ရအောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက် ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် စောချစ်သူနှင့် မြန်မာယာထိုင်ကုမ္ပဏီ (Myanmar Yatai Company) တို့ အကြား တွင် ရွှေကုက္ကိုမြို့ပြ တည်ဆောက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူ စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုကြသည်။ ထိုစီမံကိန်းသည် ပင်လယ်ရပ်ခြားနေ တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်များ (Overseas Chinese) အဖွဲ့ချုပ်က မူလတင်ပြခဲ့သော စိတ်ကူးအပေါ်တွင် အခြေခံသည့် စီမံကိန်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် (MIC) က ရွှေကုက္ကိုအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂.၅ သန်း တန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆိုပြုချက်ကို အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ထိုအဆိုပြုချက်တွင် သုံးနှစ်အတွင်း မြဝတီမြို့နယ်မှ မြေ ၁၀.၃ ဟက်တာ (၂၅.၅ ဧက) ပေါ်တွင် စံအိမ်ကြီး ၅၉ လုံး တည်ဆောက်ရန် ဖေါ်ပြထားသည်။
Yatai International Holding Group သည် ထိုစီမံကိန်းတွင် အဓိက ရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ပြီး စောချစ်သူက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ဆိုင်သည်။ ထိုသဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးချိန်မှ စတင်ပြီး ထောင်နှင့်ချီသော တရုတ် အလုပ်သမားများ ကို ထိုစီမံကိန်း တည်ဆောက်ရေးအတွက် ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြသည်။
KNU ကာကွယ်ရေးဌာန အကြီးအကဲ စောရော်ဂျာခင်(နေကာမျက်မှန်တပ်ဆင်ထားသူ) တက်ရောက်သည့် တရုတ်မြို့သစ် တည်ဆောက်ရေး အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနား
သို့သော် ထိုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကြော်ငြာများတွင်မူ ထိုစီမံကိန်းသည် ဒေါ်လာ ၁၅ ဘီလျှံတန်ပြီး စက်မှုဇုန် များ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများနှင့် ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများ သာမက ဘလော့ချိန်း (Block Chain) ဟု ခေါ်သည့် အီလက် ထရွန်းနစ် ရောင်းဝယ်မှု မှတ်တမ်းကို အထူးပြုသည့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာဇုန် တခုလည်း ပါဝင်ကာ ကရင်ပြည်နယ်မှ မြေ ၁၈၀၀၀၀ ဧက (၇၃၀၀၀ ဟက်တာ) တွင်အကောင်အထည်ဖေါ်မည်ဟု YIHG ကဖေါ်ပြသည်။
တရုတ်ဘာသာနှင့် ဆိုပါက ဧက ၁၈၀,၀၀၀ မဟုတ်ဘဲ ဧက ၂၉,၀၀၀ ခန့်ဟု အချို့သတင်းများက ပြောကြားသည်။ (ထပ်မံအတည် ပြုရန် လိုသည်)၊ (ဘလော့ချိန်း ဆိုသည်မှာ ဗဟိုဘဏ် ထိန်းချုပ်မှုကင်းသည့် ဘစ်ကွိုင် (Bitcoin) ကဲ့သို့သော အီလက်ထရောနစ်ငွေကြေးကို အထောက်အပံ့ပေးသည့် နည်းပညာဖြစ်သည်။)။ ထိုစီမံကိန်းသည် တရုတ်-ထိုင်း-မြန်မာ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဖြစ်သည်ဟု YIHG ကဆိုသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး အင်စတီကျု (USIP) က ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာများအရ ဘေဂျင်း၏ ကြီးမားလှသော ရပ်ဝန်းနှင့် လမ်းအစီအစဉ် (BRI) အခြေခံအဆောက်အအုံ စီမံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် မြန်မာ နိုင်ငံနှင့် လုပ်ကိုင်နေသည်ဆိုသော ထိုစီမံကိန်းကို ကျောထောက်နောက်ခံပေးသည့် တရုတ်များသည် လက်တွေ့တွင် ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် အရှေ့တောင်အာရှ အခြားနေရာများတွင် လုပ်ငန်းမလုပ်နိုင်တော့သောကြောင့် ပြောင်းရွှေ့လာသူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် အရှေ့တောင်အာရှ အခြားဒေသများရှိ တရုတ်နိုင်ငံသားများကို ပစ်မှတ်ထားသည့် တရားမဝင် လောင်းကစားလုပ်ငန်းများကို အဓိကအားဖြင့် ဗဟိုပြုပြီး တရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းများနှင့် ထိုနိုင်ငံများမှ မလိုလားသူ များကို ဆွဲဆောင်ထားသည့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများကို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အဖွဲ့များက ဖြိုခွဲသောကြောင့် မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ရွှေ့ပြောင်းလာခြင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘောဒီးယား ဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်က အွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းများသည် ငွေကြေးရာဇဝတ်မှုနှင့် အခြား ရာဇဝတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်နေသောကြောင့် ပိတ်ပင်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ပြီးနောက် ထိုတရားမဝင် စီးပွားရေး သမားများသည် ထိုနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်သည်။
တစိတ်တပိုင်းအားဖြင့်လည်း ဟွန်ဆန်သည် ထိုအွန်လိုင်းကာစီနိုများကို ပိတ်ပင်ရန် တရုတ်အစိုးရက ကမ္ဘောဒီးယား အစိုးရ အပေါ်ပေးနေသော ဖိအားကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ပဟေဠိဆန်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ များသည် ကရင်ပြည်နယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
Yatai International Holding Group ကို ဟောင်ကောင်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ရုံးချုပ်ကို ဘန်ကောက်မြို့တော်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
တရုတ်မြို့သစ် စီမံကိန်းအတွက် KNU နှင့် Huanya International City အုပ်စုတို့ လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် အခမ်းအနား
တရားမဝင်သော လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ၎င်းတို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝန်းများအပေါ် ကာစီနိုများက ဖြစ်ပေါ်စေမည့် သက်ရောက် မှုများ အပေါ် ဒေသခံများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ထည့်မတွက်လျှင်ပင် ထိုစီမံကိန်းသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ မြေယာသိမ်းယူခြင်း၊ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း အတိုင်းအတာအပေါ် ရှုပ်ထွေးမှုများရှိခြင်းနှင့် တရုတ်ငွေများ ပုံမှန် စီးဝင်နေခြင်းတို့ကြောင့် ဝေဖန်မှုများ ခံနေရသည်။
ဇူလိုင်လက လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတခုတွင် မြဝတီမြို့နယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိန်ဘိုက ထိုစီမံကိန်း၏ တိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းတခုကို MIC သို့မေးသည်။
“ဒေသခံတွေက တကယ်တော့ ဒီစီမံကိန်းကို မထောက်ခံကြဘူး။ ကာစီနိုစီးပွားရေးတွေ ပါမယ်ဆိုရင် ဒေသခံတွေက ဒီစီမံကိန်းကို ထာဝရ ရပ်ဆိုင်းစေချင်ကြတယ်။ မြဝတီမှာ ဒေသခံတွေနဲ့ တရုတ်တွေအကြား တင်းမာမှုတွေ အများကြီး ဖြစ်နေတယ်။ မြဝတီကို တရုတ်တွေ တရားမဝင် လာရောက်တာကို နှိမ်နင်းဖို့ ဒေသခံတွေက တောင်းဆိုတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲ တွေ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က အများအပြားဖြစ်ခဲ့တယ်။ မြို့ထဲမှာ တရုတ်ဘာသာနဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေများလာတာကို ဒေသခံတွေ က မနှစ်မြို့ကြဘူး” ဟု ထိုစဉ်က ဧရာဝတီသတင်းဌာနသို့ ဦးစိန်ဘို ပြောသည်။
တရုတ်မြို့တော် (China Town) ဟု ခေါ်ကြသော ထိုစီမံကိန်းကြီးသည် ကရင်ပြည်နယ်ကိုကျော်ပြီး နိုင်ငံခြား မီဒီယာ များ၏ ဝေဖန်ဖေါ်ပြမှု၊ ရန်ကုန်ရှိ နိုင်ငံခြားသံရုံးများနှင့် အမေရိကန်ကွန်ဂရက်၏ သတိပေး စူးစိုက်မှုကိုပင်ခံခဲ့ရသည်။
ထို့အပြင် ရွှေကုက္ကိုသည် ကရင်ပြည်တွင် တခုတည်းသော ထိုကဲ့သို့ စီမံကိန်း မဟုတ်ပေ။ The Saixigang Industrial Zone နှင့် Huanya International City စီမံကိန်းများကိုလည်း အကောင်အထည်ဖေါ်နေသည်။
စောချစ်သူအပြင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြားကရင် အထက်လွှာများသည် ထို စီမံကိန်းများတွင် ပါဝင်ပတ်သက် နေပုံရသည်။
ဥပမာဆိုရပါက အမှတ် ၁၀၂၂ နယ်ခြားစောင့် တပ်ခေါင်းဆောင်များအနက် တဦးဖြစ်သူ စောမုတ်သုန်သည် တရုတ် နိုင်ငံက ငွေကြေးစိုက်ထုတ်သည့် စီမံကိန်းများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေပြီး ကရင်ပြည်နယ်တွင် မြေများရယူထားသည်။ သူသည် စောချစ်သူထက်ပင် ပိုမိုချမ်းသာပြီး ငွေအချို့ကို စင်္ကာပူဘဏ်များတွင် အပ်နှံထားသည်ဟု ဆိုကြသည်။
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)ကိုယ်တိုင်လည်း ထိုစီမံကိန်းများတွင် မည်သို့ ပတ်သက်နေသည်ကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်းမသိရပေ။ အချို့သော KNU ခေါင်းဆောင်များနှင့် Huanya International City အုပ်စုသည် ကရင် အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(KNLA) တပ်မဟာ ၆ ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် တရုတ်မြို့တော် စီမံကိန်းတခု အကောင်အထည်ဖေါ်ရန် ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။
၎င်းတို့၏ အဖွဲ့အစည်းသည် ထိုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် မည်သည့် သဘောတူညီချက်ကိုမျှ မလုပ်ရသေး ကြောင်းနှင့် ထိုစီမံကိန်းသည် KNU နှင့် ပတ်သက်ခြင်းမရှိကြောင်း KNU ထိပ်တန်းအရာရှိများက ပြောသော်လည်း KNU နှင့် ပတ်သက်သူများ တသီးပုဂ္ဂလအနေဖြင့် ပါဝင်နိုင်သည်ဟု ဝန်ခံကြသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လက မြင်တွေ့ရသည့် ရွှေကုက္ကိုလ် မြို့သစ်စီမံကိန်းမှ ဆောက်လုပ်ဆဲ အဆောက်အအုံများ (ထက်ဝေ/ဧရာဝတီ)
ယခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလက ကျင်းပသည့် KNLA တပ်မဟာ ၆ ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှ စီမံကိန်းအတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားတခုတွင် တရုတ်နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာများဖြင့် ရေးသားထားသည့် စာတန်းတွင် “KNU နှင့် Huanya International City ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် အုတ်မြစ်ချ အခမ်းအနား”ဟု ရေးသား ထား သည်။
KNU ကာကွယ်ရေးဌာန အကြီးအကဲ စောရော်ဂျာခင်က တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ကုမ္ပဏီတွင် ကျင်းပသည့် ထိုအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ကွယ်လွန်သူ KNU ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြ ၏ သားဖြစ်သူ နာဒါမြသည်လည်း သီးခြား မြို့သစ်စီမံကိန်း တခုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်။ (မြန်မာစစ်တပ်မှ ထိပ်တန်းအရာရှိများနှင့် နီးကပ်သော ဆွေမျိုးများကဲ့သို့ပင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်အများအပြား၏ မိသားစုဝင်များသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်း တွင်သာမက ပြည်ပရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများစွာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေခဲ့ကြသည်)။
ထိုစီမံကိန်းသည် KNLA တပ်မဟာ ၇ ထိန်းချုပ်ဒေသတွင် အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်ရှိပြီး သြစတြေးလျနှင့် စင်္ကာပူမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများပါဝင်သည်ဟု သတင်းများက ဆိုသည်။ ရွှေကုက္ကိုစီမံကိန်းအပေါ် ဝေဖန်မှုများရှိနေသောကြောင့် လတ်တလောတွင် ထိုစီမံကိန်းကို ဆိုင်းငံ့ထားသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ KNU မှ အချို့ အပါအဝင် ကရင်ထိပ်တန်းအရာရှိ အများအပြားသည် ကရင်ပြည်နယ်မှ ဟိုတယ်များ၊ အပန်းဖြေစခန်းများနှင့် မြို့သစ် အများအပြားတည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများအတွက် မြေယာသိမ်းဆည်းမှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟုလည်း စွပ်စွဲခံနေရသည်။
ကရင်ပြည်နယ်မှ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခနယ်မြေ၏ ဗဟိုချက်တွင် တရုတ်တို့ စီမံသည့် ကာစီနိုများ ရှိနေခြင်းကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့် လေးနက်သော ပူပန်မှုများ ဖြစ်စေသည်မှာ အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပေ။
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ် အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ ပဋိပက္ခလေ့လာရေး အုပ်စု International Crisis Group (ICG) က “ဒေသခံပြည်သူများက နက်ရှိုင်းစွာ မုန်းတီးပြီး အဓိက လက်နက်ကိုင်အင်အားစု တခုကို တုန်လှုပ်စေသော စီမံကိန်းတခု ဖြစ်သည့် ရွှေကုက္ကိုသည် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတခုကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ကရင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း အမျိုးမျိုးကြား ရရှိထားသည့် ထိခိုက်လွယ်သော အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုကို တစစီပြိုကွဲသွားစေနိုင် သည်” ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
ထိုဒေသအတွင်းသို့ တရုတ်အလုပ်သမားများ အလုံးအရင်း ဝင်ရောက်လာခြင်း၏ စီးပွားရေး အကျိုးဆက်များနှင့် လူမှုရေး သက်ရောက်မှုများကိုလည်း ထိုအဖွဲ့က ထောက်ပြခဲ့သည်။ ရွှေကုက္ကိုတွင် တရားမဝင် တရုတ်အလုပ်သမား အများအပြားကို လက်ခံထားပြီး ထိုမြို့၏ အွန်လိုင်း လောင်းကစားလုပ်ငန်းများသည် အောင်မြင်နေသည်ဟု ယုံကြည် ရသည်။
ထိုစီမံကိန်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် BGF သည် ၎င်းတို့ အစောင့်များနှင့် စစ်သားများကို လက်နက်များ ပိုမိုတပ်ဆင်ပေးရန် လိုသောကြောင့် နယ်စပ်တလျှောက် လက်နက်မှောင်ခိုမှုများ မြင့်မားစေနိုင်သည် ဟုလည်း ခန့်မှန်းရသည်။
“တို့မြေများကို လောင်းကစားပစ်ခြင်း” အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာတွင် ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး ပံ့ပိုးမှု ကွန်ရက် (KPSN) က ထိုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကျိုးကြောင်းဆီလျှော်သည့် ပူပန်မှုများကို ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး ထိုစီမံကိန်းသည် ကရင်ပြည်သူ များအတွက် အကျိုးမရှိဘဲ နိုင်ငံဖြတ်ကျော် မာဖီးယား ဂိုဏ်းများနှင့် မြန်မာစစ်တပ်ကိုသာ အကျိုးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့သည်။
ရွှေကုက္ကိုမှ ရှယ်ယာရှင်များသည် နေပြည်တော်တွင် သဘောတူညီမှုတခု ရယူခဲ့ရမည် ဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါ အဖွဲ့က စွပ်စွဲထားသည်။
KPSNက အထက်ပါ အစီရင်ခံစာတွင် “စီမံကိန်းကို ဆက်လက် မလုပ်ဆောင်မီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် နေပြည်တော် မှ ထိပ်တန်းစစ်အရာရှိများနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ အကြီးအကျယ်ပါဝင်သည့် သဘောတူညီမှုရရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း သံသယရှိရန် မလိုသလောက်ပင် ဖြစ်သည်။ မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များအတွက် ထိုစီမံကိန်းသည် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိသော စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ အငြင်းပွား နေသော ကရင်ပိုင်နက်ကို ထိန်းချုပ်မှု ခိုင်မာစေပြီး ဘဏ္ဍာရေး အကျိုး အမြတ်လည်း များစွာရရှိသည်”ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။
တရုတ်တို့၏ မတည်ငွေဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် ရွှေကုက္ကိုလ် မြို့သစ်စီမံကိန်းမှ ဆောက်လုပ်ဆဲ အဆောက်အအုံများ (ထက်ဝေ/ ဧရာဝတီ)
ထိုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သော စစ်ဆေးရေး ခုံရုံးတခု ဖွဲ့ထားကြောင်း မြန်မာအစိုးရက ဇွန်လတွင် ကြေညာသည်။ ထိုအဖွဲ့သည် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်ခဲ့သော်လည်း မည်သည့်အစီရင်ခံစာကိုမျှ ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပေ။
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးတင်မြင့်အား ထိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံး၏ ဥက္ကဌအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကာစီနိုလုပ်ငန်းများကို တရားဝင်စေသည့် ဥပဒေကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလက ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော်လည်း ထိုမြို့တော် စီမံကိန်းနေရာတွင် ကာစီနိုလုပ်ငန်းလုပ်ရန် အစိုးရက တရားဝင်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိကြောင်း သူက ပြော သည်။ သို့သော် ထိုဥပဒေအရ နိုင်ငံခြားသားများသာ ထိုကဲ့သို့သော ကာစီနိုများတွင် လောင်းကစားခွင့်ရှိသည်။
“ရွှေကုက္ကိုမှာ ကာစီနိုလုပ်ငန်းတွေကို ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင် အဲဒီဒေသမှာ ဘယ်လောင်းကစားမှု မျိုးကိုမှ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာမရှိဘူး”ဟု သူက ပြောခဲ့သည်။
မြဝတီမှ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများသည် ခွင့်ပြုထားသည့် စီမံကိန်း အတိုင်းအတာထက် များစွာ ကျော်လွန်နေ ကြောင်း ပြည်တွင်း မီဒီယာများက ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကပင် သတင်းဖေါ်ပြခဲ့သည်။ ထိုစီမံကိန်း၏ ကာစီနိုလုပ်ငန်းများနှင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းထားရန် မြန်မာစစ်တပ်က ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် အမိန့်ပေးသည်။
နောက်တွင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ထိုစီမံကိန်းသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချိုးဖေါက်သည်ဟု ဆိုကာ ယာယီဆိုင်းငံ့ရန် ကရင်ပြည်နယ်အာဏာပိုင်များက အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။
သို့သော် ကာစီနိုလုပ်ငန်းများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုပါ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြောင်း သတင်းများက ဆိုသည်။
လက်တွေ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ထိန်းချုပ်မှုများ ချမှတ်ထားသည့် ကြားမှပင် YIHG သည် ၎င်းတို့၏ ကာစီနိုနှင့် အွန်လိုင်းလောင်းကစား လုပ်ငန်းများတွင် ဝန်ထမ်းများပင် ပိုမိုခန့်ထားနေသည်။
အစိုးရ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ခုံရုံးသည် အောက်ခြေမှ မှန်ကန်သည့် သတင်းအချက်အလက်ရရှိရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရွှေကုက္ကို စီမံကိန်းကို လေ့လာစောင့်ကြည့်နေသူ အများအပြားက သံသယရှိကြသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို တရုတ်က ထောက်ခံ
ထိုစီမံကိန်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရည်မှန်းချက်ကြီးမားလှသော BRI စီမံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကြီးမားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ စီမံကိန်းကြီးများကို အကြီးအကျယ် အကျိုးပြုရန်ဖြစ်ကြောင်း YIHG ၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် လိမ်လည်ဖေါ်ပြထားသည်။
ယခုအပတ်အတွင်းတွင်မူ ထိုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် မသမာမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုပ်ဆောင်မှု ကို တရုတ်နိုင်ငံက ထောက်ခံကြောင်း တရုတ်သံရုံးက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည်။
ထိုစီမံကိန်းအား စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အဖွဲ့ကို အစိုးရက ဥပဒေနှင့် ထူထောင်သည်ဟု ထိုကြေညာချက်က ဖေါ်ပြပြီး “တရုတ်နိုင်ငံသည် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ထောက်ခံသည်”ဟု ထိုကြေညာချက်ကဆိုသည်။
ထိုင်း- မြန်မာနယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ် သောင်ရင်းမြစ် နံဘေးရှိ ပြည်တွင်း နေရပ်စွန်ခွာသူများ နေထိုင်ရာ အီထူထ စခန်းတွင် တွေ့ရသူတဦး
တရုတ်သံရုံး၏ အဆိုအရ ထိုစီမံကိန်းသည် တတိယကြားနိုင်ငံတခု၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ပြီး BRI နှင့်ပတ်သက်ခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။ တရုတ်နှင့် မြန်မာအစိုးရများသည် ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သဘောတူ ကြောင်းကိုလည်း သံရုံးကအလေးထားပြောသည်။
သို့သော် ထိုစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရုတ်အစိုးရက ယခုအပတ်အထိ ကာလကြာမြင့်စွာ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခြင်း သည် သံသယများကို ဖြစ်စေရုံသာမက မြန်မာနိုင်ငံမှ လက်ရှိ BRI စီမံကိန်းများ၏ ပုံရိပ်ကိုလည်း ထိခိုက်စေခဲ့သည်။
ထုတ်ပြန်ထားသော အချက်အလက်များအရ ရွှေကုက္ကိုစီမံကိန်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သော ပင်လယ်ရပ်ခြား တရုတ်များ သည် တရုတ်ပြည်မကြီးမှ တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ကန်ထရိုက်တာများကို ငှားရမ်းထားပြီး တရုတ်အစိုးရ၏ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများသည် အကျိုးအမြတ် အကြီးအကျယ် ရရှိနေသည်ဟုလည်းယုံကြည်ရသည်။
ထိုရွှေကုက္ကို တရုတ်မြို့တော် စီမံကိန်းသည် လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများစွာ လှုပ်ရှားနေပြီး၊ KNU အုပ်စုကွဲ နှစ်ခု ဖြစ်နေဆဲ ကရင်ပြည်နယ်တွင် အာဏာယန္တရားသစ် တခုကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ထို စီမံကိန်းကြီးသည် ကရင်အုပ်စုများအကြား သြဇာအာဏာခွဲဝေ ညီမျှခြင်းကို ပြောင်းလဲသွားစေသောကြောင့် ကရင်ပြည်နယ်၏ မူလကပင် ထိလွယ်ရှလွယ် ဖြစ်နေ သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြင်းထန်သော ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်စေသည်။
ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် သိမ်မွေ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အကြားတွင် တရုတ်ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းများသည် မည်သို့မည်ပုံ ကာစီနိုများနှင့် ဇိမ်ခံစံအိမ်ကြီးများပါဝင်သော ကြီးမားသည့် စီမံကိန်းကို တည်ဆောက်ရန် အချိန် ၂နှစ် ရအောင် မည်သို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သနည်း ဆိုသော မေးခွန်းသည် လွန်စွာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှပေသည်။
မည်သည့်အတွက် အရပ်သားအစိုးရနှင့် စစ်ဖက်သည် ထိုစီမံကိန်း၏ ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့် ကရင်ပြည်နယ်အပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုကို မသိရှိကြဘဲ ထိုစီမံကိန်းကို မရပ်တန့်ခဲ့ကြသနည်း။
မကြာသေးမီ ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှာ တရုတ်နှင့် အချို့သော ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ရာဇဝတ်ဂိုဏ်းများသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ရန် အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်း သားဒေသများတွင် ချဲ့ထွင်ရန် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့် အခြင်းအရာပင် ဖြစ်သည်။
BGF သည် မြန်မာစစ်တပ်၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိသည်ဆိုသော အချက်ကိုလည်း မမေ့သင့်ပေ။ ထိုသို့ ရှိသည့်တိုင် BGF သည် အစိုးရ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရှောင်ကွင်းကာ နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
၂၀၁၇ခုနှစ်က ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းတကျောင်းတွင် လာရောက်ခိုလှုံနေသည့် စစ်ဘေးရှောင် မိသားစု(မျိုးမင်းစိုး/ဧရာဝတီ)
အဓိကအားဖြင့်ဆိုရပါက နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှ အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် အချို့သော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ သည် တရားဝင်နှင့် တရားမဝင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ကိုင်ရန် အခွင့်အရေး ရရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့သော အခွင့်ထူးခံ အဆင့်၏ အခြေခံသည် မည်သို့ဖြစ်ခဲ့သနည်း၊ ၎င်းတို့သည် ဥပဒေ၏ အထက်တွင် ရှိနေကြပါ သလား ဆိုသည်ကို မေးစရာပင်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး အင်စတီက USIP က ၎င်း၏ အစီရင်ခံစာတွင် ထောက်ပြခဲ့သည့် အတိုင်း ရွှေကုက္ကိုစီမံကိန်းသည် ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ဒေသအတွက် လူမှုအကျိုးစီးပွား မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ကြေညာထားသော မြန်မာနိုင်ငံ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး စီမံချက်နှင့်လည်း ကိုက်ညီခြင်းမရှိပေ။
မြန်မာနိုင်ငံမှ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ (လက်နက်ကိုင်တပ်များနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့)သည် စစ်တပ်နှင့် ပတ်သက်သည် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများကို သီးခြား ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့် လုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုပြီး မကောင်းသော ဥပမာသာဓကကို ချမှတ်နေသည်ဟု ထိုအစီရင်ခံစာက သတိပေးပြီး ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
အစိုးရနှင့် တပ်မတော်တို့သည် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားနှင့် နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ရန် တာဝန်ရှိသည်၊ သို့သော် ရွှေကုက္ကိုစီမံကိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ချိုးဖေါက်ခြင်းထက် လုံး၀ လျှော့ကျခြင်း မရှိကြောင်း ကောက်ချက်ချရန် ခိုင်မာသော အထောက်အထားများက ပြသနေပေသည်။
အယ်ဒီတာချုပ် အောင်ဇော်၏ In Myanmar’s Karen State, Ex-Insurgents CreateaHaven for Chinese Casino Bosses ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
]]> တရုတ်-အမေရိကန် စကားစစ်ပွဲက နေပြည်တော်၏ သစ္စာခံမှုကို စမ်းသပ်နေ https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2020/07/27/226992.html Mon, 27 Jul 2020 07:57:24 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=226992
မြန်မာ့မြေတွင် တရုတ်နှင့် အမေရိကန်တို့၏ မကြာသေးမီက အငြင်းပွားမှုကို မိမိတို့ မည်သို့ ဖွင့်ဆိုသင့်သနည်း။
The post တရုတ်-အမေရိကန် စကားစစ်ပွဲက နေပြည်တော်၏ သစ္စာခံမှုကို စမ်းသပ်နေ appeared first on ဧရာဝတီ.
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရုတ်နှင့် အမေရိကန် သံရုံးတို့ကြား ဖြစ်ခဲ့သော စကား စစ်ထိုးပွဲသည် စစ်အေးတိုက်ပွဲကို ပြန်ပြောင်း အမှတ်ရစရာဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အေးတိုက်ပွဲသစ် စတင်ကြောင်း အချက်ပြလိုက်သကဲ့သို့လည်း ဖြစ်နေသလားဟုလည်း မေးစရာရှိသည်။
ထိုသို့ ဖြစ်လျှင် မိမိတို့သည် အနာဂတ်တွင် လက်ဝေခံစစ်ပွဲနှင့် ပိုမိုများပြားသော ပဋိပက္ခများကို မျှော်လင့်ပြီး ထိုအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရန် လိုမလို စဉ်းစားရတော့မည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်နှင့် အမေရိကန်ကြား တင်းမာမှုများသည် အထူးသဖြင့် အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်မှု ဆုံးရှုံးခြင်း ပြဿနာတွင် ပိုမို ဆိုးရွားလာမည်ဖြစ်သည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
လက်တွေ့ အခြေအနေတွင်မူ တရုတ်နိုင်ငံကို မြန်မာနိုင်ငံ၌ လူကြိုက်များခြင်း မရှိလှသော်လည်း နေပြည်တော်မှ အဆင့်မြင့်အရာရှိများ အနေဖြင့် ထိုသံရုံးနှစ်ခုကြား အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် အစိုးရပိုင် သတင်းစာများတွင် ကြေညာချက်များ ထွက်လာသည်ကို တွေ့ရပါက အံ့သြစရာလိုမည် မဟုတ်ပေ။
မည်သည့် ကြေညာချက်မှ ထွက်မလာလျှင်သာ အံ့သြရမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြန်မာနိုင်ငံသည် လွတ်လပ်သော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို အပေးအယူ မလုပ်သင့်ဘဲ လေးစားရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ပင်။
မြန်မာအနေဖြင့် ဘက်လိုက်မည်ဟု ယူဆလျှင် မိုက်မဲရာ ရောက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အင်အားကြီး နိုင်ငံမဟုတ်သောကြောင့် ကြားနေ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုသာ ဆက်လက်ကျင့်သုံးမည် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အမေရိကန်နှင့် တရုတ်အပါအဝင် အချို့သော နိုင်ငံများကို ကျေနပ်စေမည် မဟုတ်ပေ။
တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးသည် မည်သည့်အခါကမျှ ရိုးစင်းခဲ့သည် မဟုတ်သောကြောင့် ထိုကဲ့သို့ ထိခိုက်လွယ်သော အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံဖက်မှ ပိုမိုများပြားသော သံသယများ ဖြစ်စေသည်မှာ သေချာသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလက ဂျပန်သတင်းဌာန Nikkei Asian Review နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတခုတွင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “ ကျမတို့နိုင်ငံဟာ အရမ်းကို ဘက်မလိုက်တဲ့ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒကို ကျင့်သုံးတယ်။ ကျမအထင်တော့ ဒါဟာ ကျမတို့ နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် အရမ်းကို လက်တွေ့ကျတဲ့ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျမတို့ဟာ သေးငယ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မရှိသေးဘူး။ အရင်ကအတိုင်းပဲ ကျမတို့ဟာ ဘယ်တုန်းကမှ အခြေအနေကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ မရှိပါဘူး” ဟု ပြောခဲ့သည်။
အာဏာရလာပြီးနောက် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အတွင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိတဦးကို သူမ၏ ရုံးတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် အနောက်နိုင်ငံများ၏ သြဇာကြီးထွားလာခြင်းအပေါ် ကြောက်လန့်မှုများကို ကောင်းစွာ သဘောပေါက်သူဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ ၂၀ ရက် ဝါရှင်တန်ရှိ အိမ်ဖြူတော်တွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို သမ္မတဘားရက်အိုဘားမားက လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့စဉ်/ Official White House Photo
အမှန်တရားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တရုတ်နှင့် အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရမည့် ဘ၀ရောက်နေသည်။၂၀၁၅ ခုနှစ် အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်ဘဝက ဘေဂျင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။
ဘေဂျင်းသည် နှစ်နိုင်ငံ အနာဂတ် ဆက်ဆံရေးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အခန်းကဏ္ဍအပေါ် လောင်းကြေး ထပ်ထားသည့် ခိုင်မာသော လက္ခဏာများလည်း ရှိနေသည်။
အခြားတဖက်တွင်လည်း အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်ရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် လှုပ်ရှားရာတွင် အရေးပါသော အခန်းမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကူးအပြောင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီး အကျိုးအမြတ်ကို ပြန်လည် မျှော်လင့်ထားသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံဖက်သို့ကြည့်မည်ဆိုလျှင် မြန်မာနှင့် အင်အားကြီးအိမ်နီးချင်း တရုတ်နိုင်ငံတို့၏ ဆက်ဆံရေးသည် ဖြောင့်ဖြူးခဲ့သည်မဟုတ်။
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးသည် ဝေးကွာသော နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးထက်များစွာ ပိုမိုသိမ်မွေ့ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တခါက ပြောခဲ့ဖူးသည်။
လက်ရှိအငြင်းပွားမှုမတိုင်မီက တရုတ်နိုင်ငံဖက်မှ သတိပေးခဲ့ဖူးသည်။ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အာဘော် Global Times သတင်းစာက ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်၏ NLD ပါတီ အာဏာရလာပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း ဆောင်းပါးတစောင်ကို ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ သေနင်္ဂဗျူဟာအကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ပိုမိုနီးကပ်သော ဆက်ဆံရေး ပြုလုပ်ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက် အကျိုးမရှိကြောင်း ရေးသားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရအတွက် ပေးလိုသော သတင်းစကားမှာ တရုတ်ကို လာမရှုပ်နဲ့ ဟူသော သတင်းစကားပင် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနှင့် တရုတ်-အိန္ဒိယ ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်အများအပြားကို ရေးသားခဲ့သော သတင်းစာဆရာ၊ စာရေးဆရာ ဘာတေးလ်လင့်တနာက မြန်မာနိုင်ငံတွင် မည်သူအာဏာရနေသည်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ပိုင်း ကြားနေဘက်မလိုက်သော မူဝါဒသည် အမြဲတစေ အုတ်မြစ်ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒေသတွင်း အားပြိုင်ဖက်နိုင်ငံကြီး နှစ်နိုင်ငံဖြစ်သော တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားတွင် ညပ်နေပြီး အရှေ့ဖက်တွင်လည်း ယခင်က အနောက်နိုင်ငံများ၏ မဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့သော ထိုင်းနိုင်ငံရှိနေသောကြောင့် ထိုအချက်သည် အံ့သြစရာမဟုတ်ကြောင်း သူပြောသည်။
ဘဲကင် ပြတင်းပေါက်မှ ပျံထွက်သွားခြင်း
အရပ်သားဖြစ်စေ စစ်ယူနီဖေါင်းဝတ်ဖြစ်စေ မြန်မာခေါင်းဆောင်များသည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတိထားကြရသည်။
ယခင်က တရုတ်နိုင်ငံကို အကြီးအကျယ် မှီခိုရခြင်းကြောင့် မြန်မာပြည်သူများအကြား မကျေမနပ်ဖြစ်ကြရသည်။ အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေအပါအဝင် စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်များသည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ခပ်ခွာခွာနေရန် စဉ်းစားပြီး တရုတ်အပေါ် အကြီးအကျယ် မှီခိုအားထားရခြင်းကို လျှော့ချရန် နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီး နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အများအပြားလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် မြန်မာ၏ မျှော်လင့်ချက်မှာ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရေးနှင့် အပစ်ပယ်ခံနိုင်ငံအဆင့်ကို ခွာချနိုင် ရေးဖြစ်သည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသော ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန် လက်အောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်အပါအဝင် အနောက်နိုင်ငံများအကြား ဆက်ဆံရေး တိုးတက်လာသည်။ မြန်မာ-အမေရိကန် ဆက်ဆံရေး တိုးတက်လာခြင်းကို မြန်မာပြည်သူများက ယေဘုယျအားဖြင့် သဘောကျပြီး အမေရိကန် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ ရုတ်သိမ်းသည်ကို ကြိုဆိုကြသည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် တံခါးဖွင့်လာခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုပြီး သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ နှစ်ကြိမ် လာရောက်လည်ပတ်သည်။ မြန်မာနှင့် အမေရိကန်အကြား ဆက်ဆံရေး အလျှင်အမြန် ကောင်းမွန်လာခြင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံကို အံ့သြ စိတ်ပျက်စေခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖြစ်ရပ်များသည် သေနင်္ဂဗျူဟာအရ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နေသည်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်လက်အောက်တွင် တရုတ်သြဇာ မြန်မာတွင် ကျဆင်းမှုကို မိမိတို့ မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။
ဦးသိန်းစိန် လက်အောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒသည် ဟန်ချက် ပြန်ချိန်ခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး၊ အနောက်နိုင်ငံများ အလိုကျ လုံးလုံးလျားလျား ချိန်ညှိခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် အကြီးအကျယ် ဆက်လက်မှီခိုနေရကြောင်း ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်မှ ကထိကနှင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သည့် စာအုပ် အများအပြားကို ရေးသားခဲ့တဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာအောင်မျိုးက ပြောသည်။
တရုတ်မူဝါဒရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူများက ထိုစဉ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကို “ချက်ထားသော ဘဲကင် ပြတင်းပေါက်မှ ပျံထွက်သွားခြင်း” ဆိုသည့် တရုတ်စကားပုံအဖြစ် ရည်ညွှန်းပြောဆိုကြောင်း ဝါရှင်တန်ရှိ စမစ်ဆွန် စင်တာမှ တရုတ်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ ယွန်ဆန်းက ပြောခဲ့သည်။
ထိုနောက်တွင်မူ တရုတ်နိုင်ငံသည် ထိုချက်ထားသော ဘဲကို ပြန်ဖမ်းပြီး အိုးထဲပြန်ထည့်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်ကို မိမိတို့ တွေ့မြင်ကြရသည်။
တနည်းအားဖြင့်ဆိုရပါက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခြေကုပ်ပြန်လည်ရယူရန် တရုတ်နိုင်ငံက အားထုတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာဏာရလာချိန်မှ စတင်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသည် တဖြည်းဖြည်း ထိုသို့လုပ်ဆောင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေးတွင် အပေါ်စီး ပြန်ရလာသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရသည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် သင့်မြတ်ရန် လုပ်ဆောင်နေရသောကြောင့် လက်ရှိ အစိုးရအောက်တွင်မူ ဟန်ချက်ပြန်ထိန်းသော မူဝါဒကို ဘေးချထားရသည်ဟု ဒေါက်တာအောင်မျိုး ယုံကြည်သည်။
ထို့အပြင် အစိုးရနှင့် တပ်မတော်ကြားတွင် မူဝါဒရေးရာညှိနှိုင်းမှု မရှိပေ။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအောက်တွင်မူ တပ်မတော်သည် အစိုးရ၏မူဝါဒအတိုင်း သွားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အခန်ကဏ္ဍတခုမှပါဝင်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အားထားနေသည်။ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကူညီရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်ကို ပြောခဲ့သည်။
သို့သော် စစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်များကမူ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်မှ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များကို တရုတ်နိုင်ငံက ကူညီအားပေးနေခြင်းနှင့် လက်နက်တပ်ဆင်ပေးနေခြင်းများအတွက် စိုးရိမ်မကင်းကြောင်း ဖေါ်ပြကြသည်။ ယခုအခါ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် တပ်ပျက်နေသည်။
မည်သို့ဆိုစေကာမူ တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရေးပါသော မဟာမိတ်ဖြစ်နေသည်။ ရိုဟင်ဂျာပြဿနာတွင် အစိုးရသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှ နိုင်ငံရေး သြဇာကို လိုအပ်နေသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်နှင့် အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံလုံးမှ အကွာအဝေးတူ ခပ်ခွာခွာနေနိုင်ပါမည်လော။ ပြဿနာမှာ ကြားနေ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒပဲ ခေါ်ခေါ် ဘက်မလိုက်မူဝါဒပဲ သုံးသုံး အရင်းအနှီးတခုတော့ ပေးဆပ်ရမည့် ကိစ္စတခုဖြစ်သည်။ အလကားတော့မရ။
အတိတ်သင်ခန်းစာများအရ ဆိုပါက တရုတ်နိုင်ငံသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း အပြည့်အ၀ ယုံကြည်ခြင်း မရှိပေ။ ယေဘူယျအားဖြင့်ဆိုပါက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်လည်း တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတိထားသည်ဟု နိုင်ငံရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်သူများ ယုံကြည်ကြသည်။
အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်မှုနှင့် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ တရုတ်စီမံကိန်းများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြီးထွားလာနေသော တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ဓါတ်ကို ကောင်းစွာ သတိထားမိသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရသည် ကျောက်ဖြူအထူး စီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်း သဘောတူညီချက်သစ်ကို အောင်မြင်စွာ ပြန်လည် ညှိနှိုင်းသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူရှိ မဒေးကျွန်း၌ တရုတ်ရေနံတင်သင်္ဘော ဆိုက်ကပ်ထားစဉ်/ဇော်ဇော်/ဧရာဝတီ
ထိုသဘောတူညီချက်အရ အကြွေးပိမည့် အန္တရာယ်မရှိတော့ကြောင်း အစိုးရအရာရှိများ ပြောသည်။ အာဏာရလာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အငြင်းပွားဖွယ် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထူးထူးခြားခြား နှုတ်ဆိတ်နေပြီး ထိုဆိုင်းငံ့ထားသော ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ပျားအုံကို တုတ်ဖြင့် မထိုးချင်တာကို နားလည်ပေးလို့ ရသည်။
ထို့အပြင် တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဇန်နဝါရီလက လာရောက်လည်ပတ်စဉ်ကလည်း အစိုးရနှစ်ရပ် အကြား လက်မှတ်ရေးထိုး သဘောတူထားသည့် ဒေါ်လာဘီလျံပေါင်းများစွာ ကုန်ကျမည့် တရုတ်-မြန်မာစီးပွားရေး စင်္ကြန်ကို အရှိန်မြှင့်တင်မည့် မည်သည့် ကြီးမားသော စီးပွားရေး သဘောတူညီချက်မျှ မရှိခဲ့ပေ။ လတ်တလောတွင် ဘေ့ဂျင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံက အဆိုပြုထားသည့် အဓိက စီးပွားရေး စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ တဖြည်းဖြည်း လုပ်ဆောင်ရေး နည်းလမ်းကို လိုက်နာနေရသည်။
အဓိက ကျသည့် အချက်တခုမှာ မြန်မာနိုင်ငံသည် အင်အားနည်းပြီး မတည်ငြိမ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုအချက်သည် တရုတ်နိုင်ငံက မြင်တွေ့လိုသော အချက်ပင်ဖြစ်နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမြင်၊ အနိုင်ကျင့်လိုသော သဘောထားနှင့် လက်နက်ကိုင်အင်အားစုများအပါအဝင် အုပ်စုအားလုံးကို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ၎င်း၏သြဇာအာဏာကို တိုးချဲ့ရန် အားထုတ်မှုများကို ပြောင်းလဲသွားအောင် များများစားစား လုပ်နိုင်စရာလည်း မရှိပေ။
ယနေ့ တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ၎င်း၏ သြဇာအာဏာကို ချဲ့ထွင်ထားသည်။ မြောက်ပိုင်းမှ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ၎င်း၏ သြဇာကို ဆက်လက်တိုးချဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များကို ဆက်လက်ထောက်ခံနေသည်။
တရုတ်နှင့် မြန်မာအရာရှိများသည် နှစ်နိုင်ငံ၏ “ဆွေမျိုးပေါက်ဖေါ်ဆက်ဆံရေး”ကို ဆယ်စုနှစ်များစွာ အစဉ်အလာအရ ချီးကျူးကြသော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ ထိုဆက်ဆံရေးသည် မြန်မာနိုင်ငံက အကိုကြီးဖြစ်သူ တရုတ်နိုင်ငံကို အကြောက်တရားဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော ဆက်ဆံရေးသာ ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံရေးရာများတွင် အတိတ်ကလည်း ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခဲ့သလို အနာဂတ်တွင် လည်း ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နေဦးမည်သာ ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အမေရိကန် ထွက်ခွာသွားရန် ပြောဆိုနိုင်ခြင်း မရှိသော်လည်း အနည်းဆုံးအနေဖြင့် တရုတ်နယ်စပ်သို့ အနောက်တိုင်း သြဇာ ပျံ့နှံ့လာသည်ကိုမူ ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပေ။ (မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေးအရ နှစ်ပိုင်းခြားပြောဆိုမည်ဆိုလျှင် ဂျပန်နှင့် အနောက်နိုင်ငံများသည် နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကို ယူမည်ဖြစ်သည်။)
“ဘေဂျင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကို ယူနန်ပြည်နယ်၏ ထွေးခံအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ဆုံးဖြတ်ထားပြီး စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြည်သူဗဟိုပြု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကို စိတ်ဝင်စားခြင်း မရှိပေ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော သုတေသီ ဒေးဗစ် မက်သီဆန်က ဝေဖန်သည်။
ထိုအချက် မှန်ကန်နေသည်။ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) မှလွဲပြီး မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်ရှိ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အိပ်ကပ်အတွင်း ရောက်နေကြပြီဖြစ်သည်။
၂၀၁၉ ဧပြီလအတွင်း တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် ပန်ဆန်းမြို့၌ ကျင်းပသော UWSA ၏ စစ်ရေးပြပွဲတွင် တွေ့ရသော တရုတ်ထုတ် လက်နက်များ/မျိုးမင်းစိုး/ဧရာဝတီ
“တရုတ်နိုင်ငံသံရုံး၏ တုံ့ပြန်မှုသည် ပြင်းထန်ပြီး တုန်လှုပ်စရာကောင်းသည်။ အမေရိကန်က ပြင်းထန်စွာ ပြောဆိုသောကြောင့် တရုတ်သံရုံးသည် ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ဖြစ်သွားသည်ဟု ထင်သည်။ ၎င်းတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူကြိုက် မများကြောင်း ၎င်းတို့သိကြသည်။”
“စစ်အေးတိုက်ပွဲသစ်တွင် အမှန်တကယ်ခံစားရမည့်သူများသည် မြောက်ပိုင်းမှ ပြည်သူများဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ကချင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကို လွှမ်းမိုးသင့်ကြောင်း ထုတ်ဖေါ်ထားပြီးဖြစ်ကာ ၎င်းတို့ သြဇာသက်ရောက်သော မည်သည့်နေရာအနီးတွင်မျှ အနောက်နိုင်ငံများကို အကပ်ခံလိုမည် မဟုတ်ပေ။”
“မြန်မာပြည်သူများအနေဖြင့် အမေရိကန်၏ ပြင်းထန်သော စကားများထက် ထိုအချက်ကို ပိုမိုစိုးရိမ်သင့်သည်”ဟု မက်သီဆင်က ဆက်လက်ဖေါ်ပြသည်။
ထိုသို့ဆိုလျှင် အမေရိကန်နိုင်ငံကို မည်သို့ စဉ်းစားမည်နည်း။ ထရမ့်လက်အောက်တွင် ရှိနေစဉ် အမေရိကန်နိုင်ငံကို မြန်မာက မည်သို့ ထိထိရောက်ရောက် တုံ့ပြန်နိုင်ပါမည်လား။
“အမေရိကန်နိုင်ငံက ဝေးကွာပြီး တရုတ်နိုင်ငံ စိတ်ပျက်မယ့် ကြေညာချက်ထုတ်တာထက် ပိုပြီး ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး” ဟု လင့်တနာ ပြောသည်။
“တရုတ်က မြန်မာပြည်တွင်းရေးမှာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဝင်စွက်လို့ ရတယ်။ စီးပွားရေးအရ၊ နိုင်ငံရေးအရ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း အများအပြားနဲ့ နီးကပ်တဲ့ ဆက်ဆံရေးအရ ဝင်စွက်လို့ရတယ်” ဟုလည်း ဆွီဒင် သတင်းစာဆရာနှင့် ဒေသအရေး ကျွမ်းကျင်သူ လင့်တနာ ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အခန်းကဏ္ဍကို သံသယရှိကြောင်း မက်သီဆင်ကလည်း ပြောသည်။
“အမေရိကန်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ သွေးစည်းချစ်ကြည်မှု ကတိတွေကို ယုံလို့မရဘူး။ အဓိကအချက်က အမေရိကန်ဟာ တဖြည်းဖြည်း အားနည်းလာပြီး ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းတဲ့ အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်နေပြီး ဝါရှင်တန်အတွက် အကျိုးရှိရင် မဟာမိတ် မိတ်ဆွေတွေကိုတောင် သစ္စာဖေါက်တဲ့ သမိုင်းကြောင်းလည်း ရှိနေတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ တိုးတက်မှုကို အခြေခံပြီး အမေရိကန်က မြန်မာနဲ့ နက်ရှိုင်းစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ ခေတ်ကုန်သွားပြီ” ဟု မက်သီဆင် ပြောသည်။
လက်တွေ့တွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်ဖက်မှ ခွာထွက်လာခြင်း မရှိသော်လည်း ဒေသတွင်းတွင် မိတ်ဆွေများ မဟာမိတ်များ ပိုမိုဖွဲ့စည်းလာကာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ သြဇာကို ချိန်ညှိရန်မျှော်လင့်လာသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဂျပန်၊ အိန္ဒိယ၊ တောင်ကိုရီးယားနှင့် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ဆက်လက်တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်သင့်သည်။
“လက်ရှိ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ မူမမှန်တဲ့ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအရ ဝါရှင်တန်ရဲ့ အာရှနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကတိကဝတ်ကိုလည်း သံသယ ရှိကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဒေသတွင်းနဲ့ ပြင်ပကမ္ဘာ ဆက်ဆံရေးကို ချိန်ညှိချင်ရင် ဒေသတွင်း အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ဂျပန်တို့၊ အိန္ဒိယတို့လို နိုင်ငံတွေနဲ့ ပိုမို နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ပြီး လုပ်တာ ပိုကောင်းမယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်” ဟု လင့်တနာ ပြောသည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာ့မြေတွင် တရုတ်နှင့် အမေရိကန်တို့၏ မကြာသေးမီက အငြင်းပွားမှုကို မိမိတို့ မည်သို့ ဖွင့်ဆိုသင့်သနည်း။ မြန်မာနိုင်ငံသည် မိတ်ဟောင်းနှင့် မိတ်သစ် ဆက်ဆံရေးများကို တပြိုင်နက် စီမံနိုင်ခြင်း မရှိဖြစ်နေသော လက္ခဏာဟု ယူဆနိုင်ပါသလား။ သို့မဟုတ် ဟန်ချက်ပြန်ညှိသော မူဝါဒ ကျဆုံးမှုဟု ဆိုနိုင်ပါသလား။ မည်သို့ဆိုစေကာမူ ထိုလက္ခဏာများသည် အတိတ်နိမိတ် မကောင်းလှပေ။
(Aung Zaw ၏ Sino-US War of Words in MyanmaraTest of Naypyitaw’s Allegiances ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
]]> ကိုဗစ်-၁၉ အလွန် မြန်မာကို ဘယ်လိုမြင်ချင်လဲ https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2020/06/14/224598.html Sun, 14 Jun 2020 07:44:17 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=224598
စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားရင်း ကူးစက်ရောဂါလွန် အနာဂတ်နိုင်ငံအတွက် ရည်မှန်းချက်တခု ချမှတ်ရန် လွန်စွာ လိုအပ်ပြီ။
The post ကိုဗစ်-၁၉ အလွန် မြန်မာကို ဘယ်လိုမြင်ချင်လဲ appeared first on ဧရာဝတီ.
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ အမြင်အားဖြင့်ဆိုရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကံကောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်ထိ နည်းပါးသော ကူးစက်မှု၊ သေဆုံးမှုများကိုသာ တွေရသေးသည်။ ၁၃-၆-၂၀၂၀ ရက်အထိ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၂၆၁ ခု၊ သေဆုံးမှု ၆ ခုနှင့် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူ ၁၆၇ ဦးရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ အဆိုအရ သိရသည်။ သို့သော် ထိုအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော မေးခွန်းတခုက စိန်ခေါ်နေသည်။ ထိုမေးခွန်းမှာ ကိုဗစ်အလွန်ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လည်ပုံသွင်းရန် မည်မျှကောင်းကောင်း ပြင်ဆင်ထားသနည်းဟူသော မေးခွန်းပင်ဖြစ်သည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ထိခိုက်ရသည့် စီးပွားရေး ပြန်လည်နာလန်ထရေးအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၅ ဘီလျှံ (ကျပ် ၄.၁၇ မှ ၄.၈၆ ထရီလျှံ) အထိ သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှု ဒေါ်လာ ၇၀ ဘီလျှံကျော်၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ သုံးရန် အစိုးရက ပြင်ဆင်ထားသည်။ ထိုသို့စီစဉ်ထားသည့် အသုံးစရိတ်သည် စီးပွားရေးပြန်လည်နာလန်ထရေး၊ လူမှုဖူလှုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက် ရည်ရွယ်သည်။
ရောဂါကူးစက်မှုကို ကိုင်တွယ်ရန် အခြားနိုင်ငံများ၏ လုပ်ဆောင်မှုများကို ကြည့်သောအခါ ရှေ့တွင် မသေချာ မရေရာမှုများကို တွေ့ရသော်လည်း ထိုစိန်ခေါ်မှုများသည် အခွင့်အလမ်းများကိုလည်း ပေးနေတာကတော့ အမှန်ပင်။ မြန်မာခေါင်းဆောင်များနှင့်နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ထိုစိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားပြီး ကူးစက်ရောဂါလွန် အနာဂတ်နိုင်ငံအတွက် ရည်မှန်းချက်တခု ချမှတ်ရန် လွန်စွာ လိုအပ်ပြီ ဖြစ်သည်။
ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါကာလအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပုံမှန် တယ်လီကွန်ဖရင့် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်းအား လူအများ ကြည့်ရှုစေရန် တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်ပြသသည်
ထိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့် ပတ်သက်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကျန်းမာရေးလုပ်သားများ၊ အစိုးရအရာရှိများ၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အပတ်စဉ် အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်များကလည်း တိုင်းရင်းသားဒေသများမှ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်ရေး ကိရိယာများအပါအဝင် ကိုဗစ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အကူအညီများပေးကာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ရေးကို အောက်ခြေတွင် ဆက်လက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ကတိပြုခဲ့ကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း တြိဂံဒေသတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တွင် ၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ် တပ်မတော် (MNDAA) ခေါင်းဆောင်များနှင့် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပါတ်က တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ပတ်သက်သည့် ကျန်းမာရေး ကိစ္စများကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် တပ်မတော်က ထိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကို ကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကတိပေးခဲ့သည်။
ခွဲစိတ်ခန်းသုံးနှာခေါင်းစည်းများ၊ N95 မျက်နှာဖုံးနှင့်မျက်နှာအကာအကွယ်များနှင့် လက်သန့်စင်ဆေးရည်များ မျှဝေခြင်းအပါအဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အကူအညီများကို တွေ့ရသည်မှာ အားတက်ဖွယ်ဖြစ်ရသည်မှာ အသေအချာပင်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံသားများက ဆင်းရဲသောမိသားစုများနှင့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားသူများအတွက် အစားအစာနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်များကို ရက်ရောစွာ လှူဒါန်းသည့် မြန်မာတို့၏ စရိုက်လက္ခဏာဖြင့် ပေးအပ်မျှဝေသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
သို့သော် မိမိတို့သည် အနာဂတ်ရင်ဆိုင်ရမည့် ရေရှည်တည်တံ့သော စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး လိုအပ်ချက် သို့မဟုတ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့် ဂေဟဗေဒစနစ် ထိခိုက်မှုများကို ကုစားရန် ကြိုးစား သင့်မသင့် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနှင့် အစိုးရအရာရှိများ ပြောဆိုသည်ကိုတော့ မကြားရသလောက်ပင်ဖြစ်နေသည်။
ကူးစက်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားပြီးနောက် တိရိစာ္ဆန်များမှ လူသို့အချို့သော ဗိုင်းရပ်စ်များကူးစက်သည့် နည်းလမ်း၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် တရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်ရှိ သားရိုင်းဈေးတခုမှ စတင်ဖြစ်ပွားသည်ဟူသည့် ခန့်မှန်းချက်များနှင့် လင်းနို့များနှင့်သင်းခွေချပ်များကို နိုင်ငံတကာသတင်းများတွင်အထင်အရှား သရုပ်ဖေါ်ထားသည်များကိုတော့ နေ့စဉ်နီးပါး မိမိတို့များစွာ ကြားသိဖတ်ရှုနေရသည်။
ပြင်းထန်သော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါ (SARS)၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါ (MERS) ၊ ကြက်ငှက်တုတ်ကွေး၊ ဝက်တုတ်ကွေး စသည်တို့ကို ဖြစ်ပွားစေသည့် ပြင်းထန်သော ဗိုင်းရပ်စ်များသည် တိရိစာ္ဆန်များမှ လူသားများသို့ကူးစက်ပြီး အသေအပျောက်များသော ကူးစက်မှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို သဘာဝတရားက လက်စားချေခြင်းဟု ဆိုကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ လူအများအပြားကလည်း ယုံကြည်ယူဆ ပြောဆိုကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကလည်း ဝခေါင်းဆောင်များကို ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ရေး ဆေးပစ္စည်းများ ပေးသည်
ထိုသို့ဆိုလျှင် မိမိတို့သည် သဘာဝတရားနှင့် မည်သို့သော ဆက်ဆံရေးမျိုး ထားရှိသင့်ပါသနည်း။
ကမ္ဘာ၏ ကျန်အစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့ပင် မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တရားအပေါ် လေးစားမှု အလွန်ပင် ကင်းမဲ့လှသည်။ လမ်းများအခြေခံအဆောက်အအုံများ ပိုမိုတည်ဆောက်ရန်၊ သတ္တုတွင်းများ ပိုမိုတူးဖေါ်ရန်၊ စက်ရုံများ ပိုမိုတည်ဆောက်ရန်နှင့် လယ်မြေများ ပိုမိုဖေါ်ထုတ်ရန် မိမိတို့သည် သဘာ၀၀န်းကျင်များကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြသောကြောင့် ပိုမိုပြင်းထန်သော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ မိမိတို့ထံရောက်လာသည်ကို လက်ငင်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ သဘာဝသစ်တောများကို ရှင်းလင်းခြင်းဖြင့် မိမိတို့သည် သဘာ၀တောရိုင်းတိရိစာ္ဆန်များ ကျင်လည်ကျက်စားသည့် နေရာများကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့ကို မိမိတို့နှင့် ပိုမိုနီးကပ်လာစေကာ တိရိစာ္ဆန်များမှ လူသားများသို့ ရောဂါကူးစက်မှု အခွင့်အလမ်းကို ပိုမိုဖြစ်နိုင်စေခဲ့သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ဆယ်စုနှစ် သုံး ခုအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် သစ်တောပြုန်းတီးမှု၊ သတ္တုတူးဖေါ်ခြင်းနှင့်ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန် မြင့်မြင့်မားမားနှင့် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တော့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဆင်းရဲသော နိုင်ငံတနိုင်ငံတော့မဟုတ်ပေ။ မိမိတို့သည် ကျောက်မျက်များ၊ ကျောက်စိမ်းများ၊ ပတ္တမြားများ၊ ရွှေ၊ တွင်းထွက်များ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့်နက်ရှိုင်းသော သစ်တောများ ကြွယ်ဝသည့် နိုင်ငံတခုဖြစ်သည်။
သို့သော် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများကို မည်သူတို့ ထိန်းချုပ်ထားသနည်း
Economist Intelligence Unit’s ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်များတွင် တွင်းထွက်ပစ္စည်းနှင့် ၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်သည့် ပို့ကုန်များ အများဆုံးပါဝင်ပြီး ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း သိရသည်။ ထိုပို့ကုန်များတွင် အဓိကအားဖြင့် ကျောက်စိမ်းနှင့် ပတ္တမြားကဲ့သို့သော အဖိုးတန်ကျောက်မျက်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး သတ္တုတွင်းထွက်များ ပါဝင်ကြသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
“အစိုးရ၏ တွက်ချက်မှုများအရ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ကျောက်စိမ်းများ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ထုတ်လုပ်ပြီး ပတ္တမြားထုတ်လုပ်မှုမှာ ကမ္ဘာတွင် စတုတ္ထအများဆုံးဖြစ်သည်။ ထိုကျောက်မျက်များ၏ အများစုကို လက်ဝတ်ရတနာ ထုတ်လုပ်ရန် ဒေသတွင်း ဈေးကွက်များသို့ တင်ပို့ကြပြီး အများအားဖြင့် မှောင်ခိုနည်းလမ်းဖြင့်တင်ပို့ကြသည်။ သမိုင်းကြောင်းအရ ဆိုရပါက ထိုသို့လုပ်ခြင်းကြောင့် ကျောက်မျက်ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့် ကွင်းဆက်တွင်ပါဝင်သည့် စစ်ဖက်အရာရှိများအကြား အဂတိလိုက်စားမှုကို ဖြစ်စေသည်။ အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း တခုဖြစ်သည့် Global Witness ၏အဆိုအရ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်းထုတ်ကုန်၏ ထက်ဝက်နီးပါးနှင့် ညီမျှသည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၁ ဘီလျံတန်ဖိုးရှိသော ကျောက်စိမ်းများကို စစ်ဖက်ထိပ်တန်းအရာရှိများက ထိန်းချုပ်ခဲ့သည်” ဟု ထိုအစီရင်ခံစာက ဆက်လက်ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
အရှိအတိုင်းပြောရလျှင် လက်တဆုပ်စာမျှသော တကိုယ်ကောင်းဆန်သော မသမာ ဝိသမလောဘသမားများသည် သဘာ၀ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အဓမ္မပြုကျင့်ပြီးနောက်ပိုင်း လွန်စွာ ချမ်းသာကြွယ်ဝလာခဲ့ကြသည်။ ထို ယူနီဖောင်းဝတ် ထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်များ၊ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ လောဘကြီးသော စီးပွားရေးသမားများသည် စိမ်းလန်းသော သစ်တောများကို မြေလှန်၊ အဖိုးတန်ကျောက်မျက်များကို တူးဖေါ်ပြီး မြစ်များကို ခမ်းခြောက် ညစ်ညမ်းစေသကဲ့သို့ ကြီးမားသော ရေကာတာများတည်ဆောက်ရေး သစ်တောကြီးများကို ရှင်းလင်းရန် ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့ကြတော့သည်။
နိုင်ငံ၏ ကြီးမားလှသော သတ္တုမိုင်းများ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနှင့်သစ်တောများမှ နိုင်ငံအတွက် အကျိုးပြုမှုသည် ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသည်။ သဘာဝသယံဇာတများကို စီမံခန့်ခွံမှု အလွန်ကို လွဲမှားခဲ့သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကို ထိခိုက်စေမည်ကို သံသယဖြစ်ရန်မလိုပေ။
ထိုသို့သော မှားယွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အသုံးချအမြတ်ထုတ်မှုက ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုသော Climate Change ကို ပိုမိုဆိုးရွားစေခဲ့သည်။ ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နေသော ဂေဟဗေဒ စနစ်များနှင့် သန့်ရှင်းသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သည် နိုင်ငံ၏ လူမှု၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုများကို တည်ဆောက်ရမည့် အခြေခံဖြစ်ကြောင်းကို အစိုးရက စာရွက်ပေါ်တွင် အသိအမှတ်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အနာဂတ် မူဝါဒများနှင့် စီမံကိန်းများအားလုံး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ စဉ်းစားသုံးသပ်မှုများ စနစ်တကျ ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ရေရှည်တည်တံခိုင်မြဲမှု အယူအဆကို ထည့်သွင်းထားသည့် အမျိုးသားတိုးတက်ရေးမူဘောင်လည်း ရှိနေသည်။ သို့သော် လက်တွေ့မှာ အခြေခံကျသော ပြဿနာအများအပြားကို မဖြေရှင်းသေးဘဲ ရှိနေသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖားကန့်တွင် မြေပြိုပြီး လူအများအပြားသေဆုံးခဲ့ရာ စက်ယန္တရားများ သုံးပြီး အလောင်းရှာဖွေစဉ်
ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂကို ရည်ညွှန်းကိုးကားခြင်းအတွက် နားလည်မှုပေးစေလိုသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်း၏ ကြေညာချက်များသည် အမြဲမဟုတ်ရင်တောင်မှ အခါအားလျှော်စွာ မှန်ကန်နေတတ်သည်။ “ မြန်မာနိုင်ငံသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏ သက်ရောက်မှုများအရ ကမ္ဘာတွင်ထိခိုက်လွယ်ဆုံးသော နိုင်ငံများအနက် တနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ပိုမိုပြင်းထန်များပြားသော ရေလွှမ်းမိုးမှုများ၊ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းများနှင့် မိုးခေါင်ရေရှားမှုများသည် အသက်ဆုံးရှုံးမှု အကြီးအကျယ်ဖြစ်စေပြီး အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် စီးပွားရေးကို ထိခိုက်စေကာ နိုင်ငံ၏ ကျော်ကြားလှသော ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကွဲစုံလင်မှုနှင့် သဘာဝသယံဇာတများအပေါ် ပိုမို ဖိအားပေးလာသည်” ဟု ကုလသမဂ္ဂက အစီရင်ခံစာက ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
မိမိတို့အနေဖြင့် ကမ္ဘာတဝှမ်းကူးစက်ရောဂါကို စမ်းတဝါးဝါး ရင်ဆိုင်နေရချိန်တွင် နိုင်ငံတဝှမ်းတွင် အထင်အရှား မြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်သော ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုပြဿနာကိုလည်း ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏ အကျိုးဆက်များကြောင့် ပြင်းထန်သော ရေလွှမ်းမိုးမှုများ၊ ဆိုးရွားသည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်းများနှင့် အခြား သဘာ၀ဘေးအန္တရာယ်များကို မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ပိုမိုမြင်တွေ့လာခဲ့ရသည်။
လွန်ခဲ့သော ရက်များအတွင်း ဧရာဝတီ သတင်းဌာနနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတခုတွင် သမိုင်းဆရာ ဦးသန့်မြင့်ဦးက “ကျနော်တို့ဟာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရဲ့ ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလည်း ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ ဒီ ကူးစက်ရောဂါက နောက်ထပ် မရေရာမှု တခု ထပ်မံ လွှမ်းခြုံလိုက်တယ်။ ကမ္ဘာကြီးမှာ ပြောင်းလဲနေတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ပြီး အနာဂတ်အတွက် ရွေးချယ်စရာကို အခြေအမြစ်ကျကျ ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်” ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လက်ရှိကူးစက်ရောဂါနှင့် စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းမှ ပြန်လည်နာလန်ထရန် စီစဉ်နေချိန်တွင် နိုင်ငံအတွက် ရည်မှန်းချက်မှာ အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးပြီး ပိုမိုတန်းတူညီမှုနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကို ပေးနိုင်သည့်ရေရှည်တည်တံ့သော စီးပွားရေးတိုးတက်မှုသာ ဖြစ်သင့်သည်။
မြန်မာ၏ အခြေခံအဆောက်အအုံ ပရောဂျက်များနှင့် အခြား မဟာစီမံကိန်းကြီးများသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု အခြေအနေနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်သင့်သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို မိမိတို့၏ မိတ်ဆွေကောင်းနှင့် မိသားစုဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းသည် ပထမဦးစွာ စတင် ချမှတ်ကျင့်သုံးရမည့် သဘောထားဖြစ်သည်။
မိမိတို့တွင် ဒီကပ်ရောဂါကြောင့် အနာဂတ်ကို ပြန်ပြီးပုံဖော်စိတ်ကူးနိုင်သလို Reset ဟုခေါ်သော အသစ်လဲ ပြန်စနိုင်ခွင့်ရှိနေပါသည်။ အမြင်ကျယ်သော Vision ရှိသော ခေါင်းဆောင်များကလည်း ဒီလို အနာဂတ်လမ်းကြောင်းကို ပြန်လည်ချမှတ်ရန် အခွင့်အလမ်းအား လက်လွှတ်ခံမည် မဟုတ်ဟု ယုံကြည်ယူဆမိပါသည်။
( Aung Zaw ၏ What Do We WantaPost-Pandemic Myanmar to Look Like? ကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
]]> ရခိုင်ပဋိပက္ခ မည်သည့်ရှုထောင့်ကမဆို အခြေအနေ ပိုဆိုးရွားနေ https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2020/06/07/224172.html Sun, 07 Jun 2020 09:33:12 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=224172
ရခိုင်ပဋိပက္ခသည် အရှိန်အဟုန် ဆက်လက်မြင့်မားနေသောကြောင့် တိုက်ပွဲများ ပိုမို ပြင်းထန်ရန်သာ ရှိမည်ကို စိုးရိမ်နေရသည်။
The post ရခိုင်ပဋိပက္ခ မည်သည့်ရှုထောင့်ကမဆို အခြေအနေ ပိုဆိုးရွားနေ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ရောဂါနှင့် ဝါဒဖြန့်ချိရေး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှည်လျားသော သမိုင်းရှိသည် https://burma.irrawaddy.com/opinion/viewpoint/2020/05/10/222304.html Sun, 10 May 2020 05:43:32 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=222304
ဓာတ်ပုံများသည် လွဲမှားသော ကောက်ချက်ချမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း သုတေသီများက ပြောသည်။
The post ရောဂါနှင့် ဝါဒဖြန့်ချိရေး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှည်လျားသော သမိုင်းရှိသည် appeared first on ဧရာဝတီ.
မြန်မာနှင့် ကူးစက်ရောဂါများသည် တစိမ်းတရံမဟုတ်ပါ။ ကိုဗစ်-၁၉ သည် အစိုးရအတွက်သာမက ပြည်သူလူထုအတွက်လည်း ပြင်းထန်သော စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ ထိုအတွေးနှင့်အတူ “ငါတို့ ဒီကူးစက်ရောဂါကို ကျော်လွှားနိုင်ရမယ်” ဟု မိမိကိုယ်မိမိ ပြောမိသည်။ ကျနော့်အနေဖြင့် အစိုးရ၏ သတင်းစာများ သက်သက်ကိုသာ ဖတ်နေပါက ထိုကူးစက်ရောဂါနှင့် တိုက်ပွဲတွင် မိမိတို့သည် အောင်ပွဲနှင့် လက်တကမ်း အကွာတွင် ရောက်နေပြီဟု အလွယ်တကူ ယုံကြည်မည်သာ ဖြစ်သည်။
ရောဂါကူးစက်မှု အတည်ပြုလူနာများ မှန်မှန်များလာခြင်းနှင့်အတူ ထိုဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ပတ်သက်သည့် လူထုအသိ နိုးကြားမှုနှင့် စူးစမ်းလိုစိတ်လည်း မြင့်မားလာသည်။ တရုတ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဥရောပတွင်ကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အကြီးအကျယ်မဖြစ်စေရန် ဆုတောင်းနေသူလည်း အများအပြား ရှိနေခဲ့သည်။
“ဥရောပနဲ့အမေရိကမှာလို ကူးစက်မှုတွေ ကျနော်တို့ဆီမှာ အကြီးအကျယ်ဖြစ်လာရင် အားလုံးသေကုန်မှာပဲ” ဟု မိတ်ဆွေတဦးကပြောသည်။ ထိုသို့ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သည့် ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုမျိုးကို မြန်မာနိုင်ငံမှ လူအများအပြား လက်ခံကြသည်။
အစိုးရသတင်းစာများ ဝါဒဖြန့်ချိမှုများနှင့် လူမှုကွန်ရက်မှ သတင်းတုများသည် မိမိတို့ကို နေ့စဉ် မည်မျှ ဖိအားပေးနေစေကာမူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာနှင့် အဆောက်အအုံများသည် အမှန်တကယ်ပင် စိန်ခေါ်မှု ပြဿနာတရပ် ဖြစ်နေသည်။ အချို့က ပို၍ စိုးရိမ်လာကြပြီး “ငါတို့သေကုန်တော့မှာလား” ဟူသည့် မေးသင့်မေးထိုက်သော မေးခွန်းကို မေးကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ လူအများအပြားသည် ညစဉ် အိပ်ရာမဝင်မီ လဲလျောင်းလိုက်သောအခါ ထိုမေးခွန်းကို ၎င်းတို့ကိုယ်၎င်းတို့ မေးခဲ့ကြသည်။
ထို့ကြောင့် ကျနော်တို့၏ မြန်မာနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ ဟောင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံသည် ၎င်းတို့ နိုင်ငံသားများကို မြန်မာနိုင်ငံမှ အမြန်ဆုံးထွက်ခွာရန် တိုက်တွန်းခဲ့ခြင်းသည် ဆင်ခြင်တုံတရား ပြည့်၀သော ဆုံးဖြတ်ချက် လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု ကျနော်ထင်မိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်တွင်း ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာနှင့် အဆောက်အအုံများသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် မလုံမလောက် ဖြစ်ခံရနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာမည့် လေကြောင်းခရီးစဉ်များကို ဖျက်သိမ်းမည့် အန္တရာယ်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားအားလုံး မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာရန် ရန်ကုန်ရှိ ဗြိတိန်သံရုံးက အကြံပြုသည့် သတင်းကို မတ်လက မိမိတို့ဖတ်ခဲ့ရသည်။
“ကမ္ဘာတဝန်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများနှင့် အဆောက်အအုံများကို ကြီးမားသော ဖိအားပေးမည်ဟု မျှော်လင့်ရပြီး ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်စောင့်ရှောက်မှုကို ပေးရန် မဖြစ်နိုင်လောက်ပေ” ဗြိတိန်သံရုံးက ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ထိုအချက်သည် အခြေအမြစ်ရှိသည့် ပူပန်မှုဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်သံရုံး၏ ကြေညာချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အချို့အာရှ သံတမန်များက ကြိတ်ပြီး ပြုံးနေကြသော်လည်း ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ အကြံအစည်သည် မှန်နေပုံရတော့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောဂါကူးစက်မှု အကြီအကျယ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အရေးပေါ်လေကြောင်းလိုင်းများ မရရှိနိုင်ပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆေးဝါးကိရိယာ မပြည့်စုံသော လူနာဆောင်များတွင် သို့မဟုတ် Quarantine Centre များတွင် သွားလာမှု ကန့်သတ်ခံရမည်ကို မည်သူမျှ လိုလားမည်မဟုတ်ပေ။ (သို့သော် မျှမျှတတပြောရပါက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာများကို ထားရန် ထူထောင်ထားသော အချို့အဆောင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အခြားအဆောင်များနှင့် ဧည့်ဂေဟာများထက် များစွာ ကောင်းမွန်လှသည်ကိုတော့ တွေ့ရသည်။)
အနောက်တိုင်း သံတမန်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့ မိခင်နိုင်ငံ၊ ဇာတိမြို့များ အထူးသဖြင့် လန်ဒန်၊ နယူးယောက်၊ ပါရီနှင့် အီတလီမြောက်ပိုင်းသို့ ပြန်သွားသည်ထက် ပိုမိုလုံခြုံနိုင်ဖွယ်ရှိသော အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မတူဘဲ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားခြင်းသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျှော်သည်။
တလွဲတချော်ဖြစ်နေသော ပြုံးစရာလေး တချက်ကတော့ ဗြိတိသျှတို့ကိုယ်တိုင်သည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ကူးစက်ရောဂါများနှင့် တစိမ်းတရံ မဟုတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံကို ၎င်းတို့အုပ်ချုပ်စဉ်က ကာကွယ်ဆေးများထိုးခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေး၊ အာဟာရနှင့် ကျန်းမာရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးသည်။
၎င်းတို့ရောက်ရှိလာချိန်တွင် ဗြိတိသျှတို့သည် ထိုစဉ်က ဘားမား (Burma) ဟု လူသိများသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် သေဆုံးမှုနှုန်း မြင့်မားသည်ကို သတိထားမိကြသည်။ ထို့ကြောင့် သေချာသည်မှာ ဗြိတိသျှတို့သည် တခါတရံမှာတော့ လက်မခံနိုင် အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်သည့် ထိရောက်သော ကာကွယ်ဆေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးမူဝါဒများကို အခက်အခဲများကြားမှ လုပ်ဆောင်ခဲ့မည်ဖြစ်သည်ဟု ဂျုဒစ် ရစ်ချယ် Judith Richell ၏ ကိုလိုခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှ ရောဂါနှင့် လူမှုအခြေအနေအပြောင်းအလဲများ Disease and Demography in Colonial Burma စာအုပ်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
သို့သော် အနောက်တိုင်းဆေးများနှင့် ကာကွယ်ဆေးများကို စတင်အသုံးမပြုနိုင်မီ မြန်မာနိုင်ငံ “လွတ်မြောက်ရေး” အတွက် သိမ်းယူခဲ့သူများသည် ၎င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးကို ဆန့်ကျင်သူများအား နှိမ်နင်းရန် ဆယ်စုနှစ်တခုမျှ အချိန်ယူခဲ့ကြရသည်။ ထိုအချိန်သည် ကုန်းဘောင်မင်းဆက်အောက်မှ ရှေးရိုးစဉ်လာ မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြည်ပအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် အားမတန်မာန်လျှော့ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်း ပြိုကွဲရသော အချိန်လည်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုရမည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေတ်အဆက်ဆက် ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမြတ်သည့် မဏ္ဍိုင်အင်အားစုများဖြစ်သော သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာနှင့် မြို့သူကြီးများကို ကိုလိုနီအာဏာဖြင့် အစားထိုးခဲ့ကြသည်။
၁၉၀၆ ခုနှစ် ပလိပ်ရောဂါကူးစက်နေသော မန္တလေးရှိ အိမ်တအိမ်အား ပိုးသတ်ဆေးဖြန်းစဉ်/ Wellcome Collection
ရှေ့ဆက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များကို အများအသိပင်ဖြစ်သည်။ မင်းမဲ့ဝါဒ စိုးမိုးလာသည်။ ဖရိုဖရဲဖြစ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းလုံးတွင် ဗြိတိသျှတပ်များသည် “ဓါးပြ” ဆိုသူများ၏ နောက်သို့လိုက်ပြီး နိုင်ငံခြားနယ်ချဲ့ ကျူးကျော်မှုကို လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်သူများကို ဖိနှိပ်ကာ အလုပ်များနေကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ထိုကာလအတွင်း ဗြိတိသျှတို့ထံမှ အများအပြားကို လေ့လာမိခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့် မိမိအားဆန့်ကျင်သူများကို မည်ကဲ့သို့ စနစ်တကျ ခေါင်းဖြတ်ရမည်နှင့် အမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားလှသော “ဖြတ်လေးဖြတ်” ဟု ခေါ်သည့် သူပုန်နှိမ်နင်းရေး သေနင်္ဂဗျူဟာကို လေ့လာမိခဲ့ကြသည်။ (မြန်မာ့တပ်မတော်သည် “ဖြတ်လေးဖြတ်” ကို ယနေ့တိုင် ဆက်လက်အသုံးပြုနေပြီး သက်ဆိုးအရှည်ဆုံး ကိုလိုနီအမွေအနှစ် ဖြစ်သည်။)
ထိုပုန်ကန်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ကိုလိုနီအာဏာပိုင်များသည် ရန်သူသစ်ဖြစ်သော ကူးစက်ရောဂါကို အောင်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ကြရတော့သည်။ စီမံကိန်းများ ဆွဲရတော့သည်။
၁၉ ရာစုနှင့် ၂၀ ရာစု အစောပိုင်းကာလများတွင် ပလိပ်၊ ကာလဝမ်းရောဂါ၊ တီဘီအဆုပ်ရောဂါ၊ ကျောက်ရောဂါနှင့် တုပ်ကွေးရောဂါများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဓိက အသေအပျောက်များသော ရောဂါများ ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၁၈ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားသည့် စပိန်တုပ်ကွေးဟု ခေါ်သည့် ကမ္ဘာတဝှမ်း ကူးစက်ရောဂါဘေးမှလည်း လွတ်မြောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ ရစ်ချယ်၏ အဆိုအရ ထိုစဉ်က လူဦးရေ ၁၂ သန်းမှ ၁၃ သန်းသာရှိသောနိုင်ငံတွင် လူ ၄ သိန်းသေဆုံးစေသော ထိုရောဂါကို ကိုင်တွယ်ရန် ဗြိတိသျှတို့ဘက်မှ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု မရှိသလောက်ပင် ဖြစ်သည်။
အကျိုးဆက်မှာ ဆိုးရွားလှပြီး မြို့ပြတွင် နေထိုင်သူများဖြစ်သည့် အိန္ဒိယစစ်သားများနှင့် တောနေရွာသူ ရွာသားများကို ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးပြီး ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေကာ တိုင်းပြည်ကို ချိနဲ့သွားစေသည်။
ထိုရောဂါမတိုင်မီ ၁၉၀၅-၀၆ တွင်ဖြစ်ပွားသည့် ပလိပ်ရောဂါကြောင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူအများအပြား သေဆုံးခဲ့သေးသည်။ ရောဂါကူးစက်ခံနေရပြီးဖြစ်သည့် အိန္ဒိယမှ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ တဆင့် ထိုရောဂါသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်လာသည်ဟု အများကယူဆကြသည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်ရသောကြောင့် ကိုလိုနီအစိုးရသည် ပလိပ်ကောင်စီ တခုကို ထူထောင်ပြီး အိန္ဒိယမှ ဝင်ရောက်အခြေချသူများ အပါအဝင် အများပြည်သူကို စစ်ဆေးစောင့်ကြည်သောလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ပေးအပ်သည်။
ကာလကတ္တားမှ ဝင်ရောက်လာသော သင်္ဘောများကို ဆေးဖက်ဆိုင်ရာအရာရှိများက စစ်ဆေးကြပြီး ဆယ်ရက်ကြာ သွားလာမှုကန့်သတ်စောင့်ကြည့် Quarantine လုပ်ကြောင်း ရစ်ချယ်က သူ၏ ကိုလိုနီခေတ်မြန်မာနိုင်ငံ ရောဂါနှင့် လူမှုအခြေအနေပြောင်းလဲမှု စာအုပ်တွင် ရေးသားသည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါရှိသော ပထမတန်းနှင့် ဒုတိယတန်း ခရီးသည်များကို ဆယ်ရက်ကြာ သွားလာမှုကန့်သတ်စောင့်ကြည့်သည်။ ပလိပ် ကမ္ဘာတဝှမ်းကူးစက်ရောဂါ ကြီးထွားလာသောအခါ ဗြိတိသျှ အုပ်ချုပ်ရေးအောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလုံးအရင်းနှင့် ဝင်ရောက်လာကြသော အိန္ဒိယသားများသည် ရောဂါပျံ့နှံ့မှုအတွက် မကြာခဏဆိုသလို အပြစ်တင်ခံရပြီး ဓားစာခံ ဖြစ်ကြရသည်။
နိုင်ငံအတွင်း ခရီးသွားလာသူများ ပလိပ်ခရီးသွားလက်မှက်ကို ကိုင်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ လူအများအပြားသည် ရောဂါအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားသော မြို့များမှ ထွက်ပြေးကြပြီး ကိုလိုနီအာဏာပိုင်များသည် ကြီးမားသော ဘေးကင်းရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းရေးအစီအစဉ်များနှင့် ပြင်းထန်သော ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်ရေးမူဝါဒများကို ချမှတ်ခဲ့ရသည်။
ရိုးရာဆေးပညာနှင့်သာ အကျွမ်းတဝင်ရှိသော ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ဆေးဆရာများကို ခရိုင်အရာရှိများထံ သွားရောက်ခိုင်းကာ ဗြိတိန်ဆေးပညာကို လက်ခံစေခဲ့သည်။ အရာရှိများ၏ မိသားစုဝင်များနှင့် ဇနီးများသည် ဒေသခံပြည်သူများ ကာကွယ်ဆေးကို ယုံကြည်လက်ခံလာစေရေး ရှေ့ဆုံးမှ ပါဝင်စေခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
ရန်ကုန်အခြေစိုက် ဓါတ်ပုံဆရာများဖြစ်သော Criouleansky နှင့် Marshall တို့ ၁၉၀၅-၀၆ ကရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံများသည် အထက်မြန်မာနိုင်ငံ မန္တလေးမြို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော နေရာတခုတွင် ကိုလိုနီအရာရှိများက ပလိပ်ရောဂါကို ပိုင်နိုင်စွာ ထိန်းချုပ်နေသည်ကို ပြနေပြီး ထိုဓာတ်ပုံများကို ၁၉၀၆ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ထုတ်ဝေသည့် The Graphic က ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
သို့သော် ထိုဓာတ်ပုံများသည် လွဲမှားသော ကောက်ချက်ချမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ထိုခေတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး လေ့လာသော သုတေသီများက ပြောသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်က ထုတ်ဝေသည့် ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ် ဓာတ်ပုံပညာနှင့်ပတ်သက်သော ဆောင်းပါးတပုဒ်တွင် မြန်မာ့သမိုင်းပညာရှင် Jonathan Saha ဂျိုနသန်ဆာဟာက “ပလိပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး အစီအစဉ်များသည် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာကောင်းပြီး အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ကာ တကယ်တော့ ထိရောက်မှု မရှိပေ။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံကို ဗြိတိသျှတို့ သိမ်းပိုက်ထားသော အိန္ဒိယ အင်ပါယာအတွင်း သွတ်သွင်းပြီး ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးကွန်ရက်အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းခဲ့ခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပလိပ်ရောဂါ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်” ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
“ထိုအစောပိုင်းက ပုံများတွင် မြန်မာနိုင်ငံကို အာဏာရှင် ပဒေသရာဇ်ထံမှ လွတ်မြောက်စေခဲ့သည့်ပုံမျိုး ကနဦးတွင် ပုံဖေါ်ခဲ့ကြပြီး နောင်တွင် ဗြိတိသျှတို့ကို ခုခံသည့် ပျောက်ကြားလှုပ်ရှားမှုများ ပြင်းထန်လာသောအခါ အကြမ်းဖက် နိမ့်ကျသော ဓါးပြများလက်တွင် ခံစားနေရသော နိုင်ငံအဖြစ် သရုပ်ဖေါ်သည်” ဟု သူ ဆက်လက်ဝေဖန် ရေးသားခဲ့သည်။
“နောင်နှစ် ၂၀ ကြာသောအခါ အကြမ်းဖက်ပြီး တန်ဖိုးများစွာ ပေးဆပ်ရသော ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေး ထူထောင်ခြင်းသည် ပေးဆပ်ရကျိုးနပ်သည်ဟု The Graphic ၏ စာဖတ်ပရိသတ်များကို ဖေါ်ပြရန် ကျရှုံး ကုန်းဘောင်မင်းဆက်၏ အချက်အခြာနေရာများတွင် ရိုက်ကူးထားသော ပလိပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး အစီအမံများနှင့် ပတ်သက်သည့် ထိုဓာတ်ပုံများကို အသုံးချရေး ရည်ရွယ်ခဲ့သည်ကို သံသယဖြစ်စရာ မလိုပေ။ စစ်အတွင်းကပုံများသည် နယ်ချဲ့စနစ် တခုလိုအပ်ကြောင်း သရုပ်ဖေါ်လျှင် ထိုပလိပ်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်သောပုံများက ထူထောင်ထားသော စနစ်သစ်သည် အောင်မြင်စွာ လည်ပတ်နေကြောင်း သရုပ်ဖေါ်ထားသည်” ဟု ထိုသမိုင်းပညာရှင်က စူးရှစွာ ထောက်ပြခဲ့သည်။
ထိုအတိုင်းမှန်သည်ဆိုလျင် ကျနော်တို့သည်လည်း ယခုကဲ့သို့ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါနှင့် ရင်ဆိုင်ရပြီး တိုက်ဖျက်ရန်ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် ထိုကဲ့သို့သောစနစ်တခု ချမှတ် အသုံးပြုနိုင်သည်မှာ သေချာသည်။ သို့သော် ကံမကောင်း အကြောင်းမလှစွာပင် ဗြိတိသျှတို့ မတ်လတွင် ပြန်သွားခဲ့ကြသည်။
ပြည်သူလူထုသည် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းအောင် လုပ်ဆောင်ပေးနေသူများ လက်တွင် ရောက်ရှိနေပြီဟူသည့် မျှော်လင့်ချက်နှင့် ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရောဂါတိုက်ဖျက်ရန် လုပ်ကိုင်နေသော ဗြိတိသျှ အရာရှိများ၏ ဓါတ်ပုံများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် သုံးသည်ဟုပင် ဆာဟာက ဆက်လက်ရေးသားခဲ့သည်။ သူ တင်ပြသည့်အတိုင်းဆိုပါက ၎င်းတို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ “ကမ္ဘာတဝှမ်းကူးစက်သော ပလိပ်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျှော် စနစ်ကျသည့် အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားရှိခဲ့သည်” ဟူသော အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်စေသည်ဟုလည်း သူ ရေးသားခဲ့သည်။
ရစ်ချယ်၏ ကိုလိုနီခေတ်မြန်မာနိုင်ငံ လူမှုအခြေအနေပြောင်းလဲမှုကို ကိုးကားပြီး ဆာဟာက “၁၉၀၆ ခုနှစ်က ထိုကိုလိုနီဒေသတွင် ပလိပ်ရောဂါကြောင့် လူ ၉၀၀၀ နီးပါးသေဆုံးသည်။ လက်တွေ့တွင် ဒေသခံများသည် နယ်ချဲ့အစိုးရ၏ အတင်းအကျပ် လုပ်ဆောင်သော ပလိပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒများမှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရောဂါခံစားရသူများကို ဝှက်ထားရန် ကြိုးစားကြသောကြောင့် အမှန်တကယ် သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ ထိုထက်ပင် ပိုနိုင်သေးသည်။ ပလိပ်ရောဂါ ကူးစက်မှုများကို တွေ့ရှိသောအခါ ကူးစက်ခံရသူ၏ အဝတ်များကို မီးရှို့ပစ်ကြပြီး ရောဂါကူးစက်ခံရသူ၏ မိသားစုများကို အခြားသူများနှင့် ခွဲထားကာ ၎င်းတို့၏နေအိမ်များကို ဓါတုဗေဒနည်းဖြင့် ပိုးသတ်ကြသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ကြီမားသော ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်သော်လည်း ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကို ထိန်းချုပ်ရာတွင်မူ ထိရောက်ခြင်း မရှိ” ဟု သူဆက်လက်ဝေဖန် ရေးသားသည်။
ထိုသို့သောအချက်များကို ဖတ်ရသည်မှာ ကျနော့်အတွက်တော့ စိတ်ဖိစီးစရာ ကောင်းလှသည်။ ထို့ကြောင့် ဤနေရာမှာရပ်ပြီး ကိုလိုနီခေတ်သည် အပြုသဘောဆောင်သော အမွေအနှစ် တစုံတခု ပေးခဲ့ခြင်း ရှိမရှိ မိမိဘာသာမေးခွန်းထုတ်မိသည်။
တချက် သမ်းဝေရင်း နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာ The Global New Light of Myanmar ကို ကောက်ကိုင်လိုက်လာ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် သတင်းကို ရှာမိသည်။ ယနေ့ခေတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများကို ဖတ်ရခြင်းသည် ယခင်စစ်အစိုးရခေတ်များက နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများကို ဖတ်ရခြင်းကဲ့သို့ပင် ထူးထူးခြားခြား ကွဲပြားခြားနားခြင်း မရှိလှသော်လည်း ထိုအကျင့်ကို သစ္စာရှိစွာ ကျနော် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါသည်။
သွားလာမှု ပိတ်ပင်ထားခံရပြီး နေအိမ်မှ အလုပ်လုပ်နေရသောကြောင့် မိမိကဲ့သို့ပင် စာဖတ်သူလည်း ပိုမိုမျှော်လင့်ချက် ရှိမည့် သတင်းများကို ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေမည်ကို မိမိသေချာပေါက်သိနေသည်။ “လာမည့်အပတ်တွင် ဘားဆိုင်များသို့ ပြန်လည်သွားရောက်ခွင့်ပြုမည်” ဟူသည့် သတင်းခေါင်းစဉ်မျိုး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
The Global New Light of Myanmar သတင်းစာတွင် မရည်ရွယ်ဘဲ မိမိ ဖတ်မိသောခေါင်းစဉ်မှာ “နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် COVID-19 ကာလတွင် စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ အလုပ်သမားများ၏ အရေးကိစ္စများနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသူများနှင့် လက်တွေ့အခြေအနေများအား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး” ဟု ဖြစ်သည်။ ခေါင်းတချက်ညှိတ်လိုက်ပြီး ဆက်ဖတ်သောအခါ ဗိုင်းရပ်စ်အခြေအနေသည် ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် အနေအထားအောက်တွင် ရှိသည့်သဘော ဖေါ်ပြသည့် သတင်းများကြောင့် စိတ်သက်သာရာ ရရှိခဲ့သည်။
အခြားသတင်းခေါင်းစဉ်များနှင့် ဓါတ်ပုံများသည် နောက်ထပ် မျှော်လင့်ချက်များကိုပင် ပေးသည်။ “ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် တရုတြ်ပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံက အသက်ရှူစက် အလုံး ၂၀ လှူဒါန်း” ဟု တွေ့ရသည်။ ဓါတ်ပုံတပုံတွင် တရုတ်သံအမတ်ကြီးနှင့် မြန်မာအရာရှိများသည် ချစ်ကြည်ရေးအထိမ်းအမှတ် စာတမ်းကိုကိုင်ကာ နေပူကျဲကျဲတွင် ရပ်ပြီးကိုင်ထားကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
ထိုဓါတ်ပုံမှ အရာရှိများသည် နှာခေါင်းစည်းများ ဝတ်ဆင်ထားသော်လည်း Social Distancing ခပ်ခွာခွာနေထိုင်ခြင်းမပြုပဲ အုပ်စုလိုက် ပူးပူးကပ်ကပ်ဖြစ်နေသည်ကို မိမိ သတိမထားမိဘဲ မနေနိုင်အောင်ဖြစ်ရသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ မိမိတို့ နှစ်နိုင်ငံအကြား သွေစည်းညီညွတ်မှုနှင့် အဓွန့်ရှည်သော ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ပြသခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရုတ်တရက် တောင်တွေးမြောက်တွေး ယူဆမိတော့သည်။
အမှန်ဆိုရလျှင် ထိုသတင်းစာများတွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မိမိတို့ကို အကူအညီများ – ပိုမိုများပြားသည့် နှာခေါင်းစီးများ၊ ပိုမိုများပြားသည့် စမ်းသပ်ရေး ပစ္စည်းများနှင့် ပိုမိုများပြားသည့် ဤအရာ ထိုအရာများ – ပေးသည့် သတင်းများ ထင်ထင်ရှားရှား ပါဝင်ပြည့်နှက်နေသည်။ ထို့အပြင် သတင်းများသည် နှစ်ခွလည်း ဖြစ်နေသည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလခန့်ကပင် တပ်မတော်သည် ကိုဗစ်-၁၉ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ကာကွယ်ရေး ဝတ်စုံများကို လှူဒါန်းလိုက်သေးသည်။ ယခုအပတ်တွင်မူ တရုတ်နိုင်ငံသည် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနှင့် ရင်းနှီး ချစ်ကြည်မှုကို ဖေါ်ပြသည့် အနေဖြင့် ပါကစ္စတန်၊ လာအိုနှင့် မြန်မာအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်းများစွာသို့ စစ်ဖက်ဆေးဝါးပညာရှင်အဖွဲ့များကို စေလွှတ်နေသည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ဂလိုဘယ်တိုင်းမ် Global Times သတင်းစာ၏ အဆိုအရ သိရသည်။ “ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (PLA) ဆေးဖက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် အတွေ့အကြုံအရှိဆုံး အင်အားစုများဖြစ်သည်” ဟု ပင် ထိုသတင်းစာက ဆိုလိုက်သေးသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ နှင့်ပတ်သက်သည့် နောက်ဆုံးသတင်းများကို ဖလှယ်ရန် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့သည် အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်း ဖွင့်ထားသည်ဟုပင် မိမိ၏ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များက တိုးတိုးတမျိုး သဖန်းပိုးလုပ် ပြောကြသည်။ အထူးလျှို့ဝှက်သော ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အစီအမံမှာ နေ့စဉ်ရေနွေးသောက်ပြီး ပလုပ်ကျင်းရန်ဖြစ်ကြောင်း မိမိ၏မိတ်ဆွေ သတင်းသမားက နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်ချက်ကို ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားနေသည့် ပုံစံမျိုးဖြင့် ဖုန်းမှတဆင့် အသံကို နှိမ့်ပြီးပြောသည်။ “ဒီအကြံပြုချက်က တရုတ်နိုင်ငံက ဝါရင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဆီက လာတာ” ဟုလည်း သူပြောသည်။ သြော် … သြော် …။
ခြုံကြည့်မည်ဆိုပါက ၁၉၀၀ ခုနှစ်များအစောပိုင်း ဗြိတိသျှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပလိပ်ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်က ရိုက်ကူးထားသည့် ဓါတ်ပုံများနှင့် ယခုတလော နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာမှ ဓါတ်ပုံများသည် သမိုင်းထိုးဇာတ်တခုကို ပြသနေသည်။ ယခုတကြိမ်တွင်မူ ဗြိတိသျှတို့သည့် အခွင့်ကောင်းတခုကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရသည်ဟု သံသယဖြင့် မိမိ သရော်တွေး တွေးမိသည်။
သတင်းစာကို ချထားလိုက်ပြီး လန်ဒန်မှ နောက်ဆုံးသတင်းများရရန် အင်တာနက်ကို ဖွင့်လိုက်သည်။ “ဗြိတိန်နိုင်ငံ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အကျပ်အတည်းအတွင်း တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစရာ ပျက်ကွက်မှုများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် တောင်းဆိုမှုများကို ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် ရင်ဆိုင်နေရ” ဟူသောသတင်းခေါင်းစဉ်က မိမိကို ကြိုဆိုနေသည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ၂၁၀၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး သေဆုံးမှုနှုန်း ၃၁၅၀၀ ကျော်ဖြင့် ဥရောပတွင် သေဆုံးမှုနှုန်း အများဆုံး ဖြစ်နေပေပြီ။
ကိုယ်တိုင်လည်း မကြာသေးမီကမှ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ဆေးရုံတက်ခဲ့ရသည့် သနားစရာကောင်းသော ဘောရစ် ဂျွန်ဆင်သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ရာတွင် ခေါင်းဆောင်မှု ပြသရန် ပျက်ကွက်သောကြောင့် အကြီးအကျယ် ဝေဖန်ခံနေရသည်။
“အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးရုံများတွင် ကိရိယာ တန်ဆာပလာ မရှိခြင်း နှင့် သေဆုံးမှု အချက်အလက် တစိတ်တပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အပြည့်အဝရှင်းပြရန် ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အကျပ်အတည်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သူ၏ အစိုးရ ကိုင်တွယ်ပုံကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် တောင်းဆိုမှုများကို ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် ရင်ဆိုင်နေရသည်” ဟု ထိုသတင်းဆောင်းပါးကဖေါ်ပြသည်။
ကျန်းမာရေး အကျပ်အတည်း တခုကို မည်သို့ကိုင်တွယ်မည်ကိုသာမက မည်သို့အသုံးချရမည်ကို ဗြိတိသျှတို့က မိမိတို့အားသင်ကြားပေးခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ထိုဆောင်းပါးကိုဖတ်ရင်း မိမိတွေးမိသည်။ ယခု တကြိမ်တွင်မူ ဗြိတိန်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ များစွာလေ့လာသင်ယူရမည့် အခြေအနေမျိုး ဖြစ်နေတော့သည်ဟု ကျနော် အတွေးခေါင်မိတော့သည်။
(အောင်ဇော်သည် ဧရာဝတီသတင်းဌာနကို တည်ထောင်သူ၊ အယ်ဒီတာချုပ် ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ Back to the Future: In Myanmar, Disease and Propaganda HaveaLong History အား ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)